မခြောသုံးယောကျလိုအငျ – My Blog
ဇျောရဲသညျ ရနျကုနျမှာမှေးသော ရနျကုနျသားတယောကျ၊ ရနျကုနျကနေ အဝေးသငျနှငျ့ ဘှဲ့ရထားသူ။ ရုပျဖွောငျ့ဖွောငျ့၊ ဗလတောငျ့တောငျ့။ အသားကခပျလတျလတျ၊ ရညျးစားရယျလို့ အတညျတကမြထားဘဲ မိနျးကလေးတှနေဲ့ ထညျလဲတှဲတတျသညျ။ ဒါပမေယျ့ မိနျးကလေးနုနုရှရှလေးတှကေိုတော့ အနမျးလေးတှပေေးရုံshopping ထှကျရငျတှဲကောငျးရုံမြှသာနတေတျပွီး၊ ခပျကဲကဲတှနှေငျ့ဆိုလြှငျတော့ သူကလညျး ကဲပေးလိုကျသညျ။ သူ့မိဘတှကေ အဖကေ ဌာနတခုက ညှနျမှူးတယောကျ အမကေ ဗိုလျခြုပျဈေးတှငျ ရတနာကုနျသညျတယောကျ။ တဦးတညျးသောသား ဥစ်စာပေါ ရုပျခြောဆိုတော့ အကောငျကွီးကွီးသမီးတှကေအစ လကျထပျဖို့ ကမျးလှမျးသညျကိုတောငျ ခံရသူ။ သို့သျော အိမျထောငျကသြှားလြှငျ ဆုံးရှုံးသှားမညျ့ လူပြိုအခှငျ့အရေးတှကေို သူကောငျးကောငျးသိသညျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမကေိုပူဆာ၊ အဖပေ့ါဝါကိုသုံးပွီး ပနျးဆိုးတနျးလမျးပျေါမှာ လြှပျစဈပစ်စညျးဆိုငျအကွီးကွီးတခုကို သူဖှငျ့လိုကျသညျ။ သူဆိုငျဖှငျ့ပွီး ၃ လလောကျအတှငျး ဆိုငျနာမညျက တရှိနျထိုးတကျလာသညျ။ သူ့ရဲ့ပွောဆိုတတျမှု၊ သူ့ရုပျရညျကွောငျ့ အမြိုးသားဖောကျသညျတှထေကျ အမြိုးသမီးဖောကျသညျတှကေ ပိုမြားလာသညျ။
ဘေးဆိုငျမြား၏ မနာလိုခွငျးကိုလညျး ပိုခံရလာသညျ။ သို့သျော သူ့အလုပျသူမှနျမှနျလုပျခွငျးကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြအားလညျး သိပျဂရုမစိုကျဖွဈခဲ့။ အလုပျမအားသျောလညျး တရုတျတနျးတှငျရှိသညျ့ weight club အားလညျး မပကျြတမျး မှနျမှနျသှားဖွဈခဲ့သညျ။ လေးလလောကျအတှငျးတှငျ ဖောကျသညျတျောတျောမြားမြားကို မှတျမိလာခဲ့ပွီး၊ ထိုအထဲမှ ( ) တပျမှ ဗိုလျမှူးကတျောတယောကျဖွဈသညျ့ ဒျေါခြိုသူဇာမွငျ့ကိုလညျး ကောငျးကောငျးရငျးနှီးလာခဲ့သညျ။ ဒျေါခြိုသူဇာမွငျ့မှာ အမြိုးသားရှိသညျ့တပျသို့ စနတေနင်ျဂနှမှေသာပွနျနိုငျပွီး တက်ကသိုလျဆရာမအဖွဈတာဝနျထမျးဆောငျရငျး ပါရဂူစာမေးပှဲဖွရေနျ ကွိုးစားနသေူဖွဈသညျ။ အသားဖွူဖွူ လုံးကွီးပေါကျလှ ဒျေါခြိုသူဇာမွငျ့ဈေးဝယျလာခြိနျတှငျ အားလုံးသော ယောကျြားမိနျးမမကနျြ ငေးမောကွရသညျ။ ထိုအထဲတှငျ ဇျောရဲတယောကျလညျး အပါအဝငျဖွဈသညျ။ လှပသော အသားစိုငျမြားပျေါတှငျ ပိုးသားလို ပြော့အိသညျ့ အဝတျမြိုးကိုမှ ရှေးခယျြဝတျဆငျတတျသညျ့ ဒျေါခြိုသူဇာမွငျ့ကို ဇျောရဲတယောကျ အိပျမကျတှငျ ထညျ့မကျဖွဈသညျ့အကွိမျတှရှေိနတေတျပွီ။
သူ့ကိုယျသူ မမခြိုဟု နာမျစားသုံးပွီးပွောတတျသညျ့ မမခြိုကလညျး ဇျောရဲဆိုငျကိုမှပဲ ဆိုငျထငျနသေညျလားမသိ။ လအေေးပေးစကျမှအစ လြှပျစဈမီးပူအဆုံး သူ့ဆိုငျကိုပဲအားပေးခဲ့သညျလေ။ ဇျောရဲကလညျး ဇျောရဲပပေဲ။ လကျမ ၄၀ လောကျရှိမညျ့ တငျသားအိအိထှားထှားကွီးတှေ၊ ၃၆ လကျမထကျမလြော့သညျ့ ရငျသားနှဈမှာ၊ ခါးကဉျြကဉျြကလေး။ လမျးလြှောကျတိုငျး ဖငျလုံးကွီးတှကေို စညျးခကျြကကြ လှပအောငျလြှောကျတတျသညျ့ မမခြို ဈေးဝယျလာတိုငျး ဆိုငျပိုငျရှငျကွီးကိုယျတိုငျ ဧညျ့ခံဖွဈခဲ့သညျ။ `မောငျလေးဇျောရဲရေ … ဒီတခေါကျ မမတို့ ကြောငျးပိတျရကျ ခြောငျးသာသှားမယျ၊ မောငျလေးလိုကျမလား `ကောငျးသားပဲမမ၊ နဦေး ကြှနျတျော ဆိုငျကို ကြှနျတေျာ့မနျနဂြောနဲ့ထားလို့ဖွဈမဖွဈ ကြှနျတျောခြိနျကွညျ့လိုကျဦးမယျ` `မောငျလေးလိုကျဖွဈရငျတော့ သိပျကောငျးမှပဲကှယျ အိမျကအမြိုးသားကလညျး တာဝနျနဲ့ဆိုတော့ မမကို လိုကျပို့နိုငျတာမဟုတျဘူး။
လူလညျးသိပျမမြားတော့ အဖျောအဖွဈလိုကျစခေငျြတယျ။` `ဟုတျကဲ့မမခြို၊ ကြှနျတျောညနလေောကျ အကွောငျးပွနျရငျဖွဈမလား။ ကြှနျတေျာ့မနျနဂြောကို တာဝနျပေးထားခငျြလို့` `ရတယျမောငျလေး၊ မနကျဖွနျမှ မမသူငယျခငျြးတှလေညျး လိုကျမလိုကျသိရမှာ` ဇျောရဲရငျထဲမှာတော့ ဗုံးတှအေဆတရာမက ပေါကျကှဲနပွေီလားမသိ၊ အခုမှ ရညျးစားထားဖူးတဲ့သူလို ရငျတှဘောတှခေုနျနပွေနျသညျ။
ဒီလိုနဲ့ ဇျောရဲတယောကျ ဆိုငျကို မနျနဂြောကောငျးမွငျ့နဲ့ တာဝနျလှဲပေး၊ မမခြိုဆီဖုနျးဆကျအကွောငျးပွနျ၊ အဝတျအစားတှပွေငျဆငျနဲ့ ခြောငျးသာအပနျးဖွခေရီးကိုထှကျဖို့ စီစဉျလိုကျခဲ့သညျပေါ့။ မနကျစောစော သူ့အိမျရှကေို့ Pradoကားအနကျရောငျတစီးလာဆိုကျသညျ။ သူ့အထုပျအပိုးတှေ ကငျမရာတှနေဲ့ ကားပျေါတကျလိုကျတော့ အမြိုးသားဆိုလို့ သူ့တယောကျထဲ။ `လာမောငျလေး၊ လှိုငျသာယာအထိတော့ မမမောငျးမယျ။ မနကျစာစားပွီးရငျ မောငျလေးက ခြောငျးသာအထိမောငျးပေး၊ အဆငျပွလေား` `ဟုတျကဲ့မမခြို` ဆိုငျရောကျတဲ့အထိ မမခြိုကလှဲလို့ နောကျခနျးမှာထိုငျလာတဲ့ မမ ၂ ယောကျနဲ့ အသိမဖွဈသေး၊ မမခြိုနဲ့ စကားပွောရငျး လမျးမှာရိုကျဖို့ သူကငျမရာကို စဈဆေးရငျး လိုကျပါလာခဲ့သညျ။ ဆိုငျထဲရောကျသညျနှငျ့ စားပှဲဝိုငျးမှ လူတှအေားလုံးအကွညျ့က သူ့တို့လေးယောကျဆီကို ရောကျရှိလာခဲ့သညျ။
ကွညျ့ခငျြကွပမေပေါ့။ သူက မငျးသားလိုအပြံစား၊ မမခြိုက နဲ့ သူ့သူငယျခငျြး ၂ယောကျကလညျး မမခြိုလိုပဲ ခပျတောငျ့တောငျ့ အသားညိုစိမျ့စိမျ့နဲ့ မမက မမခြိုထကျတောငျ ဖငျကွီးက ပိုကွီးသေးသညျ။ `ကဲ၊ သူငယျခငျြးတို့နဲ့ မောငျလေးကို မိတျဆကျပေးရဦးမယျ` `ဒါက မမသူငယျခငျြးတှေ သူက ခငျသီတာမြိုး` အသားညိုစိမျ့စိမျ့ ဖငျကွီးကွီး မမကွီးကို လကျဆှဲနှုတျဆကျလိုကျပွီး `တှရေ့တာ ဝမျးသာပါတယျမမ၊ ကြှနျတျောဇျောရဲပါ` `ခြိုကပွောလို့ မောငျလေးအကွောငျးကွားဖူးနတော။ မမလညျးဝမျးသာပါတယျ` `ဒါက ဇာခွညျဝငျး` ထုံးစံအတိုငျး လကျဆှဲနှုတျဆကျလိုကျသညျ။ ဒီမမကတော့ မမခြိုထကျ ဖငျနညျးနညျးသေးသညျ။ ၃၈ လကျမလောကျတော့ရှိမညျ။ အသားဝငျးဝငျးနှငျ့။ `သီတာက ( ) ဌာနက ဦးစီးအရာရှိလေ။ သူ့အမြိုးသားက တရုတျပွညျကို သငျတနျးသှားနတေယျ။ ဇာခွညျကတော့ သူနဲ့ယူမယျ့ တပျကအရာရှိက ဗထူးမှာ သငျတနျးမပွီးသေးဘူး။ မမတော့ ကြောငျးပိတျရကျအားတယျ။ သူတို့ကတော့ ခှငျ့ တပတျစီယူလာကွတယျ။
မောငျလေးရော အားရဲ့လား` `ဟုတျကဲ့ အားပါတယျမမ၊ ကြှနျတျော ခြောငျးသာကနေ ကြှနျတေျာ့မနျနဂြောကို လှမျးပွီး အလုပျကိစ်စတှေ ညှနျကွားလို့ရပါတယျ` `ကောငျးသားပဲ၊ ကဲ စားပွီးရငျ မမတို့ သှားကွရအောငျ` ဒီတခေါကျ ဆိုငျကအထှကျတှငျတော့ မမက သူ့လကျကိုတှဲလိုကျသညျကို သတိထားမိလိုကျသညျ။ ဆိုငျကလူတှကေတော့ ထုံးစံအတိုငျး နတျပွညျကကလြာသညျ့ နတျသမီးနတျသားတှအေလား ငေးမောကနျြခဲ့သညျ။ လမျးဘေးကရှုမြှျောခငျးတှဖွေတျသနျးရငျး ကားကိုဂရုတစိုကျမောငျးပွီး ခြောငျးသာခရီးကို ပြျောရှငျစှာလာခဲ့မိသညျ။ ခြောငျးသာကိုရောကျတော့ နလေ့ညျ ၂ နာရီထိုးပွီ။ ဟိုတယျကို မမခြိုက လှမျးပွီး ဘှတျကငျလုပျထားသဖွငျ့ ဧညျ့ခနျးတှငျ သော့ယူပွီး သကျဆိုငျရာ ဘနျဂလိုလေးမြားဆီသို့ လြှောကျလှမျးခဲ့ကွသညျ။ ၂ ယောကျခနျး ၂ ခနျးပဲ ယူထားသညျကို သူတှလေိုကျရပွီး အညှိုခံထားရသူတယောကျလို ကငျမရာကိုလှယျရငျး မမခြိုနောကျမှပါလာခဲ့သညျ။
သူ့နောကျမှာ အထုပျအပိုးတှနှေငျ့ ဟိုတယျဝနျထမျးမြားသာရှိတော့သညျ။ သူလညျး မမခြိုတို့တငျသားကွီးတှကေိုကွညျ့ရငျး အခနျးဝရှသေို့ ရောကျလာခဲ့သညျ။ အခနျးယူထားပုံက မမခြိုနှငျ့ သူနှငျ့က တခနျး၊ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျနှငျ့ကတခနျး၊ အခနျး ၂ ခနျးလုံးက ဘနျဂလိုလေးတခုထဲတှငျရှိသညျ။ မမခြို၏ ပိရိသသေပျခွငျးကတော့ သူရငျခုနျခြိနျပငျမရတော့။ `ကဲမောငျလေး အေးအေးဆေးဆေးနားပတေော့၊ တလမျးလုံးကားမောငျးလာရတာ။ ပွီးမှ ပငျလယျရစေိမျရအောငျ` `မမတို့နဲ့လာရတာပြျောလား` `ဟုတျကဲ့မမ၊ ကြှနျတျောအရမျးပြျောပါတယျ` `ကဲမမတော့ ရခြေိုးမယျ။ မောငျလေးရော ခြိုးတော့မလား` `မမအရငျခြိုးလေ၊ ကြှနျတျောပွီးမှခြိုးမယျ` `လုပျမနပေါနဲ့ မမနဲ့ အတူတူခြိုးလိုကျရအောငျ၊ အခြိနျကုနျသကျသာတာပေါ့။ ပွီးရငျတခုခုသှားစားကွမယျလေ` ဟုပွောရငျး မမခြိုက သူ့ဆံနှယျမြား ထုံးဖှဲ့ထားသညျကို ဖွလေိုကျသညျ။
ပိုးပြော့ထမီကို ခြှတျခလြိုကျခြိနျတှငျတော့ ဇျောရဲတယောကျ မကျြလုံးမြားပငျပွူးကယျြသှားရသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော မမခြို၏ တငျသားထှားထှားကွီးမြားပျေါတှငျ အောကျခံဘောငျးဘီသေးသေးတခုသာလြှငျ မနိုငျနငျးသောတာဝနျကို ထမျးဆောငျလြှကျရှိနသေောကွောငျ့ဖွဈသညျ။ အပျေါအကငြ်္ီလေးကို ထပျမံခြှတျလိုကျပွီး ဘရာစီယာလေးနှငျ့ အောကျခံဘောငျးဘီလေးသာကနျြခြိနျတှငျတော့ ဇျောရဲတယောကျ အာစေးထညျ့ထားသူလို ဘာမြှမပွောနိုငျတော့ခြေ။ `လာလမေောငျလေးရဲ့ ဘာငေးနတောလဲ၊ မိနျးမတှကေို မမွငျဘူးလို့လား` `မဟုတျ မဟုတျပါဘူးမမ၊ မမလောကျလှတာကိုတခါမှ မမွငျဘူးလို့ပါ` `အမယျ မွှောကျနပွေနျပွီ အခငျြးခငျြးတှကေို၊ ကဲ မငျးလညျး အဝတျအစားတှေ ခြှတျတော့လေ` ` …. …. ဟုတျ ဟုတျကဲ့` သူပွောပွီးခြိနျတှငျတော့ အတှငျးခံသေးသေးလေးမြားက မနိုငျတာဝနျမြားကိုထမျးဆောငျရငျး မမခြို သူ့အနားသို့ ရောကျရှိလာခဲ့ပါပွီ။
သူ ရှပျအကငြ်္ီကိုဖွညျးဖွညျးခငျြးခြှတျနခြေိနျမှာ မမခြိုက သူ့ဘောငျးဘီဇဈတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ဆှဲနတောကို သတိထားလိုကျမိသညျ။ ဘောငျးဘီတငျးနတောကိုတော့ သူကောငျးကောငျးသိနပေါသညျ။ အဘယျ့ကွောငျ့ဆိုသျော သူ့ဖှားဖကျတျောကွီးက မမခြိုကို တောငျ့တလာနပွေီလေ။ ဇဈဖွုတျပွီး ဘောငျးဘီကိုဆှဲခလြိုကျခြိနျမှာ သူ့အပျေါပိုငျးတှငျလညျး ဘာမှ မရှိတော့ အောကျခံဘောငျးဘီသာကနျြခဲ့ပွီး အောကျခံဘောငျးဘီမှာ ဖောငျးကားနသေညျကို မမခြိုသတိထားမိသှားပါသညျ။ သူမ၏ ဖောငျးဖောငျးပွညျ့ပွညျ့ လကျအစုံက သူ့ပေါငျကွားဆီသို့ အောကျခံဘောငျးဘီကိုခြှတျခရြနျ ရှလြေ့ားလာခဲ့သညျ။
သူ့ပေါငျကွားထဲသို့ လကျကလေးမြားရောကျရှိလာခြိနျတှငျတော့ `အားပါးပါး နညျးတာကွီးမှ မဟုတျတာမောငျလေးရယျ၊ ဒါကွီးနဲ့သာဆို ဆှမြေိုးတော့ မသှေ့ားတော့မှာပဲ` ဟုတျပါသညျ၊ ဇျောရဲတယောကျ ဗလတောငျ့ အရပျမွငျ့သလို သူ့ လီးကွီးကလညျး ၉ လကျမခှဲရှိပါသညျ။ ဗမာတယောကျအနနှေငျ့တော့ စူပါစံခြိနျမီသူတယောကျပေါ့။ မမခြိုကတော့ ယောကျြားရှိပမေယျ့ ဒါမြိုးကို ကွုံဖူးသဟေနျမတူပါ။ `မမခြို ယောကျြားကရော ကြှနျတေျာ့လိုပဲလား။ အတူတူပဲမဟုတျလား` ဇျောရဲတယောကျ သိသိကွီးနှငျ့ မေးခှနျးထုတျလိုကျသညျ။ `ဘယျကလာ သေးသေးလေးရယျ။ ဒါပမေယျ့ စဈသားမို့လားမသိဘူး ဆကျဆံတာတအားကွမျးတယျ။ ပွီးတော့ ခဏလေးနဲ့ ပွီးသှားတယျ။ ကဲပါ ဘောငျးဘီခြှတျလိုကျပါဦး` သူဘောငျးဘီခြှတျပွီးခြိနျတှငျတော့ မမခြို အရငျကထကျမကျြလုံးမြားပွူးကယျြသှားပွီး သူ့လကျညှိုးလေးကို ပါးစပျထဲကိုကျကာ ထိတျလနျ့သညျ့အမူအယာမြား ဖွဈပျေါလာခဲ့ပါတော့သညျ။
မမခြို လနျ့မညျဆိုလညျး လနျ့လောကျသညျဟုထငျပါသညျ။ သူ၏ ကွီးမားတုတျခိုငျလှသော လီးကွီးက မာနျဖီနသေော မွှတေကောငျပမာ ထောငျမတျလို့နသေညျ။ မမခြို အတနျကွာသညျအထိ မကိုငျဝံ့သေးဘဲ ကွကျသသေနေသေညျ။ ဇျောရဲကိုဦးဆောငျမညျဟု ထငျရသူက အခုတော့ ယုနျသူငယျလေးပမာ၊ ကွီးမားသော တငျသားအိအိကွီးတှကေိုမှ အားမနာနိုငျဘဲ ငွိမျသကျနပွေနျသညျ။ `လာပါ မမခြိုရဲ သူက လိမ်မာပါတယျ။ မမခြို နောကျပွီးကရြငျ သူနဲ့ ဘျောဒါဖွဈသှားမှာပါ` `မငျးလေးကတော့ အပွောသိပျကောငျးတယျ။ မမကတော့ ရငျတုနျနပွေီ။ မမယောကျြားနဲ့တောငျ သူက ကွမျးတာတခုပဲတတျတာ။ သူ့ပစ်စညျးက ရငျခုနျစရာမကောငျးဘူး။ အခု မငျးဟာကွီးကတော့ မမအပွတျခုနျနပွေီ` မမခြိုပွောအပွီးတှငျ မမခြို၏ နောကျကြောသားနုနုလေးမြားကို သူ့၏ကွီးမားသနျမာသော လကျကွီးမြားဖွငျ့ သိုငျးဖကျလိုကျပွီး မမခြို၏ ဖူးငုံနသေော နှငျးဆီရောငျနှုတျခမျးလှာ ၂ ခပျြအား ညငျသာစှာ သူ၏နှုတျခမျးမြားဖွငျ့ စုပျယူလိုကျသညျ။ မမခြို၏ ခါးကဉျြကဉျြလေးမှတဆငျ့ မမခြို၏ကွီးမားလှပသော နို့အုံကွီးမြားအား ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပှတျခပြေေးနမေိသညျ။
မမခြိုထံမှ ညညျးသံတခြို့ထှကျပျေါလာခြိနျတှငျတော့ မကမျြးကနြေပွေီဖွဈသညျ့ ဇျောရဲတယောကျ မမခြို၏ ဘရာစီယာကလေးအား ဖွုတျပွီးဖွဈနပေါတော့သညျ။ ထို့နောကျ လကျကို တဖွညျးဖွညျးခငျြးအောကျသို့ ရှလြေ့ားလာခဲ့ပွီး မမခြို၏ ကွီးမားစှငျ့ကားလှသော တငျသားစိုငျကွီးမြားအား ဆုပျနယျပွနျပါသညျ။ မမခြို၏ မကျြတောငျကော့မြား မှေးစငျးလာနပွေီဖွဈပါသညျ။ ပငျပနျး၍၊ အိပျခငျြ၍ မဟုတျသညျကိုတော့ ဇျောရဲတယောကျ သခြောစှာသိနပေါသညျ။ မမခြို၏ တငျသားကွီးမြားပျေါတှငျ မနိုငျဝနျထမျးဆောငျနရေသော ဘောငျးဘီလေးအား ဘေးနားမှ ခညျြထားသော ကွိုးစလေးအားဆှဲဖွေ၍ အနားပေးလိုကျပါသညျ။ လကျကို တငျသားစိုငျမြားမှတဆငျ့ ကာမ၏ အဖူးအညှနျ့မြား ဆုံစညျးရာနရောဆီသို့ လကျလှမျးခြိနျတှငျတော့ `အိုး မောငျလေးရယျ၊ ရငျထဲမှာတမြိုးကွီးပဲကှယျ၊ မမ ရငျတှအေရမျးခုနျနတေယျ` ဟူသော ရှိုကျသံပါသညျ့ စကားသံကို ဇျောရဲကွားလိုကျရပါသညျ။ ထို့နောကျ မမခြိုကိုပှပွေီ့း မှယေ့ာပျေါသို့ တငျလိုကျပါသညျ။ မမခြို၏ ကွီးမားလှသော နို့အုံကွီးမြားပျေါမှ နို့သီးခေါငျးနီနီရဲရဲလေးမြားကို လြှာဖွငျ့ ပှတျသပျစုပျယူရငျး အောကျပိုငျးဆီသို့ ဇျောရဲ ရှလြေ့ားလာခဲ့ပါသညျ။
မမခြိုကတော့ အိပျယာခငျးစမြားကို လကျဖွငျ့ မလှတျတမျးဆုပျကိုငျရငျး ရငျခုနျသံမြား မွနျနခေဲ့ပါပွီ။ ဇျောရဲတယောကျ မမခြို၏ ပေါငျကွားအနီးသို့ လြှာဖြားရောကျရှိခြိနျတှငျတော့ … `မလုပျပါနဲ့မောငျလေးရယျ မမ ငရဲတှကွေီးကုနျပါ့မယျ` ဇျောရဲတယောကျ မမခြို၏ ဖောငျးကားနသေော စောကျဖုတျအုံကွီးတခုလုံးကို သူ၏လကျကွီးဖွငျ့ အထကျအောကျပှတျသတျပေးနခြေိနျတှငျ မမခြိုတယောကျ ကွကျသီးမြား တကိုယျလုံးထလာပါတော့သညျ။ မမခြို၏စောကျဖုတျမှာ ဘေးနှုတျခမျးသားမြား အလှနျထူပွီး နှုတျခမျးသားမြားမှာ သဈခှပနျးပှငျ့ဖတျမြားကဲ့သို့ဖွဈနပေါသညျ။ စောကျစလေ့ေးကတော့ ရဲနပေါသညျ။ စောကျဖုတျတခုလုံး အမှေးအမြှငျမြားကငျးစငျအောငျ သနျ့စငျထားပွီး အနံ့အသကျလညျးကငျးစငျနပေါသညျ။ ဇျောရဲတယောကျ မမခြို၏ စောကျစရေဲ့ရဲလေးကို လြှာဖြားဖွငျ့ ဆော့ကစားလိုကျသညျ။
`အိုး မောငျလေးရယျ ………… မမရငျထဲတမြိုးကွီးပဲကှယျ` ထို့နောကျ မမခြို၏ စောကျဖုတျဘေးနှုတျခမျးလှာ ၂ ခုလုံးကို သူ့နှုတျခမျးမြားဖွငျ့ ငုံစုပျယူလိုကျပွီး လကျနှဈဖကျက မမခြို၏ နို့အုံကွီးမြားကို ပှတျခပြေေးနသေညျ။ မမခြိုတယောကျ ဖငျကွီးမြားကို ကော့ကာပေးလိုကျပွီး ပါးစပျမှလညျး ညညျးတှားသံမြား တဖွညျးဖွညျး ပွငျးထနျလာလတေော့သညျ။ ဇျောရဲတယောကျ ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျသော အနမျးဒဏျမြားကို မမခြိုခံနိုငျစှမျးမရှိတော့ပါ။ စောကျဖုတျအတှငျးမှ ကာမအရညျကွညျမြား ဖငျကွားသို့ တလိမျ့လိမျ့ စီးဆငျးစပွုနပွေီဖွဈပါသညျ။ `တျောပါတော့မောငျလေးရယျ၊ ကွာရငျ မမသလေိမျ့မယျ၊ မမရငျထဲမှာ တလှပျလှပျနဲ့၊ မမ တခါမှလညျး ဒီလိုအရသာမြိုး မခံစားဖူးပါဘူး။ အိုး …….` ဇျောရဲတယောကျ မမခြို နို့အုံကွီးမြားကို ပှတျခပြေေးနရောမှ မမခြို၏ အိပျရာခငျးစမြားကို ကိုငျထားသညျ့ လကျနုနုလေးမြားကို သူ့လကျကွီးဖွငျ့ ကိုငျထားပွနျပါသညျ။ မမခြိုကတော့ ကာမစညျးစိမျမြား စတငျတကျစပွုနပွေီဖွဈပါသညျ။ ၁၅ မိနဈခနျ့မြှ မမခြို စောကျဖုတျကို အနမျးတှပေေးနရောမှ ဇျောရဲတယောကျ ရပျလိုကျပါသညျ။
ထို့နောကျ သူ၏ ကွီးမားထှားကွိုငျးလှသော လီးကွီးကို ကိုငျကာ မမခြိုလကျထဲသို့ ထညျ့ပေးလိုကျသညျနှငျ့ … `မောငျလေးရယျ ဒါကွီးနဲ့ဆို မမခြိုတော့ သတေော့မှာပဲ` `မမကလညျး ကြှနျတျောက သအေောငျလုပျပါ့မလား၊ မမခြို စိတျကနြေပျအောငျ ကြှနျတျောလုပျပေးပါ့မယျ` `မငျးဟာကွီးက မမခြိုတော့ ကှဲလိမျ့မယျထငျတယျ` `မကှဲပါဘူး မမရယျ၊ ကြှနျတျောပစ်စညျးကို စုပျပေးလေ` မမခြိုက ဇျောရဲလီးကွီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ကိုငျထားရာမှ သူမ၏ နီရဲဖူးငုံနသေော နှုတျခမျးအစုံဖွငျ့ ညငျသာစှာနမျးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ လီးဒဈကို စတငျလြှကျပါတော့သညျ။ ဇျောရဲတယောကျ မကျြတောငျမြားမှေးစငျးသှားသညျအထိ အရသာကိုယူပဈလိုကျသညျ။ ဒဈကိုစတငျ၍ မမခြိုငုံခြိနျတှငျတော့ … `အောငျမလေး ကွီးလိုကျတဲ့ဟာကွီး မမခြိုပါးစပျနဲ့တောငျ မဆံ့တော့ဘူး။
မမအဖုတျလေးတော့ ကှဲတော့မှာပဲ` ပွောရငျး မမခြိုက ဇျောရဲ၏ လီးဒဈကို စတငျစုပျလိုကျသညျ။ မမခြိုကလညျး ခသေူမဟုတျပါ။ လီးကွီးကို စုပျယူပွီး ပွနျအထုတျတှငျ သူမ၏လြှာဖြားလေးဖွငျ့ လိပျ၍ပွနျထုတျပေးသညျ။ ဇျောရဲလီးကွီးကို မမခြို အဆုံးထိငုံပွီး စုပျဖို့ဆိုသညျမှာ မဖွဈနိုငျခြေ။ ထိပျဖြားပိုငျးကိုသာ အသှငျးအထုတျလုပျပေးပွီး ဂှေးဥမြားကိုတော့ သူမ၏လကျကလေးတဖကျက ပှတျသပျဆုပျနယျနလေသေညျ။ ဇျောရဲတယောကျ ကာမဆိပျမြား ထိုးတကျလာနပွေီဖွဈပါသညျ။ လီးတံတလြှောကျ မမခြို လြှာဖြားဖွငျ့ ဆော့ကစားခြိနျတှငျတော့ မမခြို၏ စောကျဖုတျထဲသို့ လီးတဆုံးထညျ့ပွီး ကာမစညျးစိမျခံလိုသညျ့စိတျမြား တဖှားဖှားပျေါပေါကျလာပါတော့သညျ။
မမခြိုက လီးကို ပုံစံမြိုးစုံဖွငျ့ စုပျပေးပွီးသညျ့နောကျ …. `မောငျလေး၊ မမနဲ့ နတေော့မလား` ဇျောရဲတယောကျ ပါးစပျကမဖွနေိုငျတော့ဘဲ ခေါငျးကိုသာညိတျပွလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ မမခြိုက သူမ၏ လှပဖွူဝငျးအိစကျသော ပေါငျမြားကို အပျေါသို့မွှောကျကာ ကော့ပေးရငျး အိပျယာပျေါသို့ ညငျသာစှာ လှဲခလြိုကျပါတော့သညျ။ ဇျောရဲတယောကျကတော့ သူ၏ တံတှေးအနညျးငယျကို သူ့လကျထဲသို့ထှေးထုတျလိုကျပွီး မမခြို၏စောကျဖုတျ နှုတျခမျးသားပတျလညျကို သုတျလိမျးလိုကျပါသညျ။ `မောငျလေး ဖွညျးဖွညျးသှငျးနျော` ဇျောရဲတယောကျ ပွနျမဖွအေားပါ။ မမခြို၏ စောကျစသေ့ညျလညျး မာကြောနပွေီဖွဈပါသညျ။ ထို့နောကျ လီးဒဈကွီးကို စောကျဖုတျအဝသို့ ကပျတော့ကာဖွငျ့သှငျးလိုကျပါသညျ။ `အိုး ….. အမေ့။
အား ……. ကြှတျကြှတျ …. နာလိုကျတာမောငျလေးရယျ` `ပွီးရငျကောငျးသှားမှာပါမမ၊ ကြှနျတျော ဖွညျးဖွညျးလုပျပေးမယျနျော` ဟုပွောရငျး ဒဈတခုလုံးဝငျအောငျ အနညျးငယျဖိသှငျးခြိနျတှငျတော့ `အိုး …….. ဟိုး …. ဟိုး ….. နာလိုကျတာမောငျလေးရယျ၊ မရဘူးထငျတယျ` `ခဏလေးပါမမရယျ၊ ကြှနျတျော အကောငျးဆုံးအရသာတှရေအောငျလုပျပေးပါ့မယျ၊ ခဏလေးပါ` ဇျောရဲတယောကျ အာသာပွငျးပွသောအသံဖွငျ့ပွောလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ဒဈကို ခဏမြှပွနျနှုတျပွီး တံတှေးဖွငျ့ ဒဈပတျလညျကို ဆှတျလိုကျပွနျသညျ။ ယခုတခေါကျပွနျသှငျးခြိနျတှငျတော့ မမခြိုတယောကျ နာကငျြမှုကို ကြိတျမှိတျခံစားနပေုံရသညျ။ မကျြလုံးမြားကိုမှိတျကာ အံကိုကွိတျထားသညျ။ မဲ့နသေော မမခြို၏ မကျြဝနျးကပငျ ဇျောရဲတယောကျ ကာမဆိပျမြား ထိုးတကျလာစခေဲ့သညျ။ လီးကို အကုနျလုံးမသှငျးဘဲ ထိပျဖြားပိုငျးနှငျ့ပငျ အသှငျးအထုတျ ပွုလုပျပွီး မမခြို၏ ကာမဆိပျအတကျကို စောငျ့နပေါသညျ။ ထိပျပိုငျးနှငျ့ အသှငျးအထုတျ အခကျြ ၂၀ ခနျ့မြှပွုလုပျပွီးသောအခါတှငျတော့ မမခြိုစောကျဖုတျထဲမှ ကာမအရညျကွညျမြား ကောငျးစှာယိုဆငျးနပွေီကို သတိထားမိပါသညျ။
`မမ ကြှနျတေျာ့လီးကို အဆုံးထိသှငျးလိုကျတော့မယျနျော။ မမနဲ့ကြှနျတျော အကောငျးဆုံးအရသာတှေ ခံစားနိုငျအောငျလို့ပါ` ဇျောရဲတယောကျ ကာမနှငျ့ပတျသကျပွီး အကငျးပါးသူပီပီ မမခြိုထံခှငျ့တောငျးလိုကျသညျ။ မမခြိုကလညျး စတငျရရှိနပွေီဖွဈသော ကာမအရသာကို ပိုလိုခငျြနသေညျနှငျ့ အတျောပငျဖွဈသှားသျောလညျး ဇျောရဲ၏ လီးကွီးကိုလညျး နညျးနညျးတော့ ကွောကျသေးသညျ။ `အား ….. မောငျလေးရယျ ဖွညျးဖွညျးနျော။ ကှဲသှားရငျ မလှယျဘူး။ မငျးလညျး ဆကျပွီး ခံစားနိုငျမှာမဟုတျတော့ ဘူး။ ဖွညျးဖွညျး လုပျပါနျော ….. အား ….. ကြှတျကြှတျကြှတျ ……` စုပျသတျညညျးတှားသံမြားဖွငျ့ မမခြိုက ပွနျဖွလေိုကျခြိနျတှငျ ဇျောရဲတယောကျ အနညျးငယျအားစိုကျပွီး လီးကွီးကို မမခြို၏ စောကျဖုတျတှငျးသို့ ဖိသှငျးလိုကျသညျ။ ကာမအရညျမြားဖွငျ့ ခြောမှနေ့သေောကွောငျ့ တငျးကွပျနသေော ခံစားမှုမှအပ အဆငျပွစှောပငျ အဆုံးထိဝငျသှားသျောလညျး သားအိမျကိုဝငျဆောငျသညျ့ အသိကို ၂ဦးလုံး ရရှိလိုကျကွသညျ။
`အား ….. မောငျလေးရယျ မမခြို သားအိမျကို ထိနပွေီ။ ဖွညျးဖွညျးနျော သားအိမျလေးကှဲသှားမယျ` ဇျောရဲတယောကျကတော့ ပါနပျညငျသာစှာဖွငျ့ မမခြို၏စောကျဖုတျတှငျးသို့ လီးကွီးကို ထုတျလိုကျသှငျးလိုကျပွုလုပျနပေါသညျ။ အသှငျးအထုတျပွုလုပျတိုငျး တငျးကွပျသောအရသာ၊ စောကျစကေို့ ပှတျတိုကျသောအရသာတို့ကွောငျ့ မမခြိုတယောကျ နာကငျြမှုမြားကို စတငျမလြေ့ော့စပွုနပွေီး ကာမအရသာကို ပွညျ့ဝစှာ စတငျရရှိခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။
မမခြိုက ပေါငျမြားကို ပိုကားပေးလိုကျပွီး နှဈဦးစလုံး နှုတျခမျးမြားကို စုပျယူနမျးရှိုကျလိုကျကွသညျ။ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့ ဇျောရဲက အသှငျးအထုတျမြားကို အနညျးငယျ မွနျဆနျကွညျ့လိုကျသညျ။ မမခြိုညညျးတှားသံ၊ မောဟိုကျသံ၊ ရငျခုနျသံ မွနျလာသညျမှအပ နာကငျြသညျ့ ဝဒေနာခံစားရသညျ့ဟနျ ဖွဈပျေါမလာတော့ပါ။ မမခြိုစောကျဖုတျတှငျးမှ ကွှကျသားမြားကလညျး ဇျောရဲ၏လီးကွီးအား စတငျညှဈစပွုနပေါသညျ။ အခနျးတှငျးမှ လအေေးပေးစကျကို အဆုံးထိတငျထားသျောလညျး ၂ ဦးစလုံး ခြှေးမြားစို့စပွုလာပွီဖွဈပါသညျ။ မိနဈ ၂၀ ခနျ့မြှကွာသောအခါ အခကျြပေါငျးမညျမြှ အထုတျအသှငျးလုပျပွီးသညျကို ဇျောရဲတယောကျမသိတော့ပါ။ မမခြို၏ အိစကျသောအထိအတှမြေ့ား၊ အပှအေ့ဖကျမြားနှငျ့ မမခြို၏အနမျးမြားကွောငျ့ ဇျောရဲတယောကျ ကာမအထှဋျအထိပျတံခါးဝအနီးသို့ပငျ ရောကျလုနီးနီးဖွဈနပေါသညျ။ မမခြို ဖငျကွားတှငျလညျး ကာမအရညျမြား ရှဲနပွေီဖွဈသညျ။
မမခြိုတယောကျကတော့ မကျြလုံးမြားမှေးစငျးကာ ဇျောရဲကို တငျးကွပျစှာ ဖကျထားပါသညျ။ ပါးစပျမှလညျး ညညျးတှားသံမြား အဆကျမပွတျဖွဈပျေါလြှကျရှိနပေါသညျ။ `မမ ကြှနျတျောတို့ တမြိုးပွောငျးလုပျရအောငျ` `အား ကောငျးလိုကျတာမောငျလေးရယျ။ မငျးကတော့ မမရဲ့ အိပျမကျထဲက မငျးသားလေးပါပဲ။ အားလုံး မငျးသဘောအတိုငျးပါပဲ` ဇျောရဲတယောကျ မမခြိုကို လေးဖကျကုနျးခိုငျးလိုကျသညျ။ မမခြိုကလညျး အလိုကျသငျ့စှာ လှပစှာဖွငျ့ ဖငျကွီး ၂လုံးကိုကော့ကာ ကုနျးပေးလိုကျသညျ။ ဇျောရဲတယောကျ မမခြိုကုနျးထားသောဖငျကွီးကို ကိုငျကာ စောကျဖုတျထဲသို့ လီးကို သှငျးလိုကျသညျ။ `အား ….. အိုး ……… ဖွညျးဖွညျးသှငျးပါမောငျလေးရယျ၊ ဖငျကုနျးလိုကျတော့ သားအိမျကိုပိုထိတယျ` ဇျောရဲတယောကျ လီးကို အဆုံးထိသှငျးလိုကျပွီး ခဏမြှ စောကျဖုတျထဲတှငျ စိမျထားလိုကျသညျ။
ထို့နောကျ အသှငျးအထုတျကို အကွိမျ ၃၀ ခနျ့မြှပွုလုပျလိုကျသညျ။ မမခြိုကတော့ ကာမဆိပျမြား အထှဋျအထိပျသို့ တကျနပွေီဖွဈသညျ။ မမခြို၏ လှပသော ဖငျကွီး ၂လုံးကွားမှ စောကျဖုတျတှငျးသို့ အဝငျအထှကျဖွဈနသေော လီးကွီးကိုကွညျ့ရသညျနှငျ့ ဇျောရဲတယောကျ စိတျထိမျးနိုငျမှုမြား တဖွညျးဖွညျးလြှော့ကသြှားပါသညျ။ လီးထိပျတှငျ ပွောမပွနိုငျသော အရသာထူးကို စတငျခံစားနရေပါသညျ။ မမခြိုကတော့ `အား ကောငျးလိုကျတာမောငျလေးရယျ ….. ကောငျးလိုကျတာ ….. မွနျမွနျလေးလုပျပေးပါတော့ ….. မမပွီးတော့မယျ၊ ဒီလောကျကောငျးတာမြိုး မမတခါမှ မရဖူးဘူးမောငျလေးရယျ။ မွနျမွနျလုပျပေးပါတော့` တောငျးလညျးတောငျးဆို၊ စောကျဖုတျတှငျးမှ ကွှကျသားမြားလညျး ညှဈနရော ဇျောရဲတယောကျ မမခြိုပွီးအောငျ ခပျကွမျးကွမျး စတငျဆောငျ့ပါတော့သညျ။ ခုနကညငျသာမှုမှားကို ရိုကျခြုးလိုကျပွီး မမခြို၏ ဆန်ဒမြားပွညျ့စရေေးအတှကျ အစှမျးကုနျကွိုးစားနပေါတော့သညျ။ `အား ….. ပွီးပွီမောငျလေးရယျ …. ပွီးပွီ……………………အား …… ကောငျးလိုကျတာ …………..အား …………… အိုး` မမခြိုကတော့ အိပျယာခငျးမြားကို လကျဖွငျ့ တငျးကွပျစှာဆုပျကိုငျရငျးပွီးသှားပါတော့သညျ။
သို့သျော စောကျဖုတျတှငျးကကွှကျသားမြားကတော့ သူ၏လီးကွီးအား ညှဈနပေါသေးသညျ။ ဇျောရဲသညျလညျး ထိုအရသာအား ဆကျလကျခံနိုငျစှမျးမရှိတော့ပါ။ `မမ ကြှနျတျောပွီးတော့မယျ……….. ပွီးတော့ မယျ …… အား ……… ရှီး ………….အိုး …………..` ဇျောရဲတယောကျ မမခြို၏ စောကျဖုတျတှငျးမှ လီးကွီးကိုနှုတျကာ လှပသော ဖငျကွီးမြားပျေါသို့ သုတျရညျနှေးနှေးမြားကို ပနျးလိုကျပါတော့သညျ။ မညျမြှကွာအောငျ အိပျပြျောသှားခဲ့သညျကိုမသိရ။ တဒေါကျဒေါကျနှငျ့ အခနျးတံခါးကို ခေါကျသံကွားမှ သူတို့ ၂ ဦးသား လူးလဲထပွီး ဟိုတယျမှပေးသော တဘကျကွီးမြားဖွငျ့ အလြှငျအမွနျပတျလိုကျကွသညျ။ တံခါးခေါကျသူတှကေတော့ ဟိုတယျဝနျထမျးတှမေဟုတျ မမခြို၏သူငယျခငျြး မမကွီး ၂ ဦးဖွဈသညျ။ `ဟဲ့ ခြို ….. နငျတျောတျောကဲနတေယျပေါ့လေ။ ညနစေောငျးသှားရငျ ငါတို့ ပငျလယျရေ မစိမျရဘဲဖွဈနဦေးမယျ။ အခုလညျး ဗိုကျဆာနပွေီ။ မွနျမွနျလုပျကွ` ဇာခွညျက ဤသို့ အမွနျပွောကာ အခနျးတှငျးသို့ ဝငျလိုကျသညျ။
`ဟယျ နငျတို့ကလညျး ဒီလောကျတောငျ ကားမောငျးလာရတာ မောငျလေးလညျး အနားယူခငျြတာပေါ့` `အမယျ နငျအနားယူတာ ငါသိပါတယျနျော၊ လာပွီးတော့ ညာမယျ မကွံနဲ့` ဟု သီတာက ဝငျပွောပွနျသညျ။ `ကဲကောငျးပွီ၊ ညနေ ပငျလယျရစေိမျပွီးရငျ၊ ဘယျမှမသှားနဲ့တော့ ငါတို့ အခနျးမှာ အပနျးဖွကွေမယျ။ ဟုတျပွီလား၊ ကနြေပျလား၊ အဲဒီကမြှ နငျတို့ တှမေ့ယျ` ဟု မမခြိုက ရယျမောကာပွောပွီး စကားစကိုဖွတျကာ ရခြေိုးခနျးထဲသို့ ဝငျသှားသညျ။ ဇျောရဲတယောကျထဲ အခနျးထဲတှငျ မမခြို၏ သူငယျခငျြး ၂ ဦးနှငျ့ငေါငျစငျးစငျး ကနျြရဈခဲ့သညျ။ မမခြိုနှငျ့ အတျောကဲလိုကျရသဖွငျ့ အားအငျကလညျး အတနျငယျကုနျပွီး တလမျးလုံး ကားမောငျးလာခဲ့ရသောကွောငျ့ နားမညျဆိုလြှငျ နားခငျြသေးသညျ။ သို့သျော မမခြို၏ သူငယျခငျြး ၂ ဦးကတော့ သူတို့ကို အနားပေးမညျ့ပုံ မပျေါခြေ။ ကွညျ့ပါဦး ဝတျစားထားသညျကလညျး အပြံစား အမိုကျစား။
ညိုစိမျ့စိမျ့နှငျ့ သီတာ အသားပြော့ပြော့ဘောငျးဘီတိုတိုကို သူ့တငျသားအလှတှပေျေါလှငျအောငျ ဝတျဆငျထားပွီး အပျေါက တီရှပျအပွာနုရောငျကလေးကို ဝတျဆငျထားပုံမှာ အပြိုသှေးကွှစ တောငျ့တောငျ့တငျးတငျးမိနျးမငယျတဦး နှငျ့ပငျ တူနသေေးတော့သညျ။ ဇာခွညျကတော့ ကှာတားဘောငျးဘီအကွပျပျေါတှငျ ခညျြသားဘလောကျတထညျကို လှပစှာဝတျဆငျထားသညျ။ နှဈဦးစလုံး အခနျးတှငျးမှ တီဗှီကို ခယျြနယျအမြိုးမြိုးပွောငျးကွညျ့ရငျး ကလေးတှလေို ပြျောမွူးနကွေသညျ။ ဇျောရဲကတော့ တဘကျကွီးကိုပတျကာ ဆကျတီပျေါတှငျ ထိုငျရငျး သူတို့ကို ငေးမောနမေိသညျ။ `မောငျလေးကရော ဒီကိုအရငျတုနျးက ရောကျဖူးလား` ဟု သီတာမေးသညျကို `ဟုတျကဲ့ ကြောငျးတကျတုနျးကတော့ ခဏတိုငျးရောကျဖူးပါတယျ၊ ကြောငျးပွီးမှတော့ အခုတခေါကျက ပထမဆုံးပဲ` `ခြောငျးသာက အခုလိုအခြိနျဆို ပြျောဖို့အကောငျးဆုံးပဲ။
မမတို့ကတော့ အဲဒါကွောငျ့ ခှငျ့ကို တပတျလောကျယူလိုကျတယျ။ အေးအေးဆေးဆေးနားခငျြလို့လေ` ဟု ဇာခွညျက ဝငျပွောလိုကျသညျ။ ဇျောရဲတယောကျကတော့ မမခြိုအပွငျ သူ၏သူငယျခငျြးနှဈဦးအား ထပျမံ၍ ရငျခုနျနပွေနျပါသညျ။ ညနပေိုငျးတှငျ အပွငျသို့မထှကျတော့ဘဲ မမခြိုဘာတှမြေားစီစဉျမညျနညျးဆိုသညျကိုတော့ သူကွိုတငျရငျခုနျနမေိသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ရခြေိုးခနျးတံခါးဖှငျ့သံကွားပွီး မမခြိုတယောကျ ထှကျလာပါသညျ။ မမခြို၏ တငျသားကားကားကွီးမြားက တဘကျပှပှကွီးခွုံထားလငျ့ကစား လှုပျရမျးကာနသေညျကို ဇျောရဲတယောကျ သတိထားမိသညျ့နှငျ့ ပေါငျကွားမှ သတ်တဝါကွီးက မောငျထောငျခငျြလာပွနျပါသညျ။ `ကဲ မောငျလေး ခြိုးလိုကျတော့၊ မငျးမမတှကေ စောငျ့နကွေပွီ။` ဟုတျကဲ့မမဟု သူကပွောပွီးအထ၊ ပေါငျကွားမှ အနညျးငယျနိုးကွားစပွုနပွေီဖွဈသော သတ်တဝါကွီး၏ ပုံပနျးသဏ်ဍာနျအား သီတာတယောကျ သတိထားဖွဈအောငျ ထားမိလိုကျပါသညျ။
သီတာ၏ ခန်ဓာကိုယျမှ ကွကျသီးမှေးညငျးလေးမြား ထသှားသညျကို ဇျောရဲတယောကျ သတိမထားမိဘဲ၊ ရခြေိုးခနျးတှငျးသို့ အလြှငျအမွနျဝငျလိုကျပါသညျ။ ဇျောရဲရခြေိုးခနျးထဲမှ မမခြိုနှငျ့ သူ့သူငယျခငျြးမြား၏ စကားပွောသံ ရယျမောသံမြား အတိုငျးသားကွားနရေပါသညျ။ ရခြေိုးအပွီးတှငျတော့ မမခြိုတယောကျလညျး ဘောငျးဘီအတိုအကွပျလေးဖွငျ့ လှပခငျြတိုငျးလှပ ကွှရှခငျြတိုငျး ကွှရှကာဖွငျ့ အပွငျသို့ထှကျရနျ အဆငျသငျ့ဖွဈနကွေပါသညျ။ ဇျောရဲလညျး အဝတျအစားအမွနျလဲကာ မမခြိုတို့နှငျ့ ထှကျခဲ့ပါတော့သညျ။ ဟိုတယျမှအထှကျတှငျ ဟိုတယျဝနျထမျးမြားက သူတို့လေးယောကျကို ငေးမောကွညျ့ရှုနကွေသညျ။ သူတို့လေးယောကျစလုံး သောငျပွငျပျေါသို့ထှကျခဲ့ကွသညျ။ သောငျပွငျနပေူပူပျေါတှငျ ပငျလယျစာရောငျးသူလေးမြား၊ စကျဘီးငှားရမျးသူမြား နပေူပူထဲတှငျ ပငျလယျရကေို စိမျနကွေသူမြားဖွငျ့ စညျကားလို့နသေညျ။ သောငျပွငျပျေါအရောကျတှငျလညျး ရနျကုနျမှ ရုပျရှငျရိုကျသူမြား ခြောငျးသာသို့ လာသညျ့အလား သူတို့လေးယောကျကို ငေးမောနကွေသညျ။
ငမေောကွပမေပေါ့ မမခြိုနှငျ့ သူငယျခငျြးမြားကလညျး အပြံစား အမိုကျစား သူကလညျး ရှမေငျးသားပမာဖွဈနကွေသညျကိုး။ ငါးကငျရောငျးသညျ့ ဈေးသညျမလေးတယောကျကိုချေါလိုကျပွီး ကြောကျပုစှနျကငျကွီးမြားနှငျ့ ငါးကငျမြားကို ဝယျလိုကျသညျ။ `မောငျလေး၊ ဘီယာသောကျမလား` `ကောငျးသားပဲ မမ၊ မမတို့ရော` `အငျး၊ ကြောငျးမှာတော့ တပညျ့တှရှေေ့ စတိုငျကွီး တခှဲသားနဲ့ နနေရေတာ အခုခြောငျးသာရောကျတုနျးတော့ ကဲမယျလေ၊ သောကျမှာပေါ့` ရခေဲပုံးအထမျးလေးဖွငျ့ လာရောကျရောငျးသော ကလေးငယျတဦးထံမှ တိုကျဂါးဘီယာပုလငျး (၄) လုံးဝယျလိုကျသညျ။ ကောငျလေးကတော့ ပိုကျဆံပွနျအမျးပွီး သူတို့လေးဦးကို ငေးမောနပွေနျသညျ။ ငါးကငျရောငျးသညျ့ ကောငျမလေးကလညျး မပွနျသေးဘဲ `မမကွီးတို့က ရုပျရှငျအဖှဲ့ကလား` ဟု စပျစုပွနျသညျ။ `မဟုတျပါဘူးညီမလေးရယျ၊ မမတို့က ရနျကုနျကပါ၊ လာလညျတာပါ။
နပေါဦး မမတို့က ရုပျရှငျမငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့ တူနလေို့လား` `အငျး၊ မမက စိုးမွတျသူဇာနဲ့တူတယျ၊ ဟိုမမက မြိုးသန်တာထှနျးနဲ့တူတယျ၊ ဟိုမမက နန်ဒာလှိုငျနဲ့တူတယျ` ဆိုပွီး မမခြို၊ မသီတာနှငျ့ ဇာခွညျတို့ကိုကွညျ့ကာပွောလိုကျသညျ။ မမခြိုကဆကျပွီး `ဒါဖွငျ့ ဒီကိုကိုကွီးကရော` `ဒီအကိုကွီးကတော့ နထေကျလငျးနဲ့တူတယျ၊ ဒါပမေယျ့ နထေကျလငျးက အကိုကွီးထကျ အသားပိုဖွူတယျ၊ အကိုကွီးကတော့ အရပျပိုမွငျ့တယျ` ဟု သှကျလကျခကျြခြာစှာပွောပွနျသညျ။ သူတို့လေးယောကျစလုံး ကမျးစပျမှ ခပျလှမျးလှမျး အုနျးပငျတနျးမြားအောကျသို့ ဦးတညျလိုကျကွသညျ။ ဖွူလှနသေော သဲပွငျခပျနှေးနှေးပျေါသို့ အေးစကျနသေညျ့ ဘီယာပုလငျးမြားကို တငျကာ သူတို့၏ ပငျလယျခရီးအခမျးအနားကို ပြျောရှငျစှာ စတငျဖွဈကွသညျ။ ဇျောရဲနှငျ့ မမခြိုကတော့ ရောကျရောကျခငျြးကဲခဲ့သညျ့ဒဏျကို ခံနရေပွီဖွဈသညျ။ အနညျးငယျနုံးခြိနသေညျ။
ဘီယာပုလငျးမြားကိုဖှငျ့ဖောကျလိုကျပွီး Cheers ဟု ပွိုငျတူမွညျကွှေးကွကာ မော့ခလြိုကျကွသညျ။ ငါးကငျမြား ပုစှနျကငျမြားနှငျ့အတူ မမခြိုရော ဇျောရဲပါ ပွနျလညျ လနျးဆနျးတကျကွှလာကွသညျ။ တယောကျနှငျ့တယောကျ စကွနောကျကွနှငျ့ ခတ်ေတမြှ တပျမကျမှုတှကေငျးမဲ့ကာ ကြောငျးသားကြောငျးသူလေးတှလေို ပြျောရှငျနကွေပွနျသညျ။ ပငျလယျကိုကွညျ့ကာ ဘီယာမြားဖွငျ့ အမောဖွပွေီးသညျနှငျ့ အခနျးသို့ ပွနျကွပွီး ပငျလယျထဲဆငျးရနျ အဝတျအစားမြား လဲလိုကျကွသညျ။ တငျးကွပျနသေော အသားကပျဘောငျးဘီတိုမြားနှငျ့ မမခြိုတို့ကို ဇျောရဲတယောကျ ရငျခုနျစှာဖွငျ့ ငေးမောကွညျ့နမေိသညျ။ ဇျောရဲကလညျး ဘောငျးဘီတိုအကွပျလေးကို ဝတျထားရာ သူ့ဖှားဖကျတျောကွီးက တငျးပွညျ့ဖောငျးကားလို့နသေညျ။ မမခြိုကတော့ ရငျတှအေပွတျခုနျခဲ့ပွီးသျောလညျး သူ့သူငယျခငျြး ၂ ဦးမှာမူ ဇျောရဲကိုကွညျ့ကာ ရတှေဘောတှပေငျငတျသလို ကွကျသီးမှေးညငျးတှပေငျ ထလာပွနျသညျ။
`ကဲ ရထေဲဆငျးကွမယျ` ဟုဆိုကာ ဇျောရဲ၏ ကွှကျသားစိုငျမြားဖွငျ့ လှပဖုကွှနသေညျ့ လကျမောငျးကွီးကို ဆုပျကိုငျရငျး မမခြိုက ဦးဆောငျလိုကျသညျ။ အားလုံး ကလေးတှလေို ပေါ့ပါးသှကျလကျစှာဖွငျ့ ကမျးစပျဆီသို့ ပွေးဆငျးခဲ့ကွသညျ။ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျ၏ အသားကပျဘောငျးဘီအောကျတှငျ မညျသညျ့အတှငျးခံမြှ ဝတျဆငျထားခွငျးမရှိသညျကို ဇျောရဲသတိထားမိသညျ။ တီရှပျအကွပျကလေးမြားအောကျတှငျလညျး စနခေိုငျမြားက လှတျလပျစှာလှုပျရှားနကွေသညျ။ ပငျလယျရေ၏ အေးမွသောအထိအတှကွေ့ောငျ့ အားလုံး လနျးဆနျးသှားကွသညျ။ ဘီယာ တပုလငျးစီ၏ နူးညံ့သော အရှိနျကွောငျ့လညျး ပေါ့ပါးလှတျလပျနသေညျ။
ဇျောရဲက ကနျြးမာရေးကို ထိနျးသိမျးသညျ့အနဖွေငျ့ ဘီယာကို အရမျးမသောကျပါ။ ရလှေိုငျးတှကေ ခပျကွမျးကွမျးရိုကျခတျလာတိုငျး အားလုံး ဝရုနျးသုနျးကားဖွဈကာ ပှဖေ့ကျမိသညျ့အရသာမြားကိုလညျး အားလုံးကွိုကျနှဈသကျနပွေီ။ ကြောငျးမှာ ဟနျဆောငျနထေိုငျရခွငျးမြားကိုလညျး မမခြိုက လှတျပဈလိုကျသညျ။ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျလညျး ထို့အတူပငျ။ သူတို့ အမြိုးသားမြားနှငျ့ ရညျးစားကို မလြေ့ော့သှားကွပွီဖွဈသညျ။ ရကေူးရငျး ရငေုပျရငျးဖွငျ့ မမခြိုကိုသာမက သီတာနှငျ့ ဇာခွညျတို့၏ အသားစိုငျမြားကို ကိုငျမိသညျ့အကွိမျပေါငျးကလညျး မနညျးတော့ခြေ။ တခါ ဇျောရဲတယောကျ မမခြိုမှတျပွီး သီတာ၏ တငျသားစိုငျကွီးကို ရအေောကျထဲမှ ကိုငျမိနသေညျ။ သီတာကလညျး မရုနျး၊ ဇျောရဲကလညျးမလှတျ။
ရပေျေါ ခေါငျးဖျောလိုကျမှ သီတာမှနျးသိရတော့သညျ။ သီတာ၏မကျြနှာပျေါတှငျ ပနျးနုရောငျမြားပွေးသှားခဲ့သညျ။ အနောကျမကျြနှာမှာ ပုစှနျဆီရောငျအသှေးဖွငျ့ နဝေနျးကွီး၏တနတေ့ာနှုတျဆကျခြိနျရောကျတော့မှ သူတို့အားလုံး ပငျလယျရထေဲကတကျခဲ့ကွသညျ။ ရထေဲဆငျးလာတုနျးကထကျ အပျေါပွနျအတကျမှာ အသားစိုငျတှကေ ဖုထဈမို့ကွှနကွေသညျ။ ထို့အတူ ဇျောရဲတယောကျသညျလညျး ကာမအဆိပျမြား တဖနျပွနျလညျတကျစပွုခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။ `ကဲ ရခြေိုးပွီးရငျ ဟိုတယျမှာပဲ ညနစောစားမယျ၊ ပွီးရငျမထှကျတော့ဘူး။ ငါ့အခနျးထဲမှာပဲ ပြျောကွရအောငျ` မမခြိုတယောကျ အားလုံးကိုပွောလိုကျပါသညျ။ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျကတော့ သူတို့အခနျးဆီသို့ထှကျသှားကွသညျ။ မမခြိုနှငျ့ ဇျောရဲကတော့ ရခြေိုးခနျးတှငျးသို့ မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျး ဝငျလိုကျကွသညျ။ မမခြို၏ ကိုယျခန်ဓာတခုလုံးကို ဇျောရဲတယောကျ ဆပျပွာမှေးဖွငျ့ ပှတျသပျရငျး သနျ့စငျပေးသလို မမခြိုကလညျး ဇျောရဲတကိုယျလုံးကို ပှတျတိုကျပေးပွနျပါသညျ။
`မောငျလေး၊ ဘယျနှယျလဲ၊ မမခြို သူငယျခငျြးတှကေိုရော သဘောကလြား` ရုတျတရကျမေးခှနျးအား ဇျောရဲ ပွနျမဖွနေိုငျပါ။ ရှကျသညျလညျးမဟုတျ ကွောကျသညျလညျးမဟုတျ၊ အံ့အားသငျ့သညျကတော့အမှနျ။ `ကဲပါရှကျမနပေါနဲ့။ သူတို့က မမရဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတှေ။ နလေ့ညျက မောငျလေးရခြေိုးနတေုနျး မမတို့ပွောဖွဈခဲ့တယျ။ သူတို့က မောငျလေးနဲ့ ကွုံဖူးခငျြတယျတဲ့` ဟုပွောပွီး ဇျောရဲ၏ ဖှားဖကျတျောကွီးအား အထကျအောကျ ပှတျသပျပေးနပွေနျသညျ။ နောကျဆကျပွီး … `တကယျတော့ မမတို့ ၃ ယောကျလုံးက မမတို့လိုခငျြတဲ့ အခဈြမြိုးတှေ မရခဲ့ကွဘူး။
မမတို့လိုခငျြတဲ့ ကာမအရသာလညျး မရခဲ့ဖူးဘူး။ ဇာခွညျဆို ပိုသနားစရာတောငျကောငျးသေးတယျ။ အခုသူယူမယျ့ ဗိုလျမှူးက အိမျကသဘောတူလို့၊ လကျမထပျခငျမှာ အဲဒီဗိုလျမှူးတောငျးဆိုလို့ ၂ ခါလောကျအိပျပွီးပွီ။ ဒါပမေယျ့ စိတျကနြေပျမှုမရဘူး` `ဒါဆို မယူနဲ့ပေါ့မမရဲ့ မရဘူးလား။` `မရဘူးမောငျလေးရဲ့၊ မမလညျး ဗိုလျမှူးကတျောတယောကျပဲ။ မမတို့လိုမြိုး ပညာတတျတှကေိုယူမှ သူတို့ ရာထူးတကျတာလေ၊ ဒါပမေယျ့ မမယောကျြားကတော့ မမအတှကျ လိငျဆကျဆံရတာကလှဲလို့ အစစအရာရာ လိုလေးသေးမရှိပါဘူး။ ပွီးတော့ လူကွီးနားမှာဆိုတော့ သူ့ရှရေ့ေးကတော့ တျောတျောကောငျးပါတယျ။ ဇာခွညျကတော့ အဲလိုမြိုးမဟုတျဘူး` `ဘယျလိုဟငျ မမ ` သူက စကားဖွတျမေးလိုကျသညျ။ `ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောရရငျ။ သူယူမယျ့သူက နောငျရေးတော့ စိတျအေးရပမေယျ့ အိမျထောငျရေးမှာတော့ ပွဿနာရှိလာနိုငျတယျ။
ဘာ့ကွောငျ့လညျးဆိုတော့ သူ့ယောကျြားပစ်စညျးက သေးသေးလေးလို့ပွောတယျ။ နောကျပွီး ပစ်စညျးကသေးတော့ အားမလိုအားမရဖွဈပွီး ကွငျနာမှုလညျးမရှိဘူး။ ဆကျဆံတိုငျး ဆံပငျတှဘောတှဆေောငျ့ဆှဲတတျသေးတယျတဲ့။ ဇာခွညျ့အကွောငျးကိုလညျး မမကသိတယျ။ သူက မိနျးကလေးထဲမှာ တျောတျောစိတျပွငျးထနျတယျ။ အဲဒီဗိုလျမှူးနဲ့ ၂ ခါလောကျနပွေီးတော့ သူအာသာမပွတေဲ့အကွောငျး မမကို ဖုနျးဆကျလာတယျ။ အဲဒီဗိုလျမှူးက အမွောကျတပျကလေ။ မိတ်ထီလာကပေါ့` `အဲဒါဆို မမဇာခွညျအတှကျ ရငျလေးစရာပဲနျော` `အေးပေါ့။ လူကွီးတှကေလညျး စီစဉျပွီးသားဖွဈတော့ ခကျနတေော့တာပေါ့။ ကဲပါလေ ဒါတှကေ ကိစ်စမရှိပါဘူး။ အခုမမတို့ ကဲကွတာကိုလညျး မောငျလေးဖကျက နှုတျလုံပေးနျော။ မမတို့ကလညျး မောငျလေးကလှဲပွီး ဘယျသူနဲ့မှ ဒီလို သှားဖူးနဖေူးတာမဟုတျဘူး` `စိတျခပြါမမ၊ ကြှနျတျော ကတိတညျပါတယျ။` ဟုဇျောရဲကပွနျပွောလိုကျသညျ။
`နောကျပွီး မမမှာခငျြတာက ဇာခွညျကိုတော့ နညျးနညျးညှာပွီးလုပျပေးနျော၊ သူက မမတို့လို အိမျထောငျသညျလညျးမဟုတျဘူး။ ကာမထနျပမေယျ့ အတှအေ့ကွုံအရကနညျးသေးတယျလေ၊ နောကျပွီး မငျးပစ်စညျးကလညျး မမတောငျ အသကျရှုရပျသှားသလားအောကျမရေ့တယျ။` `ဟုတျကဲ့ပါမမ၊ ကြှနျတျောသတိထားပွီးဆကျဆံပါမယျ` သူတို့ ၂ဦး စကားပွောရငျး ရခြေိုးသညျမှာ အတျောကွာသှားသညျ။ ရခြေိုးခွငျးအားအဆုံးသတျလိုကျပွီး ခန်ဓာကိုယျမြားကို တဘကျမြားဖွငျ့ ခွောကျသှသှေ့ားစရေနျ ပွုလုပျလိုကျကွသညျ။ ပွီးလြှငျ အသားအလှဆီမြားကို မမခြိုတလှညျ့ ဇျောရဲတလှညျ့ အပွနျအလှနျလိမျးပေးရငျး အနားယူနကွေသညျ။
ထို့နောကျ ညနစောစားရနျ ၄ ဦးစလုံး ဟိုတယျထမငျးစားခနျးဆီသို့ ထှကျခဲ့ကွတော့သညျ။ အခနျးပွနျရောကျသညျနှငျ့ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျတို့အား မမခြိုမှ သူတို့အခနျးအားမပွနျစတေော့ဘဲ။ ဇျောရဲတို့အခနျးတှငျသာနရေနျပွောဆိုလိုကျသညျ။ သူတို့ ၄ ဦးစလုံး တသကျမမနေို့ငျမညျ့ ကာမပှဲတျောကွီးကို အားပါးတရဖွငျ့ တညလုံး နှဲကွတော့မညျဖွဈပါတော့သညျ။ အားလုံးအခနျးပွနျရောကျတော့ ရှေးဟောငျးနှောငျးဖွဈတှေ ပွောဆိုနကွေရငျး အပနျးဖွလေိုကျကွသညျ။ လအေေးပေးစကျကို အစှမျးကုနျမွှငျ့ပွီး ခုတငျပျေါတှငျ ၄ ဦးသား တီဗီကွညျ့ရငျး စကားပွောနကွေသညျ။ မမခြိုကတော့ ထုံးစံအတိုငျး သူ့ရငျခှငျထဲမှာ။ မသီတာက …. `ကဲခြို … မခြိုတယောကျထဲပဲ အပိုငျးစီးမထားနဲ့လေ၊ ခြို့အိပျမကျထဲက နတျသားလေးကို ငါတို့ကိုလညျးမြှပေးဦး` `အောငျမလေးဟယျ ငါဒီလောကျထိ သဝနျတိုဖူးလို့လား၊ နောကျပွီးမှ မီးမီးကွောကျကွောကျ လုပျမနနေဲ့နျော` `သိပါတယျ၊ နငျပွောကတညျးက ရငျခုနျနတောပါ` `ကဲမောငျလေး၊ မမသူငယျခငျြးတှကေို အကွငျနာလေးတှပေေးလိုကျပါဦး` ဟု ပွောဆိုကာ ဇျောရဲ၏ ကွီးမားကယျြပွနျသော ရငျအုပျကွီးအားပှတျသပျပေးနပွေနျပါသညျ။
သီတာက ဇျောရဲအနီးသို့တိုးလာပွီး ဇျောရဲ၏ ရငျအုပျတှငျးသို့ ခေါငျးကိုတိုးဝှကေ့ာဖွငျ့ အနမျးမြားစတငျပေးလိုကျပါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဇာခွညျကတော့ မကျြလုံးလေးအဝိုငျးသားဖွငျ့ ကွညျ့နပေါသညျ။ ဇျောရဲအား မသီတာ၏ မေးဖြားလေးအားကိုငျပွီး ခေါငျးလေးကိုဆှဲယူကာ ဖူးရှနသေော နှုတျခမျးအစုံအား စုပျယူလိုကျပါသညျ။ ထို့နောကျ နောကျကြောဖကျကိုသိုငျးကာ စနေ ၂ ခိုငျ၏ မနိုငျတာဝနျအား ထမျးဆောငျနရေသညျ့ ဘရာစီယာခြိတျကလေးအား ဖွုတျပေးခွငျးဖွငျ့ တနတေ့ာအနားယူခိုငျးလိုကျပါသညျ။ မမခြိုကတော့ မသီတာ၏ ကွီးမားလှသညျ့ တငျသားစိုငျကွီးမြားအား ပှတျသပျကာ စကပျဇဈအား ဆှဲဖွုတျနပေါပွီ။ `သီတာရယျ နငျ့ဖငျကွီးကလညျး ကွီးလိုကျတာ အားရစရာပဲ၊ ငါ့ဖငျထကျတောငျကွီးသေးတယျ။` `ဟုတျပါ့သီတာရယျ နငျလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျသလား` ဇာခွညျကဝငျပွောသညျ။ သီတာက ဇျောရဲနှငျ့နမျးခွငျးကို ခတ်ေတမြှရပျလိုကျပွီး `ပငျကိုယျဟဲ့၊ ဘာလကေ့ငျြ့ခနျးမှမလုပျဘူး။ ငါတို့မြိုးရိုးကိုကကွီးတာ` ထိုအခြိနျတှငျ မမခြိုတယောကျ မသီတာ၏ စကပျကို ဆှဲခြှတျပွီးဖွဈနပေါပွီ။
သီတာထံတှငျ ဂြီစတငျး ဟုချေါသညျ့ စောကျဖုတျကိုသာဖုံးသညျ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီသေးသေးလေးသာ ကနျြပါတော့သညျ။ ဇျောရဲကတော့ သီတာ၏ နို့အုံကွီးမြားကို ဆုပျကိုငျပှတျခနြေပေါသညျ။ သီတာထံမှလညျး ရငျခုနျသံအခြို့ စတငျကွားရစပွုနပေါသညျ။ မမခြိုကတော့ သူ့အဝတျအစားမြားကို ကိုယျတိုငျခြှတျနပွေီဖွဈသညျ။ ဇာခွညျကတော့ ခွမေကိုငျမိ လကျမကိုငျမိအမူအယာမြားဖွငျ့ အံ့သွရှကျရှံ့စိတျမြားဖွဈနဆေဲဖွဈပါသညျ။ သို့သျော သူမလကျမြားက သူမ၏ ပေါငျကွားတှငျ ကိုငျထားသညျကို ဇျောရဲတယောကျ သတိထားမိပွီဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူဝတျထားသော ဂငျြးဘောငျဘီအား ဇဈကို အသာဆှဲဖွုတျလိုကျပါသညျ။ အခွအေနကေို သိသော မမခြိုမှ သီတာ့ကိုကြျောကာ မိမှေးတိုငျးဖမှေးတိုငျးဖွငျ့ ဇျောရဲဆီသို့ လာပါသညျ။ ပွီးလြှငျ ဇျောရဲဘောငျးဘီအား ကူညီပွီးခြှတျပေးပါသညျ။ ဇျောရဲထံတှငျ အောကျခံဘောငျဘီအနကျရောငျသာ ကနျြရှိပါတော့သညျ။ မမခြိုက ဇျောရဲဘောငျးဘီပျေါမှနပွေီး ဇျောရဲလီးကွီးအား ပှတျသပျပေးနပေါသညျ။
မာနျဖီနသေော လီးကွီးကတော့ အောကျခံဘောငျးဘီကှဲထှကျမလား ထငျရလောကျအောငျပငျ ရုနျးကွှနိုးထလာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတော့သညျ။ သီတာက ဇျောရဲနှငျ့ နှုတျခမျးမြားစုပျနမျးနရေငျးမှ ခေါငျးလေးကို အသာအယာလြှောခပြွီး ဇျောရဲ၏ ဝမျးဗိုကျကွှကျသားမြားကို နမျးပွနျပါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျတော့ မမခြိုက ဇျောရဲ၏ အောကျခံဘောငျးဘီအား ခြှတျခလြိုကျပါတော့သညျ။ ဒီတခါမကျြလုံးမြားပွူးရသူတှကေတော့ မမခြိုမပါဝငျကွောငျး စာဖတျသူမြားသိပါလိမျ့မညျ။ သီတာနှငျ့ ဇာခွညျဖွဈကွောငျးလညျး အထူးတလညျပွောရနျလိုတော့မညျမထငျ။ `အောငျမလေးလေး … ကွီးလိုကျတာကွီးဟယျ။ ခြိုရယျ … နငျမနာဘူးလား။ နညျးတာကွီးမှမဟုတျဘဲ` ဟု သီတာက ဇျောရဲ၏ လီးကွီးကို ကိုငျကွညျ့ကာပွောလိုကျသညျ။ မမခြိုကတော့ အောငျမွငျသူတဦးပမာ … `နငျတို့ပဲ နတျသားလေးနဲ့ မိတျဆကျပေးဆို၊ သဝနျမတိုနဲ့ဆို၊ ဘာအခုမှကွောကျပါပွီလဲ` ဟု ဇျောရဲ၏ ဂှေးဥမြားကို ပှတျသပျနရေငျးမှပွောလိုကျသညျ။
ဇာခွညျကတော့ … `ခြိုရယျ … မောငျလေးဟာကွီးကတော့ ကွောကျစရာကွီးပါလားဟယျ။ ငါပစ်စညျးနဲ့ ဆံ့ပါမလားဟယျ။ ငါတော့ကွောကျလာပွီ` ပွောသာပွောသညျ ဇာခွညျတယောကျ ဇျောရဲ၏ လီးကွီးကိုတော့ အရမျးစိတျဝငျစားနမေိပါပွီ။ သူမ၏ ဖောငျးဖောငျးအိအိလကျကလေးဖွငျ့ ဇျောရဲ၏ လီးကွီးအား ကိုငျတှယျကွညျ့နသေညျ။ သီတာကတော့ ဇျောရဲလီးကွီးအား လြှာဖြားကလေးဖွငျ့ စတငျတို့ထိဆော့ကစားနပေါသညျ။ ထို့နောကျ လီးဒဈကွီးကို သူမ၏ နှငျးဆီရောငျနုတျခမျးလေးဖွငျ့ စတငျစုပျပေးပါသညျ။ မမခြိုကတော့ ဇျောရဲ၏ ဂှေးဥမြားကို ငုံစုပျပေးနပေါသညျ။ ဇျောရဲတယောကျကတော့ နတျစညျးစိမျကို စတငျခံစားနပေါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဇာခွညျ့ထံသို့ သူ၏လကျမြားဖွငျ့လှမျးလိုကျပါသညျ။ ဇာခွညျကလညျး ဇျောရဲ၏ ကမျးလငျ့မှုကို တပျမကျသောအကွညျ့မြားဖွငျ့ ရှသေို့ တိုးကာလာပါတော့သညျ။
ဇျောရဲက ဇာခွညျ၏ အဝတျအစားမြားကို ညငျသာစှာခြှတျပေးရငျး နှုတျခမျးလေးကို ညငျသာစှာစုပျယူလိုကျပါသညျ။ မမခြိုပွောထားသညျ့ စကားမြားကိုကွားယောငျမိရငျး ဇျောရဲတယောကျ ဇာခွညျ့အပျေါ အထူးခွားဆုံးညငျသာစှာဖွငျ့ဆကျဆံရနျ စိတျပိုငျးဖွတျထားပွီးဖွဈပါသညျ။ သီတာကတော့ ဇျောရဲ၏ လီးဒဈကွီးကိုစုပျခွငျးအား အရှိနျရစပွုနပွေီဖွဈပါသညျ။ `ပွှတျ၊ ပလပျ` စသညျ့အသံမြိုးစုံဖွငျ့ အားပါးတရ စုပျပေးလြှကျရှိပါသညျ။ ထိုသို့စုပျပေးနခြေိနျတှငျ သူမ၏ တပျမကျနှဈလိုဖှယျကောငျးလှသော ဖငျသားကွီးမြားကို ကုနျးထားသညျမှာ မွငျရသူအဖို့ အလိုဆန်ဒရမကျမြား တကျကွှလာစအေောငျ နှိုးဆျောထားသကဲ့သို့ပငျ ဖွဈနပေါသညျ။ ဇာခွညျ၏ ဝငျးဝါသောအသားအရနှေငျ့လိုကျဖကျစှာ ကိုယျလုံးကိုယျထညျကလညျး တောငျ့တငျးလှပါသညျ။
သူငယျခငျြး ၃ ဦးတှငျ အနညျးငယျသေးသညျဟုဆိုနိုငျသျောလညျး သာမနျမိနျးမမြားထကျ ပွညျ့ဖွိုးတောငျ့တငျးလှပါသညျ။ မိဘမြား၏ ပွညျ့စုံကုံလုံကွှယျဝမှု၊ ပညာကိုမကွောငျ့မကွသငျနိုငျမှု၊ မပငျမပနျးနရေမှုတို့က သူမ၏ အသားအရေ ကိုယျလုံးကိုယျထညျတို့က သကျသခေံလြှကျရှိနပေါသညျ။ သူမ၏ကိုယျပျေါတှငျတော့ သီတာကဲ့သို့ပငျ ဂြီစတငျး လေးတထညျသာ ကနျြရှိပါတော့သညျ။ သီတာက သူမနှငျ့အတူ ဇျောရဲ၏လီးကွီးအား စုပျရနျ လကျကမျးလိုကျပါသညျ။ မမခြိုကတော့ ဂှေးဥမြားကို စုပျနရောမှ ဇျောရဲနှငျ့ ယှဉျထိုငျလိုကျပွီး ဇျောရဲနှုတျခမျးမြားအား စုပျယူလိုကျသညျ။ သူတို့လေးဦးစလုံး ကာမရမကျမြားဖွညျ့ ပွညျ့လြှမျးနပွေီး လိုအငျမြားတောငျ့တနသေညျ့ ညညျးသံမြားမှအပ မညျသညျ့စကားတလုံးကိုမြှ ပွောဆိုခွငျးမပွုကွပါ။ တပျမကျသောအခဈြမြားကိုတညျဆောကျခွငျးသညျ စကားတလုံးမြှ မလိုအပျပါခြေ။
ဇျောရဲလီးကွီးကတော့ မာကြောသညျထကျ မာကြောတောငျ့တငျလာနပွေီဖွဈပါသညျ။ ဇျောရဲလီးကိုအစုပျခံပွီး ဇိမျယူနသေညျမှာလညျး မိနဈ ၂၀ ခနျ့မြှကွာသှားခဲ့ပါပွီ။ `မောငျလေးနခေငျြနပွေီလား` `အငျး … ဒါပမေယျ့ မမတို့ကိုကောငျးအောငျလုပျပေးမယျလေ` ဟုပွောကာ ဇာခွညျ့ကို ပကျလကျလှနျပွီး ဘောငျဘီအသေးလေးအား ဆှဲခြှတျလိုကျပါသညျ။ ဇာခွညျ၏ မို့ဖောငျးနသေော စောကျဖုတျကလေးသညျ နှဈလိုဖှယျဖွဈပါသညျ။ စိုပွဝေငျးဝါသောအသားအရနှေငျ့လိုကျဖကျစှာ အမှေးအမြှငျမြားကငျးသော စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကလညျး ကာမဆိပျမြားတကျလာအောငျ နှိုးဆှနပွေနျပါသညျ။ ဇျောရဲက စောကျစရေဲ့ရဲလေးကို လြှာဖွငျ့ စုပျယူလိုကျပါသညျ။
ဇာခွညျ့ထံမှ `အိုး မောငျလေးရယျ …. ရငျထဲမှာ ဘယျလိုမှနျးမသိဘူးကှယျ အရမျးလညျးခုနျနတေယျ။ မမတော့နှလုံးရောဂါရတော့မယျနဲ့တူတယျ` ဟု မောဟိုကျသံဖွငျ့ ပွောဆိုလိုကျပါသညျ။ ဇျောရဲကတော့ အရမျးနူးညံ့သျောအနမျးမြားဖွငျ့ ဇာခွညျ့စောကျဖုတျတခုလုံး ရှဲစိုသှားအောငျ စုပျပေးလြှကျပေးခွငျးမြားကို အကွိမျပေါငျးမြားစှာပွုလုပျပေးလိုကျပါသညျ။ ဇာခွညျ၏စောကျဖုတျအဝမှ ကာမအရညျမြား စတငျစိမျ့ယိုထှကျစပွုနပေါပွီ။ အဖိုးတနျသော အမြိုးသမီးအသုံးအဆောငျမြားသုံးနိုငျခွငျးသကျသအေဖွဈ ဇာခွညျတို့ မမခြိုတို့၏ စောကျဖုတျမြားက သကျသခေံလြှကျရှိနပေါသညျ။
အနံ့အသကျလုံးဝထှကျခွငျးမရှိပါခြေ။ ဇျောရဲတယောကျ အားပါးတရ စုပျပေးလြှကျပေးခွငျးမြား ပွုလုပျပွီး ၁၅ မိနဈခနျ့အကွာတှငျတော့ ဇာခွညျတယောကျ လုံးဝခံနိုငျစှမျးမရှိတော့ဘဲ တကိုယျလုံးကွကျသီးမှေးညငျးမြားထကာ ကာမအလိုဆန်ဒမြား အဆုံးစှနျပွညျ့ဝသှားခဲ့ပါပွီ။ ထို့နောကျ သီတာအား ဖငျကနျးခိုငျးလိုကျပွီး ပေါငျကွားထဲသို့ခေါငျးဝငျလြှိုကာ သီတာ၏ စောကျဖုတျအားလညျး စတငျစုပျပေးပါတော့သညျ။ သီတာ၏စောကျဖုတျကတော့ မမခြိုနှငျ့ အနညျးငယျဆငျတူပါသညျ။ စောကျစအေ့နညျးငယျရှညျပွီး ဘေးနှုတျခမျးသားလေးမြားက ပှငျ့ဖတျလေးနှဈခုပမာ တှဲကနြပေါသညျ။ ထိုအဖတျလေးနှဈခုနှငျ့ စောကျစအေ့ား စုပျလိုကျသညျနှငျ့ သီတာ၏ ဖငျကွီးမြား ပိုကော့သှားသညျ။ ပကျလကျဖွဈနသေော ဇျောရဲနှငျ့ ထောငျမတျနသေော လီးကွီးအား မမခြိုနှငျ့ ဇာခွညျမှ ထပျပွီး စုပျပေးနပွေနျပါသညျ။ ယခုအခြိနျတှငျတော့ ဇာခွညျတယောကျ ဇျောရဲလီးကွီးအား ကွောကျရှံ့ခွငျး မရှိတော့ပါခြေ။
ဇျောရဲလီးကွီးနှငျ့ ဆကျဆံရမညျကို ကွိုတငျပွီး ရငျခုနျနပွေီဖွဈပါသညျ။ `ကောငျးလိုကျတာမောငျလေးရယျ၊ ကောငျးလိုကျတာ၊ အား ………ရှီး ……… သီတာ၏ညညျးတှားသံမြားဖွဈပါသညျ။ ယောကျြားရှိသော သီတာ့အဖို့ ဇာခွညျကဲ့သို့ ကာမကို လှတျမပဈလိုကျပါ။ ထိမျးပွီးခံစားနပေါသညျ။ ဇျောရဲကဲ့သို့ ကြှမျးကငျြလိမ်မာသောသူနှငျ့တှသေ့ောအခါ သူ့စိတျမြားကို အနိုငျနိုငျထိမျးထားရပါသညျ။ မမခြိုကလညျး ဇျောရဲလီးကိုစုပျပေးနရေငျးမှ သီတာ၏ စအိုဝကို လကျဖွငျ့ ပှတျသပျပေးပွနျပါသညျ။ သီတာတယောကျ ညညျးတှားစုပျသတျသံတို့ဖွငျ့ ကာမအရသာ၏ဒဏျကို အလူးအလဲခံစားနရေပါတော့သညျ။ ထိုအခြိနျတှငျတော့ မမခြိုတယောကျ ဇျောရဲ၏ လီးကွီးပျေါသို့ခှကာ သူမ၏စောကျဖုတျအဝဖွငျ့ ဇျောရဲ၏ လီးဒဈကွီးကိုတပွေီ့း ဖွညျ့ညငျးစှာသှငျးနပေါသညျ။ သီတာလညျး အတနျငယျမောဟိုကျသှားသဖွငျ့ ဖငျကုနျးထားရာမှာ ဇျောရဲဘေးသို့ လှဲခလြိုကျပါသညျ။ ဇျောရဲက မမခြိုကို သိုငျးဖကျရငျး နံရံသို့ ကြောမှီလိုကျပါသညျ။
မမခြိုကတော့ သူ့တငျသားအိအိဖွူဖွူကွီးမြားဖွငျ့ အားယူကာ ဇျောရဲ၏ လီးတခြောငျးလုံး စောကျဖုတျတှငျးဝငျရနျကွိုးစားနပေါသညျ။ စောကျဖုတျတှငျးမှ ကာကအရညျမြားအကူအညီဖွငျ့ ဇျောရဲ၏ လီးကွီးတခြောငျးလုံး ဝငျသှားခြိနျတှငျတော့ မမခြိုပါးစပျမှ ညညျးတှားသံမြား အဆကျမပွတျပျေါထှကျလာနပွေီဖွဈသညျ။ အခကျြ ၅၀ ခနျ့မြှ ဆောငျ့ပွီးခြိနျတှငျတော့ မမခြို အတနျငယျမောဟိုကျလာသဖွငျ့ စောကျဖုတျတှငျးမှ လီးကွီးကိုနှုတျကာ ဘေးသို့ စောငျးလှဲခလြိုကျပါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ သီတာက လီးကွီးကို စုပျပေးနပွေနျပါသညျ။ ထို့နောကျ သူမသညျလညျး မမခြိုကဲ့သို့ပငျ အပျေါမှခှကာ စောကျဖုတျဝဖွငျ့ လီးဒဈကွီးကို တလေို့ကျပွနျပါသညျ။ သူမကတော့ မမခြိုကဲ့သို့ နခေ့ငျးမှ အတှအေ့ကွုံမရှိသေးသဖွငျ့ အဆငျမပွလှေပါ။ လီးဒဈဝငျရနျ အတျောကွိုးစားရပွီး နောကျထပျသျှုးရနျခကျနပေါသေးသညျ။ ပါးစပျမှလညျး …. `အား …. ကြှတျကြှတျ နာလိုကျတာမောငျလေးရယျ။ နာလိုကျတာ။ မမ မငျးဒဈကွီးလောကျနဲ့ပဲ နပေါရစတေော့နျော။
အဆုံးထိမသှငျးလိုကျပါနဲ့` မမခြိုကတော့ ထိုအခကျြကို ပါးနပျစှာဖွငျ့ သီတာ့စောကျဖုတျထဲမှ လီးကိုထုတျလိုကျပွီး တံတှေးမြားစိုရှဲနအေောငျ သုတျလိမျးပေးလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ သီတာ့စောကျဖုတျတှငျးသို့ ပွနျသှငျးပေးလိုကျပွနျသညျ။ ယခုတကွိမျတှငျတော့ သီတာ့စောကျဖုတျတှငျးသို့ တဝကျခနျ့ဝငျသှားပွီဖွဈပါတော့သညျ။ ထိုတဝကျမြှနှငျ့ပငျ အခကျြ ၂၀ ခနျ့မြှဆောငျ့ပေးပွီးသောအခါ သီတာ့စောကျဖုတျထဲမှ ကာမအရညျမြား ကောငျးစှာစီးဆငျးလာပွီဖွဈပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဇျောရဲတယောကျ သီတာ၏ ကွီးမားသော တငျသားစိုငျကွီးမြားကို ကိုငျကာ အနညျးငယျကော့ပေးလိုကျသညျနှငျ့ ဇျောရဲ၏ ကွီးမားလှသောလီးကွီးတခြောငျးလုံး သီတာ၏စောကျဖုတျတှငျးသို့ ဝငျသှားပွီဖွဈပါတော့သညျ။ `အား …. ကောငျးလိုကျတာမောငျလေးရယျ၊ ဒါပမေယျ့ နညျးနညျးတော့ အောငျ့တယျ။ သားအိမျကိုသှားဆောငျ့တယျထငျတယျ` `ကောငျးသှားမှာပါ မမရယျ၊ ခဏနရေငျ အားလုံးကောငျးသှားမှာပါ။` ဟုဇျောရဲက ကာမခိုးတှဝေနေသေော အသံမြားဖွငျ့ ပွောလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ သီတာ၏ နို့အုံကွီးကို ပှတျခရြေငျး အပွနျအလှနျဆောငျ့ပေးနကွေသညျ။
မမခြိုကတော့ ဇျောရဲနှငျ့သီတာ အခကျြ ၂၀ ခနျ့မြှဆောငျ့ပွီးတိုငျး ဇျောရဲလီးကို သီတာ့စောကျဖုတျတှငျးမှထုတျကာ ဇာခွညျတလှညျ့ သူမတလှညျ့ဖွငျ့ စုပျပေးနသေညျ။ သူမစုပျပွီးခြိနျတှငျ လီးကွီးကိုစောကျဖုတျတှငျးသို့ပွနျထညျ့ပေးပွီး ဇာခွညျ၏နှုတျခမျးမြားကို စုပျပေးလိုကျသညျ။ ထိုသို့ဖွငျ့ လေးဦးစလုံး ကမ်ဘာလောကကွီးကို မလြေ့ော့ကာ ကာမပှဲတျောကွီးကို အပွိုငျအဆိုငျနှဲနကွေတော့သညျ။ သီတာတျောတျောမောလာသဖွငျ့ ဇျောရဲလီးကွီးအားနှုတျကာ ဇျောရဲကိုယျပျေါမှဆငျးလိုကျပါသညျ။ စောကျဖုတျတခုလုံးကတော့ ရှဲစိုနပေါသညျ။ ထို့နောကျ ဇျောရဲလီးကွီးကို စုပျပေးပွီး `ကဲ ဇာခွညျ မောငျလေးပစ်စညျးကို မွညျးကွညျ့လိုကျဦး` `ဟယျ နငျတို့ပွောပုံနဲ့ ငါကွောကျလာပွီ` ဟု ဇာခွညျက ရှကျရှံ့သောဟနျဖွငျ့ ပွနျပွောလိုကျသညျ။ ဇျောရဲက ဇာခွညျကို ပကျလကျလှနျစပွေီး ဇာခွညျ၏ ခွခြေောငျးလေးမြားကို စုပျပေးပါသညျ။ မဆှတျခငျကညှတျခငျြသညျဆိုသညျ့ မွနျမာစကားအတိုငျး ဇာခွညျတယောကျ ဇျောရဲလီးကွီး သူမ၏ စောကျဖုတျထဲ မသှငျးမီကပငျ ဖီလငျတှတေကျနပေါသညျ။ ဇာခွညျ၏စောကျဖုတျကို နောကျတကွိမျထပျပွီး စုပျပေးလိုကျပါသညျ။
စောကျဖုတျအတှငျးမှ ကာမအရညျမြား တံတှေးမြားဖွငျ့ ရှဲစိုနမှေပငျ စုပျခွငျးလြှကျခွငျးကိုရပျပွီး လီးကွီးကိုကိုငျကာ ဇာခွညျ၏စောကျဖုတျဝကိုတထေ့ားလိုကျပါသညျ။ `မောငျလေး ဖွညျးဖွညျးနျော၊ မမအဖုတျလေးကှဲသှားလိမျ့မယျ` ဇျောရဲကတော့ စိတျရှညျသသေပျစှာဖွငျ့ ဇာခွညျ၏ စောကျဖုတျအဝကလေးကို တကေ့ာ သှငျးကွညျ့လိုကျသညျ။ ဇာခွညျ၏စောကျဖုတျဝက မမခြို မသီတာတို့နှငျ့မတူဘဲ တအားကွပျနသေညျကို သတိထားမိသညျ။ ဇျောရဲကတော့ စားနကွေကွောငျပါးပီပီ စိတျရှညျစှာဖွငျ့ ပွုမူရမညျကို သိနသေညျ။ လီးကွီးကို မမခြိုပါးစပျသို့တပေ့ေးပွီး စုပျခိုငျးလိုကျသညျ။ မမခြိုကလညျး အလိုကျသိစှာ တံတှေးမြားရှဲနအေောငျစုပျပေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ဇာခွညျ၏ စောကျဖုတျလေးအတှငျးသို့ ထပျမံထိုးထညျ့လိုကျသညျ။ `အောငျမလေးလေး …. သပေါပွီမောငျလေးရယျ။ မမအဖုတျလေးကှဲသှားပွီလားမသိဘူး။
နာလိုကျတာ` ဟုတျပါသညျ။ ဇာခွညျနာမညျဆိုလညျးနာလောကျပါသညျ။ ဇာခွညျ၏ မို့ဖောငျးသော စောကျဖုတျအဝလေးဖွငျ့ မလိုကျဖကျစှာပငျ ဇျောရဲ၏ လီးဒဈကွီးက ဝငျသှားပါသညျ။ ခကျြခငျြးပငျ စောကျဖုတျနှုတျခမျးသားမြားနီရဲလာပါသညျ။ မမခြို၏ တံတှေးမြားကွောငျ့သာလြှငျ ဤမြှဝငျနိုငျခွငျးဖွဈသညျ။ စောကျစရေဲ့ရဲလေးကို လကျဖွငျ့ ကစားပေးလိုကျပွီး ခတ်ေတမြှ ငွိမျပေးလိုကျသညျ။ စောကျစကေို့ ပှတျသပျပေးသောအရသာကွောငျ့ ဇာခွညျတယောကျ နာကငျြမှုမြားကိုမလြေ့ော့ကာ အရသာထူးမြားကို စတငျခံစားစပွုမိနပွေီဖွဈပါသညျ။
ထို့နောကျ ဇျောရဲတယောကျ ဇာခွညျ၏ ပေါငျမြားကိုပိုမွှောကျလိုကျပွီး ဖငျကွီး ၂ လုံးအောကျသို့ ခေါငျးအုံးတလုံးကို ခုလိုကျပါသညျ။ ထိုသို့ခုလိုကျသညျနှငျ့ စောကျဖုတျအဝမှ ပိုကယျြသှားပွီး ဇျောရဲ၏ လီးကွီးအား ပိုမိုဝငျရောကျလာစရေနျ ဖိတျချေါသကဲ့သို့ ဖွဈလာပွီး လီးကွီးသညျလညျး ဇာခွညျ၏ စောကျဖုတျလေးအတှငျးသို့ ၁ လကျမခနျ့မြှ ဝငျသှားပွနျပါတော့သညျ။ ဇျောရဲလညျး ဇာခွညျ့အပျေါ မမခြိုနှငျ့ မသီတာတို့ ၂ ဦးထကျ ဂရုစိုကျနရေသဖွငျ့ ကာမအရသာကို ကောငျးစှာခံစားနိုငျခွငျးမရှိသေးပါ။ သို့သျော ဇာခွညျနှငျ့ ဆကျဆံရခွငျးအပျေါတှငျ အရသာတမြိုး ကောငျးစှာရရှိနသေညျကိုတော့ သတိထားမိလိုကျပါသညျ။ စောကျဖုတျတိုငျး၏အရသာသညျ ပွုမူဆကျဆံခွငျးပျေါတှငျမူတညျပွီး ကှဲပွားနိုငျသညျကို ဇျောရဲကောငျးစှာသိပါသညျ။ ၁၅ မိနဈခနျ့မြှ စိတျရှညျစှာသှငျးပွီးခြိနျတှငျတော့ ဇျောရဲ၏လီးကွီးတခုလုံးနီးပါး ဇာခွညျ၏စောကျဖုတျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျသှားပွီဖွဈပါသညျ။
`အောငျမလေးမောငျလေးရယျ။ နာလိုကျတာ။ အောငျ့လညျးအောငျ့တယျ။` ဟု ဇာခွညျက ရှုံ့မဲ့စှာဖွငျ့ပွောလိုကျသညျကို ဇျောရဲတယောကျ တပျမကျစှာကွညျ့နလေိုကျပါသညျ။ မမခြိုက သူ၏လီးကွီးကို ဇာခွညျ့စောကျဖုတျတှငျးမှနှုတျကာ ပါးစပျဖွငျ့ စုပျပေးပွနျပါသညျ။ မမခြို၏ ကောငျးမှနျလှသောစုပျပေးမှုကို ဇျောရဲကောငျးကောငျးခံစားလိုကျပါသညျ။ ထို့နောကျ ဇာခွညျ၏ တငျးကွပျလှသော စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးထဲသို့ ထိုးသှငျးလိုကျပွနျပါသညျ။ ယခုတကွိမျတှငျတော့ ဇာခွညျတယောကျ စောကျစကေို့ပှတျတိုကျသော လီး၏အရသာ၊ သားအိမျကိုဆောငျ့မိသောလီး၏အရသာ၊ စောကျဖုတျတခုလုံး တငျးကွပျစှာထိုးထညျ့ခံထားရသော အရသာတို့ဖွငျ့ ကာမအရသာကို စတငျခံစားရရှိခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။ ထို့အတူပငျ မမခြိုတို့သညျလညျး ဇျောရဲနှငျ့ ဇာခွညျတို့၏ ဆကျဆံနပေုံကိုကွညျ့ရငျး ဇျောရဲလီးကွီးအား အခကျြ ၂၀ ခနျ့ အသှငျးအထုတျလုပျပွီးတိုငျး စုပျပေးရသညျကို ကနြေပျနမေိသညျ။
ထို့နောကျ ဇာခွညျ၏ နီရဲနသေော စအိုဝ ဖူးဖူးမို့မို့လေးအား သီတာမှ လကျဖွငျ့ဆော့ကစားပေးလိုကျပွနျပါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျတော့ ဇာခွညျတယောကျ လောကကွီးကို မလြေ့ော့စပွုနပွေီဖွဈသညျ။ စိတျနှငျ့ လူ မကပျတော့သလောကျပငျဖွဈနပေါပွီ။ ဇျောရဲလီးကွီး တခကျြထုတျလိုကျတိုငျး လြှာဖြားကလေးဖွငျ့ ဇာခွညျ၏စအိုဝကလေးကို တို့ထိကစားပေးလိုကျပါသညျ။ ထိုအခြိနျတှငျ ဇာခွညျ၏ ဖငျကွီးတခုလုံး ကွှတကျကော့ပြံလာပွီး ဇျောရဲလီးကွီးအထုတျအသှငျးပွုမှုအား ကူညီပေးသလိုပငျဖွဈနပေါတော့သညျ။ ၁၅ မိနဈခနျ့ ကွာသောအခါ ဇာခွညျတယောကျ ကာမအရသာအထှဋျအထိပျနီးပါမြှ ရရှိခံစားနရေပွီဖွဈပါသညျ။
စောကျစထေိ့ပျဖြားမှ အရသာထူးကို ဆကျလကျခံစားနိုငျစှမျးမရှိတော့ပါ။ ထို့အတူ ဇျောရဲ၏ အသှငျးအထုတျမြားသညျလညျး ပိုမိုမွနျဆနျလာပါသညျ။ `အိုး မောငျလေးရယျ မမပွီးတော့မယျ၊ မမပွီးတော့မယျ။ အား …………………… ပွီး ……..ပွီ ………………..အား…………………. အိုး` ဟု အျောကာ ဇျောရဲကို တငျးကွပျစှာဖကျပွီး ပွီးသှားပါလတေော့သညျ။ ဇျောရဲတယောကျလညျး ဇာခွညျ့စောကျဖုတျ၏ တငျးကွပျလှသောအတှအေ့ထိထူးမြားနှငျ့ စောကျဖုတျ ၃ ခုလုံးကို မနားတမျးအသှငျးအထုတျလုပျရသဖွငျ့ ကာမအထှဋျအထိပျခရီးသို့ ရောကျခါနီးနပွေီဖွဈပါသညျ။ `မောငျလေး မမပွီးသှားတော့ မခံနိုငျတော့ဘူး၊ မငျးရဲလီးကွီးကိုနှုတျလိုကျပါတော့နျော` ဟု ဇာခွညျကတောငျးဆိုသဖွငျ့ သူ၏ လီးကွီးအား ဇာခွညျ့စောကျဖုတျတှငျးမှ ညငျသာစှာနှုတျယူလိုကျပါတော့သညျ။ ထို့နောကျသီတာ့ကို လေးဖကျကုနျးခိုငျးလိုကျပါသညျ။
သီတာ၏ အတနျငယျညိုစိမျ့သျောလညျး ဝငျးနသေောအသားအရကွေောငျ့ ဖငျသားကွီးမြားမှာ ဝငျးအိနပေါသညျ။ ဖငျကွီး ၂ လုံးကွားမှ စောကျဖုတျတခုလုံးသညျ နောကျပိုငျးသို့လှပစှာထှကျလာပါသညျ။ ဇျောရဲက သူ၏လီးကွီးကို သီတာ၏စောကျဖုတျတှငျးသို့ သှငျးလိုကျပါသညျ။ အငျ့ကနဲ့ညညျးသံနှငျ့အတူ သီတာတယောကျ ခေါငျးအုံးမြားကို အလနျ့တကွားဆှဲယူကာ သူ၏ နို့အုံကွီးမြားအောကျသို့ ပှပေို့ကျထားလိုကျပါသညျ။ ဇျောရဲကတော့ အရသာထူးမြားကို ဆကျလကျရရှိလိုစိတျပွငျးပွစှာဖွငျ့ ထပျမံဆောငျ့သှငျးကာ အသှငျးအထုတျမြားကို ယခငျဆကျဆံခြိနျကထကျ ပိုမို၍ လုပျဆောငျပါလတေော့သညျ။ ယခုတခေါကျ ဆကျဆံရသညျမှာ သီတာအဖို့ လထေဲလှငျ့သလိုဖွဈနပေါသညျ။ သားအိမျအတှငျးမှအောငျ့သျောလညျး စောကျစကေို့လီးကွီးဖွငျ့ အဖနျဖနျပှတျတိုကျသောကွောငျ့ ပွီးခငျြစိတျမြားဖွဈလာပါသညျ။
ဇျောရဲသညျလညျး သီတာ၏ ကွီးမားလှပသောဖငျကွီး ၂ လုံးကွားမှ စောကျဖုတျကို အသှငျးအထုတျလုပျရသညျ့စညျးစိမျ၏ အကောငျးဆုံးအရသာထူးကို ရရှိနသေဖွငျ့ ပွီးခငျြစိတျမြားဖွဈနပေါပွီ။ သူတို့ ၄ ဦး၏ ဆကျဆံခြိနျကလညျး ၁ နာရီနီးပါးမြှရှိနပေါပွီ။ ဇျောရဲ၏ သုတျထိမျးနိုငျမှုကိုလညျး သီတာနှငျ့ ဇာခွညျ အံ့သွလို့နပွေနျသညျ။ ဟုတျပါသညျ ဇာခွညျ၏ သတို့သားလောငျးဗိုလျမှူးအောငျနိုငျဝငျးကတော့ ပစ်စညျးကသေးပွီး သုတျလှတျတာကပြွနျတော့မွနျလှနျသညျ။
ဇျောရဲကတော့ ဤသို့မဟုတျ ကာမအရသာအကောငျးဆုံးပေးနိုငျသညျ့ မမကွီးတှနှေငျ့ ပငျ သူ့စိတျကို ထိမျးနိုငျလှနျးသညျ။ ဇာခွညျတယောကျ ဇျောရဲ လီးကွီးကို စှဲမကျသှားခဲ့ပွီဖွဈပါသညျ။ `အား မမရေ ….. ကြှနျတျောပွီးတော့မယျ။ ပွီးတော့မယျ၊ အရမျးကောငျးနပွေီ၊ အရမျးကောငျးနပွေီ။ အိုး …………… ရှီး ………………………..အား` `မောငျလေး …… မမလညျးပွီးတော့မယျ၊ မွနျမွနျလေးလုပျပေးပါ၊ မမကှဲသှားရငျလညျး ကှဲပါစတေော့။ ပွီးတော့မယျမောငျလေးရယျ။` သီတာကလညျး မောဟိုကျလှိုကျဖိုစှာဖွငျ့ ဇျောရဲ၏ ခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ခကျြမြားကို တောငျးဆိုလိုကျကာ သူ၏ ကွီးမားသောဖငျကွီးကို ကော့ပေးလိုကျသညျ။
ဇျောရဲတယောကျ အပွငျဆုံးနှငျ့ အကွမျးဆုံးသော ဆောငျ့ခကျြ ၁၅ ခကျြကို ရမ်မကျထနျစှာဖွငျ့ သီတာ၏ စောကျဖုတျထဲသို့ ဆောငျ့ပေးလိုကျသညျ။ ထို့နောကျ ……. `အား ……….. ပွီး ပွီး ပွီးပွီ` ဟု သီတာမှရရှေတျလိုကျပွီး မရှေးမနှောငျးပငျ ဇျောရဲတယောကျ သီတာ၏စောကျဖုတျတှငျးမှ လီးကွီးကိုနှုတျကာ သုတျရညျမြားကို ဖငျကွီးပျေါသို့ အားပါးတရ ပနျးခလြိုကျပါတော့သညျ ………ပွီးပါပွီ။
ဇော်ရဲသည် ရန်ကုန်မှာမွေးသော ရန်ကုန်သားတယောက်၊ ရန်ကုန်ကနေ အေဝးသင်နှင့် ဘွဲ့ရထားသူ။ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ဗလတောင့်တောင့်။ အသားကခပ်လတ်လတ်၊ ရည်းစားရယ်လို့ အတည်တကျမထားဘဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ထည်လဲတွဲတတ်သည်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးနုနုရွရွလေးတွေကိုတော့ အနမ်းလေးတွေပေးရုံshopping ထွက်ရင်တွဲကောင်းရုံမျှသာနေတတ်ပြီး၊ ခပ်ကဲကဲတွေနှင့်ဆိုလျှင်တော့ သူကလည်း ကဲပေးလိုက်သည်။ သူ့မိဘတွေက အဖေက ဌာနတခုက ညွန်မှူးတယောက် အမေက ဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွင် ရတနာကုန်သည်တယောက်။ တဦးတည်းသောသား ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောဆိုတော့ အကောင်ကြီးကြီးသမီးတွေကအစ လက်ထပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းသည်ကိုတောင် ခံရသူ။ သို့သော် အိမ်ထောင်ကျသွားလျှင် ဆုံးရွုံးသွားမည့် လူပျိုအခွင့်အရေးတွေကို သူကောင်းကောင်းသိသည်။ ဒါ့ကြောင့် အမေကိုပူဆာ၊ အဖေ့ပါဝါကိုသုံးပြီး ပန်းဆိုးတန်းလမ်းပေါ်မှာ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်အကြီးကြီးတခုကို သူဖွင့်လိုက်သည်။ သူဆိုင်ဖွင့်ပြီး ၃ လလောက်အတွင်း ဆိုင်နာမည်က တရှိန်ထိုးတက်လာသည်။ သူ့ရဲ့ပြောဆိုတတ်မွု၊ သူ့ရုပ်ရည်ကြောင့် အမျိုးသားဖောက်သည်တွေထက် အမျိုးသမီးဖောက်သည်တွေက ပိုများလာသည်။
ဘေးဆိုင်များ၏ မနာလိုခြင်းကိုလည်း ပိုခံရလာသည်။ သို့သော် သူ့အလုပ်သူမှန်မှန်လုပ်ခြင်းကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်အားလည်း သိပ်ဂရုမစိုက်ဖြစ်ခဲ့။ အလုပ်မအားသော်လည်း တရုတ်တန်းတွင်ရှိသည့် weight club အားလည်း မပျက်တမ်း မှန်မှန်သွားဖြစ်ခဲ့သည်။ လေးလလောက်အတွင်းတွင် ဖောက်သည်တော်တော်များများကို မှတ်မိလာခဲ့ပြီး၊ ထိုအထဲမှ ( ) တပ်မှ ဗိုလ်မှူးကတော်တယောက်ဖြစ်သည့် ဒေါ်ချိုသူဇာမြင့်ကိုလည်း ကောင်းကောင်းရင်းနှီးလာခဲ့သည်။ ဒေါ်ချိုသူဇာမြင့်မှာ အမျိုးသားရှိသည့်တပ်သို့ စနေတနင်္ဂနွေမှသာပြန်နိုင်ပြီး တက္ကသိုလ်ဆရာမအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ပါရဂူစာမေးပွဲဖြေရန် ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည်။ အသားဖြူဖြူ လုံးကြီးပေါက်လှ ဒေါ်ချိုသူဇာမြင့်ဈေးဝယ်လာချိန်တွင် အားလုံးသော ယောက်ျားမိန်းမမကျန် ငေးမောကြရသည်။ ထိုအထဲတွင် ဇော်ရဲတယောက်လည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ လှပသော အသားစိုင်များပေါ်တွင် ပိုးသားလို ပျော့အိသည့် အဝတ်မျိုးကိုမှ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်သည့် ဒေါ်ချိုသူဇာမြင့်ကို ဇော်ရဲတယောက် အိပ်မက်တွင် ထည့်မက်ဖြစ်သည့်အကြိမ်တွေရှိနေတတ်ပြီ။
သူ့ကိုယ်သူ မမချိုဟု နာမ်စားသုံးပြီးပြောတတ်သည့် မမချိုကလည်း ဇော်ရဲဆိုင်ကိုမှပဲ ဆိုင်ထင်နေသည်လားမသိ။ လေအေးပေးစက်မှအစ လျှပ်စစ်မီးပူအဆုံး သူ့ဆိုင်ကိုပဲအားပေးခဲ့သည်လေ။ ဇော်ရဲကလည်း ဇော်ရဲပေပဲ။ လက်မ ၄၀ လောက်ရှိမည့် တင်သားအိအိထွားထွားကြီးတွေ၊ ၃၆ လက်မထက်မလျော့သည့် ရင်သားနှစ်မွာ၊ ခါးကျဉ်ကျဉ်ကလေး။ လမ်းလျှောက်တိုင်း ဖင်လုံးကြီးတွေကို စည်းချက်ကျကျ လှပအောင်လျှောက်တတ်သည့် မမချို ဈေးဝယ်လာတိုင်း ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးကိုယ်တိုင် ဧည့်ခံဖြစ်ခဲ့သည်။ `မောင်လေးဇော်ရဲရေ … ဒီတခေါက် မမတို့ ကျောင်းပိတ်ရက် ချောင်းသာသွားမယ်၊ မောင်လေးလိုက်မလား `ကောင်းသားပဲမမ၊ နေဦး ကျွန်တော် ဆိုင်ကို ကျွန်တော့်မန်နေဂျာနဲ့ထားလို့ဖြစ်မဖြစ် ကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်` `မောင်လေးလိုက်ဖြစ်ရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှပဲကွယ် အိမ်ကအမျိုးသားကလည်း တာဝန်နဲ့ဆိုတော့ မမကို လိုက်ပို့နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။
လူလည်းသိပ်မများတော့ အဖော်အဖြစ်လိုက်စေချင်တယ်။` `ဟုတ်ကဲ့မမချို၊ ကျွန်တော်ညနေလောက် အကြောင်းပြန်ရင်ဖြစ်မလား။ ကျွန်တော့်မန်နေဂျာကို တာဝန်ပေးထားချင်လို့` `ရတယ်မောင်လေး၊ မနက်ဖြန်မှ မမသူငယ်ချင်းတွေလည်း လိုက်မလိုက်သိရမှာ` ဇော်ရဲရင်ထဲမှာတော့ ဗုံးတွေအဆတရာမက ပေါက်ကွဲနေပြီလားမသိ၊ အခုမှ ရည်းစားထားဖူးတဲ့သူလို ရင်တွေဘာတွေခုန်နေပြန်သည်။
ဒီလိုနဲ့ ဇော်ရဲတယောက် ဆိုင်ကို မန်နေဂျာကောင်းမြင့်နဲ့ တာဝန်လွဲပေး၊ မမချိုဆီဖုန်းဆက်အကြောင်းပြန်၊ အဝတ်အစားတွေပြင်ဆင်နဲ့ ချောင်းသာအပန်းဖြေခရီးကိုထွက်ဖို့ စီစဉ်လိုက်ခဲ့သည်ပေါ့။ မနက်စောစော သူ့အိမ်ရှေ့ကို Pradoကားအနက်ရောင်တစီးလာဆိုက်သည်။ သူ့အထုပ်အပိုးတွေ ကင်မရာတွေနဲ့ ကားပေါ်တက်လိုက်တော့ အမျိုးသားဆိုလို့ သူ့တယောက်ထဲ။ `လာမောင်လေး၊ လွိုင်သာယာအထိတော့ မမမောင်းမယ်။ မနက်စာစားပြီးရင် မောင်လေးက ချောင်းသာအထိမောင်းပေး၊ အဆင်ပြေလား` `ဟုတ်ကဲ့မမချို` ဆိုင်ရောက်တဲ့အထိ မမချိုကလွဲလို့ နောက်ခန်းမှာထိုင်လာတဲ့ မမ ၂ ယောက်နဲ့ အသိမဖြစ်သေး၊ မမချိုနဲ့ စကားပြောရင်း လမ်းမှာရိုက်ဖို့ သူကင်မရာကို စစ်ဆေးရင်း လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ ဆိုင်ထဲရောက်သည်နှင့် စားပွဲဝိုင်းမှ လူတွေအားလုံးအကြည့်က သူ့တို့လေးယောက်ဆီကို ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ကြည့်ချင်ကြပေမပေါ့။ သူက မင်းသားလိုအပျံစား၊ မမချိုက နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ကလည်း မမချိုလိုပဲ ခပ်တောင့်တောင့် အသားညိုစိမ့်စိမ့်နဲ့ မမက မမချိုထက်တောင် ဖင်ကြီးက ပိုကြီးသေးသည်။ `ကဲ၊ သူငယ်ချင်းတို့နဲ့ မောင်လေးကို မိတ်ဆက်ပေးရဦးမယ်` `ဒါက မမသူငယ်ချင်းတွေ သူက ခင်သီတာမျိုး` အသားညိုစိမ့်စိမ့် ဖင်ကြီးကြီး မမကြီးကို လက်ဆွဲနွုတ်ဆက်လိုက်ပြီး `တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်မမ၊ ကျွန်တော်ဇော်ရဲပါ` `ချိုကပြောလို့ မောင်လေးအကြောင်းကြားဖူးနေတာ။ မမလည်းဝမ်းသာပါတယ်` `ဒါက ဇာခြည်ဝင်း` ထုံးစံအတိုင်း လက်ဆွဲနွုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဒီမမကတော့ မမချိုထက် ဖင်နည်းနည်းသေးသည်။ ၃၈ လက်မလောက်တော့ရှိမည်။ အသားဝင်းဝင်းနှင့်။ `သီတာက ( ) ဌာနက ဦးစီးအရာရှိလေ။ သူ့အမျိုးသားက တရုတ်ပြည်ကို သင်တန်းသွားနေတယ်။ ဇာခြည်ကတော့ သူနဲ့ယူမယ့် တပ်ကအရာရှိက ဗထူးမှာ သင်တန်းမပြီးသေးဘူး။ မမတော့ ကျောင်းပိတ်ရက်အားတယ်။ သူတို့ကတော့ ခွင့် တပတ်စီယူလာကြတယ်။
မောင်လေးရော အားရဲ့လား` `ဟုတ်ကဲ့ အားပါတယ်မမ၊ ကျွန်တော် ချောင်းသာကနေ ကျွန်တော့်မန်နေဂျာကို လှမ်းပြီး အလုပ်ကိစ္စတွေ ညွန်ကြားလို့ရပါတယ်` `ကောင်းသားပဲ၊ ကဲ စားပြီးရင် မမတို့ သွားကြရအောင်` ဒီတခေါက် ဆိုင်ကအထွက်တွင်တော့ မမက သူ့လက်ကိုတွဲလိုက်သည်ကို သတိထားမိလိုက်သည်။ ဆိုင်ကလူတွေကတော့ ထုံးစံအတိုင်း နတ်ပြည်ကကျလာသည့် နတ်သမီးနတ်သားတွေအလား ငေးမောကျန်ခဲ့သည်။ လမ်းဘေးကရွုမျှော်ခင်းတွေဖြတ်သန်းရင်း ကားကိုဂရုတစိုက်မောင်းပြီး ချောင်းသာခရီးကို ပျော်ရွင်စွာလာခဲ့မိသည်။ ချောင်းသာကိုရောက်တော့ နေ့လည် ၂ နာရီထိုးပြီ။ ဟိုတယ်ကို မမချိုက လှမ်းပြီး ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသဖြင့် ဧည့်ခန်းတွင် သော့ယူပြီး သက်ဆိုင်ရာ ဘန်ဂလိုလေးများဆီသို့ လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြသည်။ ၂ ယောက်ခန်း ၂ ခန်းပဲ ယူထားသည်ကို သူတွေလိုက်ရပြီး အညှိုခံထားရသူတယောက်လို ကင်မရာကိုလွယ်ရင်း မမချိုနောက်မှပါလာခဲ့သည်။
သူ့နောက်မှာ အထုပ်အပိုးတွေနှင့် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများသာရှိတော့သည်။ သူလည်း မမချိုတို့တင်သားကြီးတွေကိုကြည့်ရင်း အခန်းဝရှေ့သို့ ရောက်လာခဲ့သည်။ အခန်းယူထားပုံက မမချိုနှင့် သူနှင့်က တခန်း၊ သီတာနှင့် ဇာခြည်နှင့်ကတခန်း၊ အခန်း ၂ ခန်းလုံးက ဘန်ဂလိုလေးတခုထဲတွင်ရှိသည်။ မမချို၏ ပိရိသေသပ်ခြင်းကတော့ သူရင်ခုန်ချိန်ပင်မရတော့။ `ကဲမောင်လေး အေးအေးဆေးဆေးနားပေတော့၊ တလမ်းလုံးကားမောင်းလာရတာ။ ပြီးမှ ပင်လယ်ရေစိမ်ရအောင်` `မမတို့နဲ့လာရတာပျော်လား` `ဟုတ်ကဲ့မမ၊ ကျွန်တော်အရမ်းပျော်ပါတယ်` `ကဲမမတော့ ရေချိုးမယ်။ မောင်လေးရော ချိုးတော့မလား` `မမအရင်ချိုးလေ၊ ကျွန်တော်ပြီးမှချိုးမယ်` `လုပ်မနေပါနဲ့ မမနဲ့ အတူတူချိုးလိုက်ရအောင်၊ အချိန်ကုန်သက်သာတာပေါ့။ ပြီးရင်တခုခုသွားစားကြမယ်လေ` ဟုပြောရင်း မမချိုက သူ့ဆံနွယ်များ ထုံးဖွဲ့ထားသည်ကို ဖြေလိုက်သည်။
ပိုးပျော့ထမီကို ချွတ်ချလိုက်ချိန်တွင်တော့ ဇော်ရဲတယောက် မျက်လုံးများပင်ပြူးကျယ်သွားရသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် မမချို၏ တင်သားထွားထွားကြီးများပေါ်တွင် အောက်ခံဘောင်းဘီသေးသေးတခုသာလျှင် မနိုင်နင်းသောတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျှက်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အပေါ်အင်္ကျီလေးကို ထပ်မံချွတ်လိုက်ပြီး ဘရာစီယာလေးနှင့် အောက်ခံဘောင်းဘီလေးသာကျန်ချိန်တွင်တော့ ဇော်ရဲတယောက် အာစေးထည့်ထားသူလို ဘာမျှမပြောနိုင်တော့ချေ။ `လာလေမောင်လေးရဲ့ ဘာငေးနေတာလဲ၊ မိန်းမတွေကို မမြင်ဘူးလို့လား` `မဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးမမ၊ မမလောက်လှတာကိုတခါမှ မမြင်ဘူးလို့ပါ` `အမယ် မြှောက်နေပြန်ပြီ အချင်းချင်းတွေကို၊ ကဲ မင်းလည်း အဝတ်အစားတွေ ချွတ်တော့လေ` ` …. …. ဟုတ် ဟုတ်ကဲ့` သူပြောပြီးချိန်တွင်တော့ အတွင်းခံသေးသေးလေးများက မနိုင်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ရင်း မမချို သူ့အနားသို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။
သူ ရှပ်အင်္ကျီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချွတ်နေချိန်မှာ မမချိုက သူ့ဘောင်းဘီဇစ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲနေတာကို သတိထားလိုက်မိသည်။ ဘောင်းဘီတင်းနေတာကိုတော့ သူကောင်းကောင်းသိနေပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးက မမချိုကို တောင့်တလာနေပြီလေ။ ဇစ်ဖြုတ်ပြီး ဘောင်းဘီကိုဆွဲချလိုက်ချိန်မှာ သူ့အပေါ်ပိုင်းတွင်လည်း ဘာမှ မရှိတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီသာကျန်ခဲ့ပြီး အောက်ခံဘောင်းဘီမှာ ဖောင်းကားနေသည်ကို မမချိုသတိထားမိသွားပါသည်။ သူမ၏ ဖောင်းဖောင်းပြည့်ပြည့် လက်အစုံက သူ့ပေါင်ကြားဆီသို့ အောက်ခံဘောင်းဘီကိုချွတ်ချရန် ရွေ့လျားလာခဲ့သည်။
သူ့ပေါင်ကြားထဲသို့ လက်ကလေးများရောက်ရှိလာချိန်တွင်တော့ `အားပါးပါး နည်းတာကြီးမှ မဟုတ်တာမောင်လေးရယ်၊ ဒါကြီးနဲ့သာဆို ဆွေမျိုးတော့ မေ့သွားတော့မှာပဲ` ဟုတ်ပါသည်၊ ဇော်ရဲတယောက် ဗလတောင့် အရပ်မြင့်သလို သူ့ လီးကြီးကလည်း ၉ လက်မခွဲရှိပါသည်။ ဗမာတယောက်အနေနှင့်တော့ စူပါစံချိန်မီသူတယောက်ပေါ့။ မမချိုကတော့ ယောက်ျားရှိပေမယ့် ဒါမျိုးကို ကြုံဖူးသေဟန်မတူပါ။ `မမချို ယောက်ျားကရော ကျွန်တော့်လိုပဲလား။ အတူတူပဲမဟုတ်လား` ဇော်ရဲတယောက် သိသိကြီးနှင့် မေးခွန်းထုတ်လိုက်သည်။ `ဘယ်ကလာ သေးသေးလေးရယ်။ ဒါပေမယ့် စစ်သားမို့လားမသိဘူး ဆက်ဆံတာတအားကြမ်းတယ်။ ပြီးတော့ ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ကဲပါ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်ပါဦး` သူဘောင်းဘီချွတ်ပြီးချိန်တွင်တော့ မမချို အရင်ကထက်မျက်လုံးများပြူးကျယ်သွားပြီး သူ့လက်ညှိုးလေးကို ပါးစပ်ထဲကိုက်ကာ ထိတ်လန့်သည့်အမူအယာများ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့သည်။
မမချို လန့်မည်ဆိုလည်း လန့်လောက်သည်ဟုထင်ပါသည်။ သူ၏ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော လီးကြီးက မာန်ဖီနေသော မြွေတကောင်ပမာ ထောင်မတ်လို့နေသည်။ မမချို အတန်ကြာသည်အထိ မကိုင်ဝံ့သေးဘဲ ကြက်သေသေနေသည်။ ဇော်ရဲကိုဦးဆောင်မည်ဟု ထင်ရသူက အခုတော့ ယုန်သူငယ်လေးပမာ၊ ကြီးမားသော တင်သားအိအိကြီးတွေကိုမှ အားမနာနိုင်ဘဲ ငြိမ်သက်နေပြန်သည်။ `လာပါ မမချိုရဲ သူက လိမ္မာပါတယ်။ မမချို နောက်ပြီးကျရင် သူနဲ့ ဘော်ဒါဖြစ်သွားမှာပါ` `မင်းလေးကတော့ အပြောသိပ်ကောင်းတယ်။ မမကတော့ ရင်တုန်နေပြီ။ မမယောက်ျားနဲ့တောင် သူက ကြမ်းတာတခုပဲတတ်တာ။ သူ့ပစ္စည်းက ရင်ခုန်စရာမကောင်းဘူး။ အခု မင်းဟာကြီးကတော့ မမအပြတ်ခုန်နေပြီ` မမချိုပြောအပြီးတွင် မမချို၏ နောက်ကျောသားနုနုလေးများကို သူ့၏ကြီးမားသန်မာသော လက်ကြီးများဖြင့် သိုင်းဖက်လိုက်ပြီး မမချို၏ ဖူးငုံနေသော နှင်းဆီရောင်နွုတ်ခမ်းလွာ ၂ ချပ်အား ညင်သာစွာ သူ၏နွုတ်ခမ်းများဖြင့် စုပ်ယူလိုက်သည်။ မမချို၏ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးမှတဆင့် မမချို၏ကြီးမားလှပသော နို့အုံကြီးများအား ဖြည်းဖြည်းချင်း ပွတ်ချေပေးနေမိသည်။
မမချိုထံမှ ညည်းသံတချို့ထွက်ပေါ်လာချိန်တွင်တော့ မကျမ်းကျေနေပြီဖြစ်သည့် ဇော်ရဲတယောက် မမချို၏ ဘရာစီယာကလေးအား ဖြုတ်ပြီးဖြစ်နေပါတော့သည်။ ထို့နောက် လက်ကို တဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်သို့ ရွေ့လျားလာခဲ့ပြီး မမချို၏ ကြီးမားစွင့်ကားလှသော တင်သားစိုင်ကြီးများအား ဆုပ်နယ်ပြန်ပါသည်။ မမချို၏ မျက်တောင်ကော့များ မှေးစင်းလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ပင်ပန်း၍၊ အိပ်ချင်၍ မဟုတ်သည်ကိုတော့ ဇော်ရဲတယောက် သေချာစွာသိနေပါသည်။ မမချို၏ တင်သားကြီးများပေါ်တွင် မနိုင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရသော ဘောင်းဘီလေးအား ဘေးနားမှ ချည်ထားသော ကြိုးစလေးအားဆွဲဖြေ၍ အနားပေးလိုက်ပါသည်။ လက်ကို တင်သားစိုင်များမှတဆင့် ကာမ၏ အဖူးအညွန့်များ ဆုံစည်းရာနေရာဆီသို့ လက်လှမ်းချိန်တွင်တော့ `အိုး မောင်လေးရယ်၊ ရင်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲကွယ်၊ မမ ရင်တွေအရမ်းခုန်နေတယ်` ဟူသော ရွိုက်သံပါသည့် စကားသံကို ဇော်ရဲကြားလိုက်ရပါသည်။ ထို့နောက် မမချိုကိုပွေ့ပြီး မွေ့ယာပေါ်သို့ တင်လိုက်ပါသည်။ မမချို၏ ကြီးမားလှသော နို့အုံကြီးများပေါ်မှ နို့သီးခေါင်းနီနီရဲရဲလေးများကို လျှာဖြင့် ပွတ်သပ်စုပ်ယူရင်း အောက်ပိုင်းဆီသို့ ဇော်ရဲ ရွေ့လျားလာခဲ့ပါသည်။
မမချိုကတော့ အိပ်ယာခင်းစများကို လက်ဖြင့် မလွတ်တမ်းဆုပ်ကိုင်ရင်း ရင်ခုန်သံများ မြန်နေခဲ့ပါပြီ။ ဇော်ရဲတယောက် မမချို၏ ပေါင်ကြားအနီးသို့ လျှာဖျားရောက်ရှိချိန်တွင်တော့ … `မလုပ်ပါနဲ့မောင်လေးရယ် မမ ငရဲတွေကြီးကုန်ပါ့မယ်` ဇော်ရဲတယောက် မမချို၏ ဖောင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်အုံကြီးတခုလုံးကို သူ၏လက်ကြီးဖြင့် အထက်အောက်ပွတ်သတ်ပေးနေချိန်တွင် မမချိုတယောက် ကြက်သီးများ တကိုယ်လုံးထလာပါတော့သည်။ မမချို၏စောက်ဖုတ်မှာ ဘေးနွုတ်ခမ်းသားများ အလွန်ထူပြီး နွုတ်ခမ်းသားများမှာ သစ်ခွပန်းပွင့်ဖတ်များကဲ့သို့ဖြစ်နေပါသည်။ စောက်စေ့လေးကတော့ ရဲနေပါသည်။ စောက်ဖုတ်တခုလုံး အမွေးအမျှင်များကင်းစင်အောင် သန့်စင်ထားပြီး အနံ့အသက်လည်းကင်းစင်နေပါသည်။ ဇော်ရဲတယောက် မမချို၏ စောက်စေ့ရဲရဲလေးကို လျှာဖျားဖြင့် ဆော့ကစားလိုက်သည်။
`အိုး မောင်လေးရယ် ………… မမရင်ထဲတမျိုးကြီးပဲကွယ်` ထို့နောက် မမချို၏ စောက်ဖုတ်ဘေးနွုတ်ခမ်းလွာ ၂ ခုလုံးကို သူ့နွုတ်ခမ်းများဖြင့် ငုံစုပ်ယူလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်က မမချို၏ နို့အုံကြီးများကို ပွတ်ချေပေးနေသည်။ မမချိုတယောက် ဖင်ကြီးများကို ကော့ကာပေးလိုက်ပြီး ပါးစပ်မှလည်း ညည်းတွားသံများ တဖြည်းဖြည်း ပြင်းထန်လာလေတော့သည်။ ဇော်ရဲတယောက် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော အနမ်းဒဏ်များကို မမချိုခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ ကာမအရည်ကြည်များ ဖင်ကြားသို့ တလိမ့်လိမ့် စီးဆင်းစပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ `တော်ပါတော့မောင်လေးရယ်၊ ကြာရင် မမသေလိမ့်မယ်၊ မမရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်နဲ့၊ မမ တခါမှလည်း ဒီလိုအရသာမျိုး မခံစားဖူးပါဘူး။ အိုး …….` ဇော်ရဲတယောက် မမချို နို့အုံကြီးများကို ပွတ်ချေပေးနေရာမှ မမချို၏ အိပ်ရာခင်းစများကို ကိုင်ထားသည့် လက်နုနုလေးများကို သူ့လက်ကြီးဖြင့် ကိုင်ထားပြန်ပါသည်။ မမချိုကတော့ ကာမစည်းစိမ်များ စတင်တက်စပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့်မျှ မမချို စောက်ဖုတ်ကို အနမ်းတွေပေးနေရာမှ ဇော်ရဲတယောက် ရပ်လိုက်ပါသည်။
ထို့နောက် သူ၏ ကြီးမားထွားကြိုင်းလှသော လီးကြီးကို ကိုင်ကာ မမချိုလက်ထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်သည်နှင့် … `မောင်လေးရယ် ဒါကြီးနဲ့ဆို မမချိုတော့ သေတော့မှာပဲ` `မမကလည်း ကျွန်တော်က သေအောင်လုပ်ပါ့မလား၊ မမချို စိတ်ကျေနပ်အောင် ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါ့မယ်` `မင်းဟာကြီးက မမချိုတော့ ကွဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်` `မကွဲပါဘူး မမရယ်၊ ကျွန်တော်ပစ္စည်းကို စုပ်ပေးလေ` မမချိုက ဇော်ရဲလီးကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ထားရာမှ သူမ၏ နီရဲဖူးငုံနေသော နွုတ်ခမ်းအစုံဖြင့် ညင်သာစွာနမ်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် လျှာဖျားလေးဖြင့် လီးဒစ်ကို စတင်လျှက်ပါတော့သည်။ ဇော်ရဲတယောက် မျက်တောင်များမှေးစင်းသွားသည်အထိ အရသာကိုယူပစ်လိုက်သည်။ ဒစ်ကိုစတင်၍ မမချိုငုံချိန်တွင်တော့ … `အောင်မလေး ကြီးလိုက်တဲ့ဟာကြီး မမချိုပါးစပ်နဲ့တောင် မဆံ့တော့ဘူး။
မမအဖုတ်လေးတော့ ကွဲတော့မှာပဲ` ပြောရင်း မမချိုက ဇော်ရဲ၏ လီးဒစ်ကို စတင်စုပ်လိုက်သည်။ မမချိုကလည်း ခေသူမဟုတ်ပါ။ လီးကြီးကို စုပ်ယူပြီး ပြန်အထုတ်တွင် သူမ၏လျှာဖျားလေးဖြင့် လိပ်၍ပြန်ထုတ်ပေးသည်။ ဇော်ရဲလီးကြီးကို မမချို အဆုံးထိငုံပြီး စုပ်ဖို့ဆိုသည်မှာ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ထိပ်ဖျားပိုင်းကိုသာ အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးပြီး ဂွေးဥများကိုတော့ သူမ၏လက်ကလေးတဖက်က ပွတ်သပ်ဆုပ်နယ်နေလေသည်။ ဇော်ရဲတယောက် ကာမဆိပ်များ ထိုးတက်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ လီးတံတလျှောက် မမချို လျှာဖျားဖြင့် ဆော့ကစားချိန်တွင်တော့ မမချို၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လီးတဆုံးထည့်ပြီး ကာမစည်းစိမ်ခံလိုသည့်စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာပါတော့သည်။
မမချိုက လီးကို ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် စုပ်ပေးပြီးသည့်နောက် …. `မောင်လေး၊ မမနဲ့ နေတော့မလား` ဇော်ရဲတယောက် ပါးစပ်ကမဖြေနိုင်တော့ဘဲ ခေါင်းကိုသာညိတ်ပြလိုက်သည်။ ထို့နောက် မမချိုက သူမ၏ လှပဖြူဝင်းအိစက်သော ပေါင်များကို အပေါ်သို့မြှောက်ကာ ကော့ပေးရင်း အိပ်ယာပေါ်သို့ ညင်သာစွာ လှဲချလိုက်ပါတော့သည်။ ဇော်ရဲတယောက်ကတော့ သူ၏ တံတွေးအနည်းငယ်ကို သူ့လက်ထဲသို့ထွေးထုတ်လိုက်ပြီး မမချို၏စောက်ဖုတ် နွုတ်ခမ်းသားပတ်လည်ကို သုတ်လိမ်းလိုက်ပါသည်။ `မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းသွင်းနော်` ဇော်ရဲတယောက် ပြန်မဖြေအားပါ။ မမချို၏ စောက်စေ့သည်လည်း မာကျောနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် လီးဒစ်ကြီးကို စောက်ဖုတ်အဝသို့ ကပ်တော့ကာဖြင့်သွင်းလိုက်ပါသည်။ `အိုး ….. အမေ့။
အား ……. ကျွတ်ကျွတ် …. နာလိုက်တာမောင်လေးရယ်` `ပြီးရင်ကောင်းသွားမှာပါမမ၊ ကျွန်တော် ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပေးမယ်နော်` ဟုပြောရင်း ဒစ်တခုလုံးဝင်အောင် အနည်းငယ်ဖိသွင်းချိန်တွင်တော့ `အိုး …….. ဟိုး …. ဟိုး ….. နာလိုက်တာမောင်လေးရယ်၊ မရဘူးထင်တယ်` `ခဏလေးပါမမရယ်၊ ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးအရသာတွေရအောင်လုပ်ပေးပါ့မယ်၊ ခဏလေးပါ` ဇော်ရဲတယောက် အာသာပြင်းပြသောအသံဖြင့်ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဒစ်ကို ခဏမျှပြန်နွုတ်ပြီး တံတွေးဖြင့် ဒစ်ပတ်လည်ကို ဆွတ်လိုက်ပြန်သည်။ ယခုတခေါက်ပြန်သွင်းချိန်တွင်တော့ မမချိုတယောက် နာကျင်မွုကို ကျိတ်မှိတ်ခံစားနေပုံရသည်။ မျက်လုံးများကိုမှိတ်ကာ အံကိုကြိတ်ထားသည်။ မဲ့နေသော မမချို၏ မျက်ဝန်းကပင် ဇော်ရဲတယောက် ကာမဆိပ်များ ထိုးတက်လာစေခဲ့သည်။ လီးကို အကုန်လုံးမသွင်းဘဲ ထိပ်ဖျားပိုင်းနှင့်ပင် အသွင်းအထုတ် ပြုလုပ်ပြီး မမချို၏ ကာမဆိပ်အတက်ကို စောင့်နေပါသည်။ ထိပ်ပိုင်းနှင့် အသွင်းအထုတ် အချက် ၂၀ ခန့်မျှပြုလုပ်ပြီးသောအခါတွင်တော့ မမချိုစောက်ဖုတ်ထဲမှ ကာမအရည်ကြည်များ ကောင်းစွာယိုဆင်းနေပြီကို သတိထားမိပါသည်။
`မမ ကျွန်တော့်လီးကို အဆုံးထိသွင်းလိုက်တော့မယ်နော်။ မမနဲ့ကျွန်တော် အကောင်းဆုံးအရသာတွေ ခံစားနိုင်အောင်လို့ပါ` ဇော်ရဲတယောက် ကာမနှင့်ပတ်သက်ပြီး အကင်းပါးသူပီပီ မမချိုထံခွင့်တောင်းလိုက်သည်။ မမချိုကလည်း စတင်ရရှိနေပြီဖြစ်သော ကာမအရသာကို ပိုလိုချင်နေသည်နှင့် အတော်ပင်ဖြစ်သွားသော်လည်း ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးကိုလည်း နည်းနည်းတော့ ကြောက်သေးသည်။ `အား ….. မောင်လေးရယ် ဖြည်းဖြည်းနော်။ ကွဲသွားရင် မလွယ်ဘူး။ မင်းလည်း ဆက်ပြီး ခံစားနိုင်မှာမဟုတ်တော့ ဘူး။ ဖြည်းဖြည်း လုပ်ပါနော် ….. အား ….. ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ် ……` စုပ်သတ်ညည်းတွားသံများဖြင့် မမချိုက ပြန်ဖြေလိုက်ချိန်တွင် ဇော်ရဲတယောက် အနည်းငယ်အားစိုက်ပြီး လီးကြီးကို မမချို၏ စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ ကာမအရည်များဖြင့် ချောမွေ့နေသောကြောင့် တင်းကြပ်နေသော ခံစားမွုမှအပ အဆင်ပြေစွာပင် အဆုံးထိဝင်သွားသော်လည်း သားအိမ်ကိုဝင်ဆောင်သည့် အသိကို ၂ဦးလုံး ရရှိလိုက်ကြသည်။
`အား ….. မောင်လေးရယ် မမချို သားအိမ်ကို ထိနေပြီ။ ဖြည်းဖြည်းနော် သားအိမ်လေးကွဲသွားမယ်` ဇော်ရဲတယောက်ကတော့ ပါနပ်ညင်သာစွာဖြင့် မမချို၏စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ လီးကြီးကို ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်ပြုလုပ်နေပါသည်။ အသွင်းအထုတ်ပြုလုပ်တိုင်း တင်းကြပ်သောအရသာ၊ စောက်စေ့ကို ပွတ်တိုက်သောအရသာတို့ကြောင့် မမချိုတယောက် နာကျင်မွုများကို စတင်မေ့လျော့စပြုနေပြီး ကာမအရသာကို ပြည့်ဝစွာ စတင်ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။
မမချိုက ပေါင်များကို ပိုကားပေးလိုက်ပြီး နှစ်ဦးစလုံး နွုတ်ခမ်းများကို စုပ်ယူနမ်းရွိုက်လိုက်ကြသည်။ တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဇော်ရဲက အသွင်းအထုတ်များကို အနည်းငယ် မြန်ဆန်ကြည့်လိုက်သည်။ မမချိုညည်းတွားသံ၊ မောဟိုက်သံ၊ ရင်ခုန်သံ မြန်လာသည်မှအပ နာကျင်သည့် ဝေဒနာခံစားရသည့်ဟန် ဖြစ်ပေါ်မလာတော့ပါ။ မမချိုစောက်ဖုတ်တွင်းမှ ကြွက်သားများကလည်း ဇော်ရဲ၏လီးကြီးအား စတင်ညှစ်စပြုနေပါသည်။ အခန်းတွင်းမှ လေအေးပေးစက်ကို အဆုံးထိတင်ထားသော်လည်း ၂ ဦးစလုံး ချွေးများစို့စပြုလာပြီဖြစ်ပါသည်။ မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှကြာသောအခါ အချက်ပေါင်းမည်မျှ အထုတ်အသွင်းလုပ်ပြီးသည်ကို ဇော်ရဲတယောက်မသိတော့ပါ။ မမချို၏ အိစက်သောအထိအတွေ့များ၊ အပွေ့အဖက်များနှင့် မမချို၏အနမ်းများကြောင့် ဇော်ရဲတယောက် ကာမအထွဋ်အထိပ်တံခါးဝအနီးသို့ပင် ရောက်လုနီးနီးဖြစ်နေပါသည်။ မမချို ဖင်ကြားတွင်လည်း ကာမအရည်များ ရွဲနေပြီဖြစ်သည်။
မမချိုတယောက်ကတော့ မျက်လုံးများမှေးစင်းကာ ဇော်ရဲကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်ထားပါသည်။ ပါးစပ်မှလည်း ညည်းတွားသံများ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိနေပါသည်။ `မမ ကျွန်တော်တို့ တမျိုးပြောင်းလုပ်ရအောင်` `အား ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ်။ မင်းကတော့ မမရဲ့ အိပ်မက်ထဲက မင်းသားလေးပါပဲ။ အားလုံး မင်းသဘောအတိုင်းပါပဲ` ဇော်ရဲတယောက် မမချိုကို လေးဖက်ကုန်းခိုင်းလိုက်သည်။ မမချိုကလည်း အလိုက်သင့်စွာ လှပစွာဖြင့် ဖင်ကြီး ၂လုံးကိုကော့ကာ ကုန်းပေးလိုက်သည်။ ဇော်ရဲတယောက် မမချိုကုန်းထားသောဖင်ကြီးကို ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ လီးကို သွင်းလိုက်သည်။ `အား ….. အိုး ……… ဖြည်းဖြည်းသွင်းပါမောင်လေးရယ်၊ ဖင်ကုန်းလိုက်တော့ သားအိမ်ကိုပိုထိတယ်` ဇော်ရဲတယောက် လီးကို အဆုံးထိသွင်းလိုက်ပြီး ခဏမျှ စောက်ဖုတ်ထဲတွင် စိမ်ထားလိုက်သည်။
ထို့နောက် အသွင်းအထုတ်ကို အကြိမ် ၃၀ ခန့်မျှပြုလုပ်လိုက်သည်။ မမချိုကတော့ ကာမဆိပ်များ အထွဋ်အထိပ်သို့ တက်နေပြီဖြစ်သည်။ မမချို၏ လှပသော ဖင်ကြီး ၂လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ အဝင်အထွက်ဖြစ်နေသော လီးကြီးကိုကြည့်ရသည်နှင့် ဇော်ရဲတယောက် စိတ်ထိမ်းနိုင်မွုများ တဖြည်းဖြည်းလျှော့ကျသွားပါသည်။ လီးထိပ်တွင် ပြောမပြနိုင်သော အရသာထူးကို စတင်ခံစားနေရပါသည်။ မမချိုကတော့ `အား ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ် ….. ကောင်းလိုက်တာ ….. မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါတော့ ….. မမပြီးတော့မယ်၊ ဒီလောက်ကောင်းတာမျိုး မမတခါမှ မရဖူးဘူးမောင်လေးရယ်။ မြန်မြန်လုပ်ပေးပါတော့` တောင်းလည်းတောင်းဆို၊ စောက်ဖုတ်တွင်းမှ ကြွက်သားများလည်း ညှစ်နေရာ ဇော်ရဲတယောက် မမချိုပြီးအောင် ခပ်ကြမ်းကြမ်း စတင်ဆောင့်ပါတော့သည်။ ခုနကညင်သာမွုမှားကို ရိုက်ချုးလိုက်ပြီး မမချို၏ ဆန္ဒများပြည့်စေရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတော့သည်။ `အား ….. ပြီးပြီမောင်လေးရယ် …. ပြီးပြီ……………………အား …… ကောင်းလိုက်တာ …………..အား …………… အိုး` မမချိုကတော့ အိပ်ယာခင်းများကို လက်ဖြင့် တင်းကြပ်စွာဆုပ်ကိုင်ရင်းပြီးသွားပါတော့သည်။
သို့သော် စောက်ဖုတ်တွင်းကကြွက်သားများကတော့ သူ၏လီးကြီးအား ညှစ်နေပါသေးသည်။ ဇော်ရဲသည်လည်း ထိုအရသာအား ဆက်လက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ `မမ ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်……….. ပြီးတော့ မယ် …… အား ……… ရှီး ………….အိုး …………..` ဇော်ရဲတယောက် မမချို၏ စောက်ဖုတ်တွင်းမှ လီးကြီးကိုနွုတ်ကာ လှပသော ဖင်ကြီးများပေါ်သို့ သုတ်ရည်နွေးနွေးများကို ပန်းလိုက်ပါတော့သည်။ မည်မျှကြာအောင် အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်ကိုမသိရ။ တဒေါက်ဒေါက်နှင့် အခန်းတံခါးကို ခေါက်သံကြားမှ သူတို့ ၂ ဦးသား လူးလဲထပြီး ဟိုတယ်မှပေးသော တဘက်ကြီးများဖြင့် အလျှင်အမြန်ပတ်လိုက်ကြသည်။ တံခါးခေါက်သူတွေကတော့ ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေမဟုတ် မမချို၏သူငယ်ချင်း မမကြီး ၂ ဦးဖြစ်သည်။ `ဟဲ့ ချို ….. နင်တော်တော်ကဲနေတယ်ပေါ့လေ။ ညနေစောင်းသွားရင် ငါတို့ ပင်လယ်ရေ မစိမ်ရဘဲဖြစ်နေဦးမယ်။ အခုလည်း ဗိုက်ဆာနေပြီ။ မြန်မြန်လုပ်ကြ` ဇာခြည်က ဤသို့ အမြန်ပြောကာ အခန်းတွင်းသို့ ဝင်လိုက်သည်။
`ဟယ် နင်တို့ကလည်း ဒီလောက်တောင် ကားမောင်းလာရတာ မောင်လေးလည်း အနားယူချင်တာပေါ့` `အမယ် နင်အနားယူတာ ငါသိပါတယ်နော်၊ လာပြီးတော့ ညာမယ် မကြံနဲ့` ဟု သီတာက ဝင်ပြောပြန်သည်။ `ကဲကောင်းပြီ၊ ညနေ ပင်လယ်ရေစိမ်ပြီးရင်၊ ဘယ်မှမသွားနဲ့တော့ ငါတို့ အခန်းမှာ အပန်းဖြေကြမယ်။ ဟုတ်ပြီလား၊ ကျေနပ်လား၊ အဲဒီကျမှ နင်တို့ တွေ့မယ်` ဟု မမချိုက ရယ်မောကာပြောပြီး စကားစကိုဖြတ်ကာ ရေချိုးခန်းထဲသို့ ဝင်သွားသည်။ ဇော်ရဲတယောက်ထဲ အခန်းထဲတွင် မမချို၏ သူငယ်ချင်း ၂ ဦးနှင့်ငေါင်စင်းစင်း ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ မမချိုနှင့် အတော်ကဲလိုက်ရသဖြင့် အားအင်ကလည်း အတန်ငယ်ကုန်ပြီး တလမ်းလုံး ကားမောင်းလာခဲ့ရသောကြောင့် နားမည်ဆိုလျှင် နားချင်သေးသည်။ သို့သော် မမချို၏ သူငယ်ချင်း ၂ ဦးကတော့ သူတို့ကို အနားပေးမည့်ပုံ မပေါ်ချေ။ ကြည့်ပါဦး ဝတ်စားထားသည်ကလည်း အပျံစား အမိုက်စား။
ညိုစိမ့်စိမ့်နှင့် သီတာ အသားပျော့ပျော့ဘောင်းဘီတိုတိုကို သူ့တင်သားအလှတွေပေါ်လွင်အောင် ဝတ်ဆင်ထားပြီး အပေါ်က တီရှပ်အပြာနုရောင်ကလေးကို ဝတ်ဆင်ထားပုံမှာ အပျိုသွေးကြွစ တောင့်တောင့်တင်းတင်းမိန်းမငယ်တဦး နှင့်ပင် တူနေသေးတော့သည်။ ဇာခြည်ကတော့ ကွာတားဘောင်းဘီအကြပ်ပေါ်တွင် ချည်သားဘလောက်တထည်ကို လှပစွာဝတ်ဆင်ထားသည်။ နှစ်ဦးစလုံး အခန်းတွင်းမှ တီဗွီကို ချယ်နယ်အမျိုးမျိုးပြောင်းကြည့်ရင်း ကလေးတွေလို ပျော်မြူးနေကြသည်။ ဇော်ရဲကတော့ တဘက်ကြီးကိုပတ်ကာ ဆက်တီပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း သူတို့ကို ငေးမောနေမိသည်။ `မောင်လေးကရော ဒီကိုအရင်တုန်းက ရောက်ဖူးလား` ဟု သီတာမေးသည်ကို `ဟုတ်ကဲ့ ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ခဏတိုင်းရောက်ဖူးပါတယ်၊ ကျောင်းပြီးမှတော့ အခုတခေါက်က ပထမဆုံးပဲ` `ချောင်းသာက အခုလိုအချိန်ဆို ပျော်ဖို့အကောင်းဆုံးပဲ။
မမတို့ကတော့ အဲဒါကြောင့် ခွင့်ကို တပတ်လောက်ယူလိုက်တယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနားချင်လို့လေ` ဟု ဇာခြည်က ဝင်ပြောလိုက်သည်။ ဇော်ရဲတယောက်ကတော့ မမချိုအပြင် သူ၏သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးအား ထပ်မံ၍ ရင်ခုန်နေပြန်ပါသည်။ ညနေပိုင်းတွင် အပြင်သို့မထွက်တော့ဘဲ မမချိုဘာတွေများစီစဉ်မည်နည်းဆိုသည်ကိုတော့ သူကြိုတင်ရင်ခုန်နေမိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ရေချိုးခန်းတံခါးဖွင့်သံကြားပြီး မမချိုတယောက် ထွက်လာပါသည်။ မမချို၏ တင်သားကားကားကြီးများက တဘက်ပွပွကြီးခြုံထားလင့်ကစား လွုပ်ရမ်းကာနေသည်ကို ဇော်ရဲတယောက် သတိထားမိသည့်နှင့် ပေါင်ကြားမှ သတ္တဝါကြီးက မောင်ထောင်ချင်လာပြန်ပါသည်။ `ကဲ မောင်လေး ချိုးလိုက်တော့၊ မင်းမမတွေက စောင့်နေကြပြီ။` ဟုတ်ကဲ့မမဟု သူကပြောပြီးအထ၊ ပေါင်ကြားမှ အနည်းငယ်နိုးကြားစပြုနေပြီဖြစ်သော သတ္တဝါကြီး၏ ပုံပန်းသဏ္ဍာန်အား သီတာတယောက် သတိထားဖြစ်အောင် ထားမိလိုက်ပါသည်။
သီတာ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ ကြက်သီးမွေးညင်းလေးများ ထသွားသည်ကို ဇော်ရဲတယောက် သတိမထားမိဘဲ၊ ရေချိုးခန်းတွင်းသို့ အလျှင်အမြန်ဝင်လိုက်ပါသည်။ ဇော်ရဲရေချိုးခန်းထဲမှ မမချိုနှင့် သူ့သူငယ်ချင်းများ၏ စကားပြောသံ ရယ်မောသံများ အတိုင်းသားကြားနေရပါသည်။ ရေချိုးအပြီးတွင်တော့ မမချိုတယောက်လည်း ဘောင်းဘီအတိုအကြပ်လေးဖြင့် လှပချင်တိုင်းလှပ ကြွရွချင်တိုင်း ကြွရွကာဖြင့် အပြင်သို့ထွက်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပါသည်။ ဇော်ရဲလည်း အဝတ်အစားအမြန်လဲကာ မမချိုတို့နှင့် ထွက်ခဲ့ပါတော့သည်။ ဟိုတယ်မှအထွက်တွင် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများက သူတို့လေးယောက်ကို ငေးမောကြည့်ရွုနေကြသည်။ သူတို့လေးယောက်စလုံး သောင်ပြင်ပေါ်သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်။ သောင်ပြင်နေပူပူပေါ်တွင် ပင်လယ်စာရောင်းသူလေးများ၊ စက်ဘီးငှားရမ်းသူများ နေပူပူထဲတွင် ပင်လယ်ရေကို စိမ်နေကြသူများဖြင့် စည်ကားလို့နေသည်။ သောင်ပြင်ပေါ်အရောက်တွင်လည်း ရန်ကုန်မှ ရုပ်ရှင်ရိုက်သူများ ချောင်းသာသို့ လာသည့်အလား သူတို့လေးယောက်ကို ငေးမောနေကြသည်။
ငေမောကြပေမပေါ့ မမချိုနှင့် သူငယ်ချင်းများကလည်း အပျံစား အမိုက်စား သူကလည်း ရွေမင်းသားပမာဖြစ်နေကြသည်ကိုး။ ငါးကင်ရောင်းသည့် ဈေးသည်မလေးတယောက်ကိုခေါ်လိုက်ပြီး ကျောက်ပုစွန်ကင်ကြီးများနှင့် ငါးကင်များကို ဝယ်လိုက်သည်။ `မောင်လေး၊ ဘီယာသောက်မလား` `ကောင်းသားပဲ မမ၊ မမတို့ရော` `အင်း၊ ကျောင်းမှာတော့ တပည့်တွေရှေ့ စတိုင်ကြီး တခွဲသားနဲ့ နေနေရတာ အခုချောင်းသာရောက်တုန်းတော့ ကဲမယ်လေ၊ သောက်မှာပေါ့` ရေခဲပုံးအထမ်းလေးဖြင့် လာရောက်ရောင်းသော ကလေးငယ်တဦးထံမှ တိုက်ဂါးဘီယာပုလင်း (၄) လုံးဝယ်လိုက်သည်။ ကောင်လေးကတော့ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းပြီး သူတို့လေးဦးကို ငေးမောနေပြန်သည်။ ငါးကင်ရောင်းသည့် ကောင်မလေးကလည်း မပြန်သေးဘဲ `မမကြီးတို့က ရုပ်ရှင်အဖွဲ့ကလား` ဟု စပ်စုပြန်သည်။ `မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရယ်၊ မမတို့က ရန်ကုန်ကပါ၊ လာလည်တာပါ။
နေပါဦး မမတို့က ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ တူနေလို့လား` `အင်း၊ မမက စိုးမြတ်သူဇာနဲ့တူတယ်၊ ဟိုမမက မျိုးသန္တာထွန်းနဲ့တူတယ်၊ ဟိုမမက နန္ဒာလွိုင်နဲ့တူတယ်` ဆိုပြီး မမချို၊ မသီတာနှင့် ဇာခြည်တို့ကိုကြည့်ကာပြောလိုက်သည်။ မမချိုကဆက်ပြီး `ဒါဖြင့် ဒီကိုကိုကြီးကရော` `ဒီအကိုကြီးကတော့ နေထက်လင်းနဲ့တူတယ်၊ ဒါပေမယ့် နေထက်လင်းက အကိုကြီးထက် အသားပိုဖြူတယ်၊ အကိုကြီးကတော့ အရပ်ပိုမြင့်တယ်` ဟု သွက်လက်ချက်ချာစွာပြောပြန်သည်။ သူတို့လေးယောက်စလုံး ကမ်းစပ်မှ ခပ်လှမ်းလှမ်း အုန်းပင်တန်းများအောက်သို့ ဦးတည်လိုက်ကြသည်။ ဖြူလွနေသော သဲပြင်ခပ်နွေးနွေးပေါ်သို့ အေးစက်နေသည့် ဘီယာပုလင်းများကို တင်ကာ သူတို့၏ ပင်လယ်ခရီးအခမ်းအနားကို ပျော်ရွင်စွာ စတင်ဖြစ်ကြသည်။ ဇော်ရဲနှင့် မမချိုကတော့ ရောက်ရောက်ချင်းကဲခဲ့သည့်ဒဏ်ကို ခံနေရပြီဖြစ်သည်။ အနည်းငယ်နုံးချိနေသည်။
ဘီယာပုလင်းများကိုဖွင့်ဖောက်လိုက်ပြီး Cheers ဟု ပြိုင်တူမြည်ကြွေးကြကာ မော့ချလိုက်ကြသည်။ ငါးကင်များ ပုစွန်ကင်များနှင့်အတူ မမချိုရော ဇော်ရဲပါ ပြန်လည် လန်းဆန်းတက်ကြွလာကြသည်။ တယောက်နှင့်တယောက် စကြနောက်ကြနှင့် ခေတ္တမျှ တပ်မက်မွုတွေကင်းမဲ့ကာ ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေလို ပျော်ရွင်နေကြပြန်သည်။ ပင်လယ်ကိုကြည့်ကာ ဘီယာများဖြင့် အမောဖြေပြီးသည်နှင့် အခန်းသို့ ပြန်ကြပြီး ပင်လယ်ထဲဆင်းရန် အဝတ်အစားများ လဲလိုက်ကြသည်။ တင်းကြပ်နေသော အသားကပ်ဘောင်းဘီတိုများနှင့် မမချိုတို့ကို ဇော်ရဲတယောက် ရင်ခုန်စွာဖြင့် ငေးမောကြည့်နေမိသည်။ ဇော်ရဲကလည်း ဘောင်းဘီတိုအကြပ်လေးကို ဝတ်ထားရာ သူ့ဖွားဖက်တော်ကြီးက တင်းပြည့်ဖောင်းကားလို့နေသည်။ မမချိုကတော့ ရင်တွေအပြတ်ခုန်ခဲ့ပြီးသော်လည်း သူ့သူငယ်ချင်း ၂ ဦးမှာမူ ဇော်ရဲကိုကြည့်ကာ ရေတွေဘာတွေပင်ငတ်သလို ကြက်သီးမွေးညင်းတွေပင် ထလာပြန်သည်။
`ကဲ ရေထဲဆင်းကြမယ်` ဟုဆိုကာ ဇော်ရဲ၏ ကြွက်သားစိုင်များဖြင့် လှပဖုကြွနေသည့် လက်မောင်းကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ရင်း မမချိုက ဦးဆောင်လိုက်သည်။ အားလုံး ကလေးတွေလို ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာဖြင့် ကမ်းစပ်ဆီသို့ ပြေးဆင်းခဲ့ကြသည်။ သီတာနှင့် ဇာခြည်၏ အသားကပ်ဘောင်းဘီအောက်တွင် မည်သည့်အတွင်းခံမျှ ဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိသည်ကို ဇော်ရဲသတိထားမိသည်။ တီရှပ်အကြပ်ကလေးများအောက်တွင်လည်း စနေခိုင်များက လွတ်လပ်စွာလွုပ်ရှားနေကြသည်။ ပင်လယ်ရေ၏ အေးမြသောအထိအတွေ့ကြောင့် အားလုံး လန်းဆန်းသွားကြသည်။ ဘီယာ တပုလင်းစီ၏ နူးညံ့သော အရှိန်ကြောင့်လည်း ပေါ့ပါးလွတ်လပ်နေသည်။
ဇော်ရဲက ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းသည့်အနေဖြင့် ဘီယာကို အရမ်းမသောက်ပါ။ ရေလွိုင်းတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းရိုက်ခတ်လာတိုင်း အားလုံး ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်ကာ ပွေ့ဖက်မိသည့်အရသာများကိုလည်း အားလုံးကြိုက်နှစ်သက်နေပြီ။ ကျောင်းမှာ ဟန်ဆောင်နေထိုင်ရခြင်းများကိုလည်း မမချိုက လွတ်ပစ်လိုက်သည်။ သီတာနှင့် ဇာခြည်လည်း ထို့အတူပင်။ သူတို့ အမျိုးသားများနှင့် ရည်းစားကို မေ့လျော့သွားကြပြီဖြစ်သည်။ ရေကူးရင်း ရေငုပ်ရင်းဖြင့် မမချိုကိုသာမက သီတာနှင့် ဇာခြည်တို့၏ အသားစိုင်များကို ကိုင်မိသည့်အကြိမ်ပေါင်းကလည်း မနည်းတော့ချေ။ တခါ ဇော်ရဲတယောက် မမချိုမှတ်ပြီး သီတာ၏ တင်သားစိုင်ကြီးကို ရေအောက်ထဲမှ ကိုင်မိနေသည်။ သီတာကလည်း မရုန်း၊ ဇော်ရဲကလည်းမလွတ်။
ရေပေါ် ခေါင်းဖော်လိုက်မှ သီတာမှန်းသိရတော့သည်။ သီတာ၏မျက်နှာပေါ်တွင် ပန်းနုရောင်များပြေးသွားခဲ့သည်။ အနောက်မျက်နှာမှာ ပုစွန်ဆီရောင်အသွေးဖြင့် နေဝန်းကြီး၏တနေ့တာနွုတ်ဆက်ချိန်ရောက်တော့မှ သူတို့အားလုံး ပင်လယ်ရေထဲကတက်ခဲ့ကြသည်။ ရေထဲဆင်းလာတုန်းကထက် အပေါ်ပြန်အတက်မှာ အသားစိုင်တွေက ဖုထစ်မို့ကြွနေကြသည်။ ထို့အတူ ဇော်ရဲတယောက်သည်လည်း ကာမအဆိပ်များ တဖန်ပြန်လည်တက်စပြုခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ `ကဲ ရေချိုးပြီးရင် ဟိုတယ်မှာပဲ ညနေစာစားမယ်၊ ပြီးရင်မထွက်တော့ဘူး။ ငါ့အခန်းထဲမှာပဲ ပျော်ကြရအောင်` မမချိုတယောက် အားလုံးကိုပြောလိုက်ပါသည်။ သီတာနှင့် ဇာခြည်ကတော့ သူတို့အခန်းဆီသို့ထွက်သွားကြသည်။ မမချိုနှင့် ဇော်ရဲကတော့ ရေချိုးခန်းတွင်းသို့ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဝင်လိုက်ကြသည်။ မမချို၏ ကိုယ်ခန္ဓာတခုလုံးကို ဇော်ရဲတယောက် ဆပ်ပြာမွေးဖြင့် ပွတ်သပ်ရင်း သန့်စင်ပေးသလို မမချိုကလည်း ဇော်ရဲတကိုယ်လုံးကို ပွတ်တိုက်ပေးပြန်ပါသည်။
`မောင်လေး၊ ဘယ်နှယ်လဲ၊ မမချို သူငယ်ချင်းတွေကိုရော သဘောကျလား` ရုတ်တရက်မေးခွန်းအား ဇော်ရဲ ပြန်မဖြေနိုင်ပါ။ ရှက်သည်လည်းမဟုတ် ကြောက်သည်လည်းမဟုတ်၊ အံ့အားသင့်သည်ကတော့အမှန်။ `ကဲပါရှက်မနေပါနဲ့။ သူတို့က မမရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ။ နေ့လည်က မောင်လေးရေချိုးနေတုန်း မမတို့ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူတို့က မောင်လေးနဲ့ ကြုံဖူးချင်တယ်တဲ့` ဟုပြောပြီး ဇော်ရဲ၏ ဖွားဖက်တော်ကြီးအား အထက်အောက် ပွတ်သပ်ပေးနေပြန်သည်။ နောက်ဆက်ပြီး … `တကယ်တော့ မမတို့ ၃ ယောက်လုံးက မမတို့လိုချင်တဲ့ အချစ်မျိုးတွေ မရခဲ့ကြဘူး။
မမတို့လိုချင်တဲ့ ကာမအရသာလည်း မရခဲ့ဖူးဘူး။ ဇာခြည်ဆို ပိုသနားစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ အခုသူယူမယ့် ဗိုလ်မှူးက အိမ်ကသဘောတူလို့၊ လက်မထပ်ခင်မှာ အဲဒီဗိုလ်မှူးတောင်းဆိုလို့ ၂ ခါလောက်အိပ်ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ကျေနပ်မွုမရဘူး` `ဒါဆို မယူနဲ့ပေါ့မမရဲ့ မရဘူးလား။` `မရဘူးမောင်လေးရဲ့၊ မမလည်း ဗိုလ်မှူးကတော်တယောက်ပဲ။ မမတို့လိုမျိုး ပညာတတ်တွေကိုယူမှ သူတို့ ရာထူးတက်တာလေ၊ ဒါပေမယ့် မမယောကျာ်းကတော့ မမအတွက် လိင်ဆက်ဆံရတာကလွဲလို့ အစစအရာရာ လိုလေးသေးမရှိပါဘူး။ ပြီးတော့ လူကြီးနားမှာဆိုတော့ သူ့ရှေ့ရေးကတော့ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဇာခြည်ကတော့ အဲလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး` `ဘယ်လိုဟင် မမ ` သူက စကားဖြတ်မေးလိုက်သည်။ `ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်။ သူယူမယ့်သူက နောင်ရေးတော့ စိတ်အေးရပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးမှာတော့ ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်။
ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ သူ့ယောက်ျားပစ္စည်းက သေးသေးလေးလို့ပြောတယ်။ နောက်ပြီး ပစ္စည်းကသေးတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး ကြင်နာမွုလည်းမရှိဘူး။ ဆက်ဆံတိုင်း ဆံပင်တွေဘာတွေဆောင့်ဆွဲတတ်သေးတယ်တဲ့။ ဇာခြည့်အကြောင်းကိုလည်း မမကသိတယ်။ သူက မိန်းကလေးထဲမှာ တော်တော်စိတ်ပြင်းထန်တယ်။ အဲဒီဗိုလ်မှူးနဲ့ ၂ ခါလောက်နေပြီးတော့ သူအာသာမပြေတဲ့အကြောင်း မမကို ဖုန်းဆက်လာတယ်။ အဲဒီဗိုလ်မှူးက အမြောက်တပ်ကလေ။ မိတ္ထီလာကပေါ့` `အဲဒါဆို မမဇာခြည်အတွက် ရင်လေးစရာပဲနော်` `အေးပေါ့။ လူကြီးတွေကလည်း စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်တော့ ခက်နေတော့တာပေါ့။ ကဲပါလေ ဒါတွေက ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အခုမမတို့ ကဲကြတာကိုလည်း မောင်လေးဖက်က နွုတ်လုံပေးနော်။ မမတို့ကလည်း မောင်လေးကလွဲပြီး ဘယ်သူနဲ့မှ ဒီလို သွားဖူးနေဖူးတာမဟုတ်ဘူး` `စိတ်ချပါမမ၊ ကျွန်တော် ကတိတည်ပါတယ်။` ဟုဇော်ရဲကပြန်ပြောလိုက်သည်။
`နောက်ပြီး မမမှာချင်တာက ဇာခြည်ကိုတော့ နည်းနည်းညှာပြီးလုပ်ပေးနော်၊ သူက မမတို့လို အိမ်ထောင်သည်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ကာမထန်ပေမယ့် အတွေ့အကြုံအရကနည်းသေးတယ်လေ၊ နောက်ပြီး မင်းပစ္စည်းကလည်း မမတောင် အသက်ရွုရပ်သွားသလားအောက်မေ့ရတယ်။` `ဟုတ်ကဲ့ပါမမ၊ ကျွန်တော်သတိထားပြီးဆက်ဆံပါမယ်` သူတို့ ၂ဦး စကားပြောရင်း ရေချိုးသည်မှာ အတော်ကြာသွားသည်။ ရေချိုးခြင်းအားအဆုံးသတ်လိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်များကို တဘက်များဖြင့် ခြောက်သွေ့သွားစေရန် ပြုလုပ်လိုက်ကြသည်။ ပြီးလျှင် အသားအလှဆီများကို မမချိုတလှည့် ဇော်ရဲတလှည့် အပြန်အလှန်လိမ်းပေးရင်း အနားယူနေကြသည်။
ထို့နောက် ညနေစာစားရန် ၄ ဦးစလုံး ဟိုတယ်ထမင်းစားခန်းဆီသို့ ထွက်ခဲ့ကြတော့သည်။ အခန်းပြန်ရောက်သည်နှင့် သီတာနှင့် ဇာခြည်တို့အား မမချိုမှ သူတို့အခန်းအားမပြန်စေတော့ဘဲ။ ဇော်ရဲတို့အခန်းတွင်သာနေရန်ပြောဆိုလိုက်သည်။ သူတို့ ၄ ဦးစလုံး တသက်မမေ့နိုင်မည့် ကာမပွဲတော်ကြီးကို အားပါးတရဖြင့် တညလုံး နွဲကြတော့မည်ဖြစ်ပါတော့သည်။ အားလုံးအခန်းပြန်ရောက်တော့ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ ပြောဆိုနေကြရင်း အပန်းဖြေလိုက်ကြသည်။ လေအေးပေးစက်ကို အစွမ်းကုန်မြှင့်ပြီး ခုတင်ပေါ်တွင် ၄ ဦးသား တီဗီကြည့်ရင်း စကားပြောနေကြသည်။ မမချိုကတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ။ မသီတာက …. `ကဲချို … မချိုတယောက်ထဲပဲ အပိုင်းစီးမထားနဲ့လေ၊ ချို့အိပ်မက်ထဲက နတ်သားလေးကို ငါတို့ကိုလည်းမျှပေးဦး` `အောင်မလေးဟယ် ငါဒီလောက်ထိ သဝန်တိုဖူးလို့လား၊ နောက်ပြီးမှ မီးမီးကြောက်ကြောက် လုပ်မနေနဲ့နော်` `သိပါတယ်၊ နင်ပြောကတည်းက ရင်ခုန်နေတာပါ` `ကဲမောင်လေး၊ မမသူငယ်ချင်းတွေကို အကြင်နာလေးတွေပေးလိုက်ပါဦး` ဟု ပြောဆိုကာ ဇော်ရဲ၏ ကြီးမားကျယ်ပြန်သော ရင်အုပ်ကြီးအားပွတ်သပ်ပေးနေပြန်ပါသည်။
သီတာက ဇော်ရဲအနီးသို့တိုးလာပြီး ဇော်ရဲ၏ ရင်အုပ်တွင်းသို့ ခေါင်းကိုတိုးဝှေ့ကာဖြင့် အနမ်းများစတင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဇာခြည်ကတော့ မျက်လုံးလေးအဝိုင်းသားဖြင့် ကြည့်နေပါသည်။ ဇော်ရဲအား မသီတာ၏ မေးဖျားလေးအားကိုင်ပြီး ခေါင်းလေးကိုဆွဲယူကာ ဖူးရွနေသော နွုတ်ခမ်းအစုံအား စုပ်ယူလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် နောက်ကျောဖက်ကိုသိုင်းကာ စနေ ၂ ခိုင်၏ မနိုင်တာဝန်အား ထမ်းဆောင်နေရသည့် ဘရာစီယာချိတ်ကလေးအား ဖြုတ်ပေးခြင်းဖြင့် တနေ့တာအနားယူခိုင်းလိုက်ပါသည်။ မမချိုကတော့ မသီတာ၏ ကြီးမားလှသည့် တင်သားစိုင်ကြီးများအား ပွတ်သပ်ကာ စကပ်ဇစ်အား ဆွဲဖြုတ်နေပါပြီ။ `သီတာရယ် နင့်ဖင်ကြီးကလည်း ကြီးလိုက်တာ အားရစရာပဲ၊ ငါ့ဖင်ထက်တောင်ကြီးသေးတယ်။` `ဟုတ်ပါ့သီတာရယ် နင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်သလား` ဇာခြည်ကဝင်ပြောသည်။ သီတာက ဇော်ရဲနှင့်နမ်းခြင်းကို ခေတ္တမျှရပ်လိုက်ပြီး `ပင်ကိုယ်ဟဲ့၊ ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှမလုပ်ဘူး။ ငါတို့မျိုးရိုးကိုကကြီးတာ` ထိုအချိန်တွင် မမချိုတယောက် မသီတာ၏ စကပ်ကို ဆွဲချွတ်ပြီးဖြစ်နေပါပြီ။
သီတာထံတွင် ဂျီစတင်း ဟုခေါ်သည့် စောက်ဖုတ်ကိုသာဖုံးသည့် အတွင်းခံဘောင်းဘီသေးသေးလေးသာ ကျန်ပါတော့သည်။ ဇော်ရဲကတော့ သီတာ၏ နို့အုံကြီးများကို ဆုပ်ကိုင်ပွတ်ချေနေပါသည်။ သီတာထံမှလည်း ရင်ခုန်သံအချို့ စတင်ကြားရစပြုနေပါသည်။ မမချိုကတော့ သူ့အဝတ်အစားများကို ကိုယ်တိုင်ချွတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဇာခြည်ကတော့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိအမူအယာများဖြင့် အံ့သြရှက်ရွံ့စိတ်များဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူမလက်များက သူမ၏ ပေါင်ကြားတွင် ကိုင်ထားသည်ကို ဇော်ရဲတယောက် သတိထားမိပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူဝတ်ထားသော ဂျင်းဘောင်ဘီအား ဇစ်ကို အသာဆွဲဖြုတ်လိုက်ပါသည်။ အခြေအနေကို သိသော မမချိုမှ သီတာ့ကိုကျော်ကာ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းဖြင့် ဇော်ရဲဆီသို့ လာပါသည်။ ပြီးလျှင် ဇော်ရဲဘောင်းဘီအား ကူညီပြီးချွတ်ပေးပါသည်။ ဇော်ရဲထံတွင် အောက်ခံဘောင်ဘီအနက်ရောင်သာ ကျန်ရှိပါတော့သည်။ မမချိုက ဇော်ရဲဘောင်းဘီပေါ်မှနေပြီး ဇော်ရဲလီးကြီးအား ပွတ်သပ်ပေးနေပါသည်။
မာန်ဖီနေသော လီးကြီးကတော့ အောက်ခံဘောင်းဘီကွဲထွက်မလား ထင်ရလောက်အောင်ပင် ရုန်းကြွနိုးထလာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတော့သည်။ သီတာက ဇော်ရဲနှင့် နွုတ်ခမ်းများစုပ်နမ်းနေရင်းမှ ခေါင်းလေးကို အသာအယာလျှောချပြီး ဇော်ရဲ၏ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားများကို နမ်းပြန်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ မမချိုက ဇော်ရဲ၏ အောက်ခံဘောင်းဘီအား ချွတ်ချလိုက်ပါတော့သည်။ ဒီတခါမျက်လုံးများပြူးရသူတွေကတော့ မမချိုမပါဝင်ကြောင်း စာဖတ်သူများသိပါလိမ့်မည်။ သီတာနှင့် ဇာခြည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း အထူးတလည်ပြောရန်လိုတော့မည်မထင်။ `အောင်မလေးလေး … ကြီးလိုက်တာကြီးဟယ်။ ချိုရယ် … နင်မနာဘူးလား။ နည်းတာကြီးမှမဟုတ်ဘဲ` ဟု သီတာက ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးကို ကိုင်ကြည့်ကာပြောလိုက်သည်။ မမချိုကတော့ အောင်မြင်သူတဦးပမာ … `နင်တို့ပဲ နတ်သားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးဆို၊ သဝန်မတိုနဲ့ဆို၊ ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲ` ဟု ဇော်ရဲ၏ ဂွေးဥများကို ပွတ်သပ်နေရင်းမှပြောလိုက်သည်။
ဇာခြည်ကတော့ … `ချိုရယ် … မောင်လေးဟာကြီးကတော့ ကြောက်စရာကြီးပါလားဟယ်။ ငါပစ္စည်းနဲ့ ဆံ့ပါမလားဟယ်။ ငါတော့ကြောက်လာပြီ` ပြောသာပြောသည် ဇာခြည်တယောက် ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးကိုတော့ အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေမိပါပြီ။ သူမ၏ ဖောင်းဖောင်းအိအိလက်ကလေးဖြင့် ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးအား ကိုင်တွယ်ကြည့်နေသည်။ သီတာကတော့ ဇော်ရဲလီးကြီးအား လျှာဖျားကလေးဖြင့် စတင်တို့ထိဆော့ကစားနေပါသည်။ ထို့နောက် လီးဒစ်ကြီးကို သူမ၏ နှင်းဆီရောင်နုတ်ခမ်းလေးဖြင့် စတင်စုပ်ပေးပါသည်။ မမချိုကတော့ ဇော်ရဲ၏ ဂွေးဥများကို ငုံစုပ်ပေးနေပါသည်။ ဇော်ရဲတယောက်ကတော့ နတ်စည်းစိမ်ကို စတင်ခံစားနေပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဇာခြည့်ထံသို့ သူ၏လက်များဖြင့်လှမ်းလိုက်ပါသည်။ ဇာခြည်ကလည်း ဇော်ရဲ၏ ကမ်းလင့်မွုကို တပ်မက်သောအကြည့်များဖြင့် ရှေ့သို့ တိုးကာလာပါတော့သည်။
ဇော်ရဲက ဇာခြည်၏ အဝတ်အစားများကို ညင်သာစွာချွတ်ပေးရင်း နွုတ်ခမ်းလေးကို ညင်သာစွာစုပ်ယူလိုက်ပါသည်။ မမချိုပြောထားသည့် စကားများကိုကြားယောင်မိရင်း ဇော်ရဲတယောက် ဇာခြည့်အပေါ် အထူးခြားဆုံးညင်သာစွာဖြင့်ဆက်ဆံရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သီတာကတော့ ဇော်ရဲ၏ လီးဒစ်ကြီးကိုစုပ်ခြင်းအား အရှိန်ရစပြုနေပြီဖြစ်ပါသည်။ `ပြွတ်၊ ပလပ်` စသည့်အသံမျိုးစုံဖြင့် အားပါးတရ စုပ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့စုပ်ပေးနေချိန်တွင် သူမ၏ တပ်မက်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းလှသော ဖင်သားကြီးများကို ကုန်းထားသည်မှာ မြင်ရသူအဖို့ အလိုဆန္ဒရမက်များ တက်ကြွလာစေအောင် နွိုးဆော်ထားသကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေပါသည်။ ဇာခြည်၏ ဝင်းဝါသောအသားအရေနှင့်လိုက်ဖက်စွာ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလည်း တောင့်တင်းလှပါသည်။
သူငယ်ချင်း ၃ ဦးတွင် အနည်းငယ်သေးသည်ဟုဆိုနိုင်သော်လည်း သာမန်မိန်းမများထက် ပြည့်ဖြိုးတောင့်တင်းလှပါသည်။ မိဘများ၏ ပြည့်စုံကုံလုံကြွယ်ဝမွု၊ ပညာကိုမကြောင့်မကြသင်နိုင်မွု၊ မပင်မပန်းနေရမွုတို့က သူမ၏ အသားအရေ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်တို့က သက်သေခံလျှက်ရှိနေပါသည်။ သူမ၏ကိုယ်ပေါ်တွင်တော့ သီတာကဲ့သို့ပင် ဂျီစတင်း လေးတထည်သာ ကျန်ရှိပါတော့သည်။ သီတာက သူမနှင့်အတူ ဇော်ရဲ၏လီးကြီးအား စုပ်ရန် လက်ကမ်းလိုက်ပါသည်။ မမချိုကတော့ ဂွေးဥများကို စုပ်နေရာမှ ဇော်ရဲနှင့် ယှဉ်ထိုင်လိုက်ပြီး ဇော်ရဲနွုတ်ခမ်းများအား စုပ်ယူလိုက်သည်။ သူတို့လေးဦးစလုံး ကာမရမက်များဖြည့် ပြည့်လျှမ်းနေပြီး လိုအင်များတောင့်တနေသည့် ညည်းသံများမှအပ မည်သည့်စကားတလုံးကိုမျှ ပြောဆိုခြင်းမပြုကြပါ။ တပ်မက်သောအချစ်များကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည် စကားတလုံးမျှ မလိုအပ်ပါချေ။
ဇော်ရဲလီးကြီးကတော့ မာကျောသည်ထက် မာကျောတောင့်တင်လာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဇော်ရဲလီးကိုအစုပ်ခံပြီး ဇိမ်ယူနေသည်မှာလည်း မိနစ် ၂၀ ခန့်မျှကြာသွားခဲ့ပါပြီ။ `မောင်လေးနေချင်နေပြီလား` `အင်း … ဒါပေမယ့် မမတို့ကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမယ်လေ` ဟုပြောကာ ဇာခြည့်ကို ပက်လက်လှန်ပြီး ဘောင်ဘီအသေးလေးအား ဆွဲချွတ်လိုက်ပါသည်။ ဇာခြည်၏ မို့ဖောင်းနေသော စောက်ဖုတ်ကလေးသည် နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ စိုပြေဝင်းဝါသောအသားအရေနှင့်လိုက်ဖက်စွာ အမွေးအမျှင်များကင်းသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကလည်း ကာမဆိပ်များတက်လာအောင် နွိုးဆွနေပြန်ပါသည်။ ဇော်ရဲက စောက်စေ့ရဲရဲလေးကို လျှာဖြင့် စုပ်ယူလိုက်ပါသည်။
ဇာခြည့်ထံမှ `အိုး မောင်လေးရယ် …. ရင်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှန်းမသိဘူးကွယ် အရမ်းလည်းခုန်နေတယ်။ မမတော့နှလုံးရောဂါရတော့မယ်နဲ့တူတယ်` ဟု မောဟိုက်သံဖြင့် ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ ဇော်ရဲကတော့ အရမ်းနူးညံ့သော်အနမ်းများဖြင့် ဇာခြည့်စောက်ဖုတ်တခုလုံး ရွဲစိုသွားအောင် စုပ်ပေးလျှက်ပေးခြင်းများကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဇာခြည်၏စောက်ဖုတ်အဝမှ ကာမအရည်များ စတင်စိမ့်ယိုထွက်စပြုနေပါပြီ။ အဖိုးတန်သော အမျိုးသမီးအသုံးအဆောင်များသုံးနိုင်ခြင်းသက်သေအဖြစ် ဇာခြည်တို့ မမချိုတို့၏ စောက်ဖုတ်များက သက်သေခံလျှက်ရှိနေပါသည်။
အနံ့အသက်လုံးဝထွက်ခြင်းမရှိပါချေ။ ဇော်ရဲတယောက် အားပါးတရ စုပ်ပေးလျှက်ပေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ၁၅ မိနစ်ခန့်အကြာတွင်တော့ ဇာခြည်တယောက် လုံးဝခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဘဲ တကိုယ်လုံးကြက်သီးမွေးညင်းများထကာ ကာမအလိုဆန္ဒများ အဆုံးစွန်ပြည့်ဝသွားခဲ့ပါပြီ။ ထို့နောက် သီတာအား ဖင်ကန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ပေါင်ကြားထဲသို့ခေါင်းဝင်လျှိုကာ သီတာ၏ စောက်ဖုတ်အားလည်း စတင်စုပ်ပေးပါတော့သည်။ သီတာ၏စောက်ဖုတ်ကတော့ မမချိုနှင့် အနည်းငယ်ဆင်တူပါသည်။ စောက်စေ့အနည်းငယ်ရှည်ပြီး ဘေးနွုတ်ခမ်းသားလေးများက ပွင့်ဖတ်လေးနှစ်ခုပမာ တွဲကျနေပါသည်။ ထိုအဖတ်လေးနှစ်ခုနှင့် စောက်စေ့အား စုပ်လိုက်သည်နှင့် သီတာ၏ ဖင်ကြီးများ ပိုကော့သွားသည်။ ပက်လက်ဖြစ်နေသော ဇော်ရဲနှင့် ထောင်မတ်နေသော လီးကြီးအား မမချိုနှင့် ဇာခြည်မှ ထပ်ပြီး စုပ်ပေးနေပြန်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်တော့ ဇာခြည်တယောက် ဇော်ရဲလီးကြီးအား ကြောက်ရွံ့ခြင်း မရှိတော့ပါချေ။
ဇော်ရဲလီးကြီးနှင့် ဆက်ဆံရမည်ကို ကြိုတင်ပြီး ရင်ခုန်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ `ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ်၊ ကောင်းလိုက်တာ၊ အား ………ရှီး ……… သီတာ၏ညည်းတွားသံများဖြစ်ပါသည်။ ယောက်ျားရှိသော သီတာ့အဖို့ ဇာခြည်ကဲ့သို့ ကာမကို လွတ်မပစ်လိုက်ပါ။ ထိမ်းပြီးခံစားနေပါသည်။ ဇော်ရဲကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောသူနှင့်တွေ့သောအခါ သူ့စိတ်များကို အနိုင်နိုင်ထိမ်းထားရပါသည်။ မမချိုကလည်း ဇော်ရဲလီးကိုစုပ်ပေးနေရင်းမှ သီတာ၏ စအိုဝကို လက်ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးပြန်ပါသည်။ သီတာတယောက် ညည်းတွားစုပ်သတ်သံတို့ဖြင့် ကာမအရသာ၏ဒဏ်ကို အလူးအလဲခံစားနေရပါတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ မမချိုတယောက် ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးပေါ်သို့ခွကာ သူမ၏စောက်ဖုတ်အဝဖြင့် ဇော်ရဲ၏ လီးဒစ်ကြီးကိုတေ့ပြီး ဖြည့်ညင်းစွာသွင်းနေပါသည်။ သီတာလည်း အတန်ငယ်မောဟိုက်သွားသဖြင့် ဖင်ကုန်းထားရာမှာ ဇော်ရဲဘေးသို့ လှဲချလိုက်ပါသည်။ ဇော်ရဲက မမချိုကို သိုင်းဖက်ရင်း နံရံသို့ ကျောမှီလိုက်ပါသည်။
မမချိုကတော့ သူ့တင်သားအိအိဖြူဖြူကြီးများဖြင့် အားယူကာ ဇော်ရဲ၏ လီးတချောင်းလုံး စောက်ဖုတ်တွင်းဝင်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။ စောက်ဖုတ်တွင်းမှ ကာကအရည်များအကူအညီဖြင့် ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးတချောင်းလုံး ဝင်သွားချိန်တွင်တော့ မမချိုပါးစပ်မှ ညည်းတွားသံများ အဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာနေပြီဖြစ်သည်။ အချက် ၅၀ ခန့်မျှ ဆောင့်ပြီးချိန်တွင်တော့ မမချို အတန်ငယ်မောဟိုက်လာသဖြင့် စောက်ဖုတ်တွင်းမှ လီးကြီးကိုနွုတ်ကာ ဘေးသို့ စောင်းလှဲချလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် သီတာက လီးကြီးကို စုပ်ပေးနေပြန်ပါသည်။ ထို့နောက် သူမသည်လည်း မမချိုကဲ့သို့ပင် အပေါ်မှခွကာ စောက်ဖုတ်ဝဖြင့် လီးဒစ်ကြီးကို တေ့လိုက်ပြန်ပါသည်။ သူမကတော့ မမချိုကဲ့သို့ နေ့ခင်းမှ အတွေ့အကြုံမရှိသေးသဖြင့် အဆင်မပြေလှပါ။ လီးဒစ်ဝင်ရန် အတော်ကြိုးစားရပြီး နောက်ထပ်သွုးရန်ခက်နေပါသေးသည်။ ပါးစပ်မှလည်း …. `အား …. ကျွတ်ကျွတ် နာလိုက်တာမောင်လေးရယ်။ နာလိုက်တာ။ မမ မင်းဒစ်ကြီးလောက်နဲ့ပဲ နေပါရစေတော့နော်။
အဆုံးထိမသွင်းလိုက်ပါနဲ့` မမချိုကတော့ ထိုအချက်ကို ပါးနပ်စွာဖြင့် သီတာ့စောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး တံတွေးများစိုရွဲနေအောင် သုတ်လိမ်းပေးလိုက်သည်။ ပြီးနောက် သီတာ့စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ ပြန်သွင်းပေးလိုက်ပြန်သည်။ ယခုတကြိမ်တွင်တော့ သီတာ့စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ တဝက်ခန့်ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတော့သည်။ ထိုတဝက်မျှနှင့်ပင် အချက် ၂၀ ခန့်မျှဆောင့်ပေးပြီးသောအခါ သီတာ့စောက်ဖုတ်ထဲမှ ကာမအရည်များ ကောင်းစွာစီးဆင်းလာပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဇော်ရဲတယောက် သီတာ၏ ကြီးမားသော တင်သားစိုင်ကြီးများကို ကိုင်ကာ အနည်းငယ်ကော့ပေးလိုက်သည်နှင့် ဇော်ရဲ၏ ကြီးမားလှသောလီးကြီးတချောင်းလုံး သီတာ၏စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတော့သည်။ `အား …. ကောင်းလိုက်တာမောင်လေးရယ်၊ ဒါပေမယ့် နည်းနည်းတော့ အောင့်တယ်။ သားအိမ်ကိုသွားဆောင့်တယ်ထင်တယ်` `ကောင်းသွားမှာပါ မမရယ်၊ ခဏနေရင် အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ။` ဟုဇော်ရဲက ကာမခိုးတွေဝေနေသော အသံများဖြင့် ပြောလိုက်သည်။ ထို့နောက် သီတာ၏ နို့အုံကြီးကို ပွတ်ချေရင်း အပြန်အလှန်ဆောင့်ပေးနေကြသည်။
မမချိုကတော့ ဇော်ရဲနှင့်သီတာ အချက် ၂၀ ခန့်မျှဆောင့်ပြီးတိုင်း ဇော်ရဲလီးကို သီတာ့စောက်ဖုတ်တွင်းမှထုတ်ကာ ဇာခြည်တလှည့် သူမတလှည့်ဖြင့် စုပ်ပေးနေသည်။ သူမစုပ်ပြီးချိန်တွင် လီးကြီးကိုစောက်ဖုတ်တွင်းသို့ပြန်ထည့်ပေးပြီး ဇာခြည်၏နွုတ်ခမ်းများကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် လေးဦးစလုံး ကမ္ဘာလောကကြီးကို မေ့လျော့ကာ ကာမပွဲတော်ကြီးကို အပြိုင်အဆိုင်နွဲနေကြတော့သည်။ သီတာတော်တော်မောလာသဖြင့် ဇော်ရဲလီးကြီးအားနွုတ်ကာ ဇော်ရဲကိုယ်ပေါ်မှဆင်းလိုက်ပါသည်။ စောက်ဖုတ်တခုလုံးကတော့ ရွဲစိုနေပါသည်။ ထို့နောက် ဇော်ရဲလီးကြီးကို စုပ်ပေးပြီး `ကဲ ဇာခြည် မောင်လေးပစ္စည်းကို မြည်းကြည့်လိုက်ဦး` `ဟယ် နင်တို့ပြောပုံနဲ့ ငါကြောက်လာပြီ` ဟု ဇာခြည်က ရှက်ရွံ့သောဟန်ဖြင့် ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ဇော်ရဲက ဇာခြည်ကို ပက်လက်လှန်စေပြီး ဇာခြည်၏ ခြေချောင်းလေးများကို စုပ်ပေးပါသည်။ မဆွတ်ခင်ကညွတ်ချင်သည်ဆိုသည့် မြန်မာစကားအတိုင်း ဇာခြည်တယောက် ဇော်ရဲလီးကြီး သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲ မသွင်းမီကပင် ဖီလင်တွေတက်နေပါသည်။ ဇာခြည်၏စောက်ဖုတ်ကို နောက်တကြိမ်ထပ်ပြီး စုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
စောက်ဖုတ်အတွင်းမှ ကာမအရည်များ တံတွေးများဖြင့် ရွဲစိုနေမှပင် စုပ်ခြင်းလျှက်ခြင်းကိုရပ်ပြီး လီးကြီးကိုကိုင်ကာ ဇာခြည်၏စောက်ဖုတ်ဝကိုတေ့ထားလိုက်ပါသည်။ `မောင်လေး ဖြည်းဖြည်းနော်၊ မမအဖုတ်လေးကွဲသွားလိမ့်မယ်` ဇော်ရဲကတော့ စိတ်ရှည်သေသပ်စွာဖြင့် ဇာခြည်၏ စောက်ဖုတ်အဝကလေးကို တေ့ကာ သွင်းကြည့်လိုက်သည်။ ဇာခြည်၏စောက်ဖုတ်ဝက မမချို မသီတာတို့နှင့်မတူဘဲ တအားကြပ်နေသည်ကို သတိထားမိသည်။ ဇော်ရဲကတော့ စားနေကြကြောင်ပါးပီပီ စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ပြုမူရမည်ကို သိနေသည်။ လီးကြီးကို မမချိုပါးစပ်သို့တေ့ပေးပြီး စုပ်ခိုင်းလိုက်သည်။ မမချိုကလည်း အလိုက်သိစွာ တံတွေးများရွဲနေအောင်စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ဇာခြည်၏ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းသို့ ထပ်မံထိုးထည့်လိုက်သည်။ `အောင်မလေးလေး …. သေပါပြီမောင်လေးရယ်။ မမအဖုတ်လေးကွဲသွားပြီလားမသိဘူး။
နာလိုက်တာ` ဟုတ်ပါသည်။ ဇာခြည်နာမည်ဆိုလည်းနာလောက်ပါသည်။ ဇာခြည်၏ မို့ဖောင်းသော စောက်ဖုတ်အဝလေးဖြင့် မလိုက်ဖက်စွာပင် ဇော်ရဲ၏ လီးဒစ်ကြီးက ဝင်သွားပါသည်။ ချက်ချင်းပင် စောက်ဖုတ်နွုတ်ခမ်းသားများနီရဲလာပါသည်။ မမချို၏ တံတွေးများကြောင့်သာလျှင် ဤမျှဝင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စောက်စေ့ရဲရဲလေးကို လက်ဖြင့် ကစားပေးလိုက်ပြီး ခေတ္တမျှ ငြိမ်ပေးလိုက်သည်။ စောက်စေ့ကို ပွတ်သပ်ပေးသောအရသာကြောင့် ဇာခြည်တယောက် နာကျင်မွုများကိုမေ့လျော့ကာ အရသာထူးများကို စတင်ခံစားစပြုမိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် ဇော်ရဲတယောက် ဇာခြည်၏ ပေါင်များကိုပိုမြှောက်လိုက်ပြီး ဖင်ကြီး ၂ လုံးအောက်သို့ ခေါင်းအုံးတလုံးကို ခုလိုက်ပါသည်။ ထိုသို့ခုလိုက်သည်နှင့် စောက်ဖုတ်အဝမှ ပိုကျယ်သွားပြီး ဇော်ရဲ၏ လီးကြီးအား ပိုမိုဝင်ရောက်လာစေရန် ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီး လီးကြီးသည်လည်း ဇာခြည်၏ စောက်ဖုတ်လေးအတွင်းသို့ ၁ လက်မခန့်မျှ ဝင်သွားပြန်ပါတော့သည်။ ဇော်ရဲလည်း ဇာခြည့်အပေါ် မမချိုနှင့် မသီတာတို့ ၂ ဦးထက် ဂရုစိုက်နေရသဖြင့် ကာမအရသာကို ကောင်းစွာခံစားနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ သို့သော် ဇာခြည်နှင့် ဆက်ဆံရခြင်းအပေါ်တွင် အရသာတမျိုး ကောင်းစွာရရှိနေသည်ကိုတော့ သတိထားမိလိုက်ပါသည်။ စောက်ဖုတ်တိုင်း၏အရသာသည် ပြုမူဆက်ဆံခြင်းပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်သည်ကို ဇော်ရဲကောင်းစွာသိပါသည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့်မျှ စိတ်ရှည်စွာသွင်းပြီးချိန်တွင်တော့ ဇော်ရဲ၏လီးကြီးတခုလုံးနီးပါး ဇာခြည်၏စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။
`အောင်မလေးမောင်လေးရယ်။ နာလိုက်တာ။ အောင့်လည်းအောင့်တယ်။` ဟု ဇာခြည်က ရွုံ့မဲ့စွာဖြင့်ပြောလိုက်သည်ကို ဇော်ရဲတယောက် တပ်မက်စွာကြည့်နေလိုက်ပါသည်။ မမချိုက သူ၏လီးကြီးကို ဇာခြည့်စောက်ဖုတ်တွင်းမှနွုတ်ကာ ပါးစပ်ဖြင့် စုပ်ပေးပြန်ပါသည်။ မမချို၏ ကောင်းမွန်လှသောစုပ်ပေးမွုကို ဇော်ရဲကောင်းကောင်းခံစားလိုက်ပါသည်။ ထို့နောက် ဇာခြည်၏ တင်းကြပ်လှသော စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးထဲသို့ ထိုးသွင်းလိုက်ပြန်ပါသည်။ ယခုတကြိမ်တွင်တော့ ဇာခြည်တယောက် စောက်စေ့ကိုပွတ်တိုက်သော လီး၏အရသာ၊ သားအိမ်ကိုဆောင့်မိသောလီး၏အရသာ၊ စောက်ဖုတ်တခုလုံး တင်းကြပ်စွာထိုးထည့်ခံထားရသော အရသာတို့ဖြင့် ကာမအရသာကို စတင်ခံစားရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့အတူပင် မမချိုတို့သည်လည်း ဇော်ရဲနှင့် ဇာခြည်တို့၏ ဆက်ဆံနေပုံကိုကြည့်ရင်း ဇော်ရဲလီးကြီးအား အချက် ၂၀ ခန့် အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီးတိုင်း စုပ်ပေးရသည်ကို ကျေနပ်နေမိသည်။
ထို့နောက် ဇာခြည်၏ နီရဲနေသော စအိုဝ ဖူးဖူးမို့မို့လေးအား သီတာမှ လက်ဖြင့်ဆော့ကစားပေးလိုက်ပြန်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင်တော့ ဇာခြည်တယောက် လောကကြီးကို မေ့လျော့စပြုနေပြီဖြစ်သည်။ စိတ်နှင့် လူ မကပ်တော့သလောက်ပင်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဇော်ရဲလီးကြီး တချက်ထုတ်လိုက်တိုင်း လျှာဖျားကလေးဖြင့် ဇာခြည်၏စအိုဝကလေးကို တို့ထိကစားပေးလိုက်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဇာခြည်၏ ဖင်ကြီးတခုလုံး ကြွတက်ကော့ပျံလာပြီး ဇော်ရဲလီးကြီးအထုတ်အသွင်းပြုမွုအား ကူညီပေးသလိုပင်ဖြစ်နေပါတော့သည်။ ၁၅ မိနစ်ခန့် ကြာသောအခါ ဇာခြည်တယောက် ကာမအရသာအထွဋ်အထိပ်နီးပါမျှ ရရှိခံစားနေရပြီဖြစ်ပါသည်။
စောက်စေ့ထိပ်ဖျားမှ အရသာထူးကို ဆက်လက်ခံစားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ ထို့အတူ ဇော်ရဲ၏ အသွင်းအထုတ်များသည်လည်း ပိုမိုမြန်ဆန်လာပါသည်။ `အိုး မောင်လေးရယ် မမပြီးတော့မယ်၊ မမပြီးတော့မယ်။ အား …………………… ပြီး ……..ပြီ ………………..အား…………………. အိုး` ဟု အော်ကာ ဇော်ရဲကို တင်းကြပ်စွာဖက်ပြီး ပြီးသွားပါလေတော့သည်။ ဇော်ရဲတယောက်လည်း ဇာခြည့်စောက်ဖုတ်၏ တင်းကြပ်လှသောအတွေ့အထိထူးများနှင့် စောက်ဖုတ် ၃ ခုလုံးကို မနားတမ်းအသွင်းအထုတ်လုပ်ရသဖြင့် ကာမအထွဋ်အထိပ်ခရီးသို့ ရောက်ခါနီးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ `မောင်လေး မမပြီးသွားတော့ မခံနိုင်တော့ဘူး၊ မင်းရဲလီးကြီးကိုနွုတ်လိုက်ပါတော့နော်` ဟု ဇာခြည်ကတောင်းဆိုသဖြင့် သူ၏ လီးကြီးအား ဇာခြည့်စောက်ဖုတ်တွင်းမှ ညင်သာစွာနွုတ်ယူလိုက်ပါတော့သည်။ ထို့နောက်သီတာ့ကို လေးဖက်ကုန်းခိုင်းလိုက်ပါသည်။
သီတာ၏ အတန်ငယ်ညိုစိမ့်သော်လည်း ဝင်းနေသောအသားအရေကြောင့် ဖင်သားကြီးများမှာ ဝင်းအိနေပါသည်။ ဖင်ကြီး ၂ လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်တခုလုံးသည် နောက်ပိုင်းသို့လှပစွာထွက်လာပါသည်။ ဇော်ရဲက သူ၏လီးကြီးကို သီတာ၏စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ သွင်းလိုက်ပါသည်။ အင့်ကနဲ့ညည်းသံနှင့်အတူ သီတာတယောက် ခေါင်းအုံးများကို အလန့်တကြားဆွဲယူကာ သူ၏ နို့အုံကြီးများအောက်သို့ ပွေ့ပိုက်ထားလိုက်ပါသည်။ ဇော်ရဲကတော့ အရသာထူးများကို ဆက်လက်ရရှိလိုစိတ်ပြင်းပြစွာဖြင့် ထပ်မံဆောင့်သွင်းကာ အသွင်းအထုတ်များကို ယခင်ဆက်ဆံချိန်ကထက် ပိုမို၍ လုပ်ဆောင်ပါလေတော့သည်။ ယခုတခေါက် ဆက်ဆံရသည်မှာ သီတာအဖို့ လေထဲလွင့်သလိုဖြစ်နေပါသည်။ သားအိမ်အတွင်းမှအောင့်သော်လည်း စောက်စေ့ကိုလီးကြီးဖြင့် အဖန်ဖန်ပွတ်တိုက်သောကြောင့် ပြီးချင်စိတ်များဖြစ်လာပါသည်။
ဇော်ရဲသည်လည်း သီတာ၏ ကြီးမားလှပသောဖင်ကြီး ၂ လုံးကြားမှ စောက်ဖုတ်ကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ရသည့်စည်းစိမ်၏ အကောင်းဆုံးအရသာထူးကို ရရှိနေသဖြင့် ပြီးချင်စိတ်များဖြစ်နေပါပြီ။ သူတို့ ၄ ဦး၏ ဆက်ဆံချိန်ကလည်း ၁ နာရီနီးပါးမျှရှိနေပါပြီ။ ဇော်ရဲ၏ သုတ်ထိမ်းနိုင်မွုကိုလည်း သီတာနှင့် ဇာခြည် အံ့သြလို့နေပြန်သည်။ ဟုတ်ပါသည် ဇာခြည်၏ သတို့သားလောင်းဗိုလ်မှူးအောင်နိုင်ဝင်းကတော့ ပစ္စည်းကသေးပြီး သုတ်လွတ်တာကျပြန်တော့မြန်လွန်သည်။
ဇော်ရဲကတော့ ဤသို့မဟုတ် ကာမအရသာအကောင်းဆုံးပေးနိုင်သည့် မမကြီးတွေနှင့် ပင် သူ့စိတ်ကို ထိမ်းနိုင်လွန်းသည်။ ဇာခြည်တယောက် ဇော်ရဲ လီးကြီးကို စွဲမက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ `အား မမရေ ….. ကျွန်တော်ပြီးတော့မယ်။ ပြီးတော့မယ်၊ အရမ်းကောင်းနေပြီ၊ အရမ်းကောင်းနေပြီ။ အိုး …………… ရှီး ………………………..အား` `မောင်လေး …… မမလည်းပြီးတော့မယ်၊ မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးပါ၊ မမကွဲသွားရင်လည်း ကွဲပါစေတော့။ ပြီးတော့မယ်မောင်လေးရယ်။` သီတာကလည်း မောဟိုက်လွိုက်ဖိုစွာဖြင့် ဇော်ရဲ၏ ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ချက်များကို တောင်းဆိုလိုက်ကာ သူ၏ ကြီးမားသောဖင်ကြီးကို ကော့ပေးလိုက်သည်။
ဇော်ရဲတယောက် အပြင်ဆုံးနှင့် အကြမ်းဆုံးသော ဆောင့်ချက် ၁၅ ချက်ကို ရမ္မက်ထန်စွာဖြင့် သီတာ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဆောင့်ပေးလိုက်သည်။ ထို့နောက် ……. `အား ……….. ပြီး ပြီး ပြီးပြီ` ဟု သီတာမှရေရွတ်လိုက်ပြီး မရှေးမနှောင်းပင် ဇော်ရဲတယောက် သီတာ၏စောက်ဖုတ်တွင်းမှ လီးကြီးကိုနွုတ်ကာ သုတ်ရည်များကို ဖင်ကြီးပေါ်သို့ အားပါးတရ ပန်းချလိုက်ပါတော့သည် ………ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မခြောသုံးယောကျလိုအငျ